(မှတ်ချက် - ဤဆောင်းပါး၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များမြောက်များစွာကိုကြည့်ပါ)
ကလေးများသည်လိင်အကြောင်းအထူးသဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လေ့လာလိုခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ မျိုးပွားခြင်းသည် ဦး နှောက်၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်လာသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်အခြားတီးဝိုင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်စောင့်ကြည့်နေသည့်သူ (သို့မဟုတ်သူသည်မျိုးစိတ်အချို့မှ) သူ၏အပေါင်းအဖော်များမှထွက်ခွာသွားပြီးအခြားစစ်တပ်၏အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းမှုအောက်ရှိမဟာမိတ်များမရှိဘဲပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်မြှားမြားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အခွင့်အလမ်း အနာဂတ်၌ထူးခြားဆန်းပြားစတားမင်းသမီးနှင့်အတူကအပေါ်ရဖို့။ အဆိုပါအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇဗီဇမတူကွဲပြားမှုကိုအာမခံရန်ပြုပါ!
အခုဆိုရင်အင်တာနက် erotica ၏စိတျထူးခြားဆန်းကြယ်အသစ်အဆန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလူငယ်တစ်ကောင်လေးမှအစာရှောင်ခြင်း-forward:
ကျွန်တော် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာအင်တာနက် porn ကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုချိတ်ဆက်မိပြီးနေ့တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာကြည့်နေတယ်။ ရင်ဘတ်တစ်ထည်ကိုတွေ့ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုအနားယူရန်လုံလောက်သည် ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲစိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်လာပြီးညစ်ညမ်းမှုကနေတူညီတဲ့ခံစားမှုမျိုးရဖို့ fetishes တွေကိုစတင်တီထွင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်ကွဲပြားသောလူမျိုးစုများနှင့်စတင်ခဲ့သည်၊ လိင်တူချစ်သူများ၊ ထို့နောက်ရေကူးခြင်း၊ scat / beastiality / BDSM / tranny ။ ပြီးတော့စိတ်ကူးနိုင်သမျှသောအနာအဆာဆုံးရောဂါကိုဖန်တီးရန်အထက်ဖော်ပြပါမည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမဆို။ ကျောင်းမှာထိုင်ပြီးအဲ့ညမှာရှာဖွေလို့ရမယ့်ဖျားနာမှုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်နေမိတယ်။
ဒီကောင်လေးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ကဘာလဲ။ အဖြေ: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာယာယီအာရုံကြောမညီမျှမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဦး နှောက်၏“ လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် - လိပ်” အပိုင်းသည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးနေသည်။ “ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်” ဆိုတဲ့အပိုင်းကဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးလူကြီးဘဝမရောက်သေးဘူး။
တက်ကြွသောနှင့်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူအတွက်ဤစာရွက်သည်အခြားဆယ်ကျော်သက် - နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်စီစဉ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ လွတ်လပ်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာငယ်ရွယ်သောနို့တိုက်သတ္တဝါများစွာကိုမိတ်ဖက်များရှာဖွေရန်နှင့်နယ်မြေများကိုခွဲထုတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ကုန်ကျစရိတ် - အကျိုးအမြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ချိန်ခွင်သည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသည် ဖြစ်နိုင်သမျှဆုလာဘ်။
တစ် ဦး kicker သော်လည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုအသစ်များကို ၁၁ မှ ၁၂ ရက်အတွင်းမှိုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင်ဘီလီယံနှင့်ချီသောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှု (synapses) သည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများကိုဖန်တီးပေးသည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားဖြင့်သူ၏ ဦး နှောက်သည်သူ့အာရုံကြောဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကိုခုတ်လှဲရမည်။ သူ၏နှစ်ဆယ်ကျော်များကသူအတိအကျမဖြစ်နိုင်ပါ မှီဝဲ လိင် proclivities နှင့်အတူသူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသို့ကျရောက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ဦးနှောက်ကိုမလျစ်လျူရှုဖို့လွယ်ကူသို့မဟုတ်ပြန်လည်စီစဉ်ထားရှိရန်အတွက်နက်ရှိုင်းသော ruts ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue ထိတွေ့မှုကိစ္စရပ်များ ဘဝ၌အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်ထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာပိုပြီး။ အခုဒီလောင်ကျွမ်းနေသောအဖြစ်မှန်ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ဒီနေ့နံရံပေါ်ကရုတ်တရက်ထုတ်လွှတ်သောအလင်းရောင်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရည်ကိုထည့်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အချို့သည်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များအစား cyber အသစ်အဆန်းကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိကြသည်မှာအံ့အားသင့်စရာလော။ သို့မဟုတ်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာများအားသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအားကြိုးမဲ့ချည်နှောင်ထားသလား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်တွေကိုလျှော့ချပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် porn စွဲ?
စကားမစပ်, သင်သည်သင်၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုသတိရသောကောင်လေးတစ်ယောက်လား။ အဲဒီနှစ်တွေအတွင်းဘယ်လောက်အထိမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလဲ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ထူးခြားဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ရှိပါကဤဆောင်းပါးနှစ်ခုကိုဖတ်ပါ။ porn, အသစ်အဆန်းများနှင့် Coolidge Effect နှင့် porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ Porn၊ ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ ၎င်းကိုပေးပို့ပုံနှင့် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီနေ့သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အော်ဂဇင်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဒီထက်စိတ်ကျေနပ်မှု.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သို့တူးလိုက်တဲ့အခါ မြီးကောင်ပေါက်အပေါ်ဦးနှောက်သုတေသနကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဘယ်လောက်ပျော့မှာအလွန်တရာအံ့ဩကြ၏။ လိင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစွန်းရောက်အပြောင်းအလဲများကိုအခက်ခဲဆုံးသူတို့ကိုနှိပ်ပါ။ ဤတွင်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်မှထူးခြားသောလေးအားနည်းချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
1. အများကြီးပိုမိုအားကောင်း "ကရ! သွား!" အချက်ပြမှုများ
အဆိုပါဆုအစီအစဉ်သည် (libido အပါအဝင်) drive အားလုံး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ မနှစ်သက်ရာများ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လိင်ဟော်မုန်းများသည်ဤရှေးခေတ်တိုက်နယ်အားနှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်သည့် hyperactivity ပြတင်းပေါက်သို့တွန်းပို့သည်။ ဂျာနယ်လစ်အဖြစ် ဒါဝိဒ်သည် Dobbs တို့ကရှင်းပြသည်.
ငါတို့ရှိသမျှသည်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအရာများကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်သူတို့ကိုတန်ဖိုးမထားပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံခံမှုရှာဖွေခြင်းဟုခေါ်သောအပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်များဟုခေါ်သောအပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားအာရုံကြောဆိုင်ရာ buzz ကိုရှာဖွေခြင်း၊ …အသက် ၁၅ နှစ်ဝန်းကျင်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအချစ်။
ဦး နှောက်၏ dopamine နှင့်ထိတွေ့မှုသည်“ Gotta get!” အသစ်ရှာဖွေခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမွှေးများကစီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးကူညီသည် သင်ယူမှုကိုခိုင်မာအောင် နှင့်အလေ့အထများ။
တကယ်တော့, ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိဘာမှတုံ့ပြန် လေးကြိမ်မှနှစ်ကြိမ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏အကျိုးကို-circuitry activation သူတို့ရဲ့အပို dopamine sensitivity ကိုကျေးဇူးတင်နှင့် dopamine ၏ပိုကြီး spikes။ အသစ်အဆန်းများနှင့်ရှာဖွေခြင်း / ရှာနှစ်ဦးစလုံး dopamine နှုန်းကိုမြင့်တက် in အားလုံး လူ့ ဦး နှောက်၊ ဒါပေမယ့် cyber erotica ရဲ့အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကဆယ်ကျော်သက်များစွာအတွက်မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တယ်။
ငါခံစားချက်ဤလောကထဲကပဲ ineffable ဖြစ်သလိုပဲသူတို့အားပူဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ရုတ်တရက်ကျွန်မအရာအားလုံးကို, နေ့စဉ်ဘဝပဲပျင်းစရာကြီးအသက်ရှင်ရကျိုးနပ်တစ်ခုခုရှိခဲ့သိတယ်။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: ငါကဒီအတုမူးယစ်ပြေးကြ၏။ ဒါဟာနာရီနေ့အဘို့ porn စောင့်ကြည့်ဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။
“ မတတ်နိုင်ဘူးလား” ဟုတ်တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်အခြားအမြင့်ဆုံးများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည် Transcendental, အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံများကို. ထို သင်သည်ပထမဆုံး centerfold ၏တောက်ပနေသောအသေးစိတ်အချက်များကိုမှတ်မိနိုင်သေးသည်။ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းပိုရှိကြောင်းသက်သေသာဓကများစွာရှိသည်။ (ချဲ့ရန်ဇယားကိုနှိပ်ပါ။ )
2. ခြင်းကိုမနှစ်သက်မှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွား
သောကြာနေ့ညတွင် World of Warcraft တွင် 4AM အထိကစားခဲ့ပြီးပီစီအချပ် ၈ ခုနှင့် Mountain Dew ခြောက်ခုပါသည့် Dorritos အိတ်တစ်လုံးကိုဆေးကြောစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းသည်စနေနေ့ညတွင်ထပ်မံပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ သုတေသနပြုချက်အရဆယ်ကျော်သက်များသည် ဒီထက်တားဆီးရန် ပိုလျှံ၏လက္ခဏာများသည်။ ခြင်းကိုမနှစ်သက်အကျိုးကို-circuitry function ကိုဖြစ်ပြီး, ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့ဆားကစ် Overload မတိုင်မီပိုပြီး wattage ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်
အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်တွေးမိ တုတ်ဓား + ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ (လိင်)2 = နွေရာသီ Box ကို-Office ကိုနှိပ်ပါ? ဒါဟာအားလုံး၏အံ့ဖွယ်ဆင်းလာ ဦးနှောက်ကို။ လူကြီးများသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော“ eeeew” သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုကိုတွေ့ရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်များကအခြားယူနိုင်စွမ်းလျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ လူတွေရဲ့ခံစားချက် အကောင့်သို့ (တောင်မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကို) ။
ငါ ၁၄/၁၅ ရောက်တုန်းကအင်တာနက်ကိုဝင်ကြည့်ရင်း [လိင်ခြားလိင်တူချင်းချစ်ခြင်း] ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါကြော်ငြာ၏ဂရပ်ဖစ်သဘောသဘာဝမှတ်မိသေးတယ်။ ငါ့အ pubescent ဦး နှောက်ထဲမှာတစ်ခုခုပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သောဖြောင့်မတ်ပြီးလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သာမန်ဖြစ်ပုံရသည်။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကစပြီးပြေးလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကတုန်နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရုံတင်မကအချို့သော ၁၀၀% မှန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်းဖမ်းမိမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းက ပို၍ အမှတ်ရစရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒီနေ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါငိုနေတာကိုသတိရမိတယ်။ ငါ့အပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်၊ ငါ့အိပ်ခန်းထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးထချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်မပေးခဲ့ပါဘူး ငါဟာမိန်းကလေးတွေကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲနေတုန်းပဲ။
3. အားပျော့သော“ Stop!” အချက်ပြမှုများ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆယ်ကျော်သက်များခံစားသိရှိနိုင်ရန်အစပျိုးပေးသောလိင်ဟော်မုန်းများသည်ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်၏ချုပ်တည်းမှုစင်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည် Ferrari အင်ဂျင်နှင့် Ford Pinto ဘရိတ်များတပ်ထားသောကားသစ်နှင့်တူသည်။
အပျိုဘော်ဝင်ချိန်တွင်အလွန်ထိရောက်သော“ အရှိန်” သည်အွန်လိုင်းပေါ်လာသည် - ဦး နှောက်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ယန္တရားသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်တုံတရား cortex အောက်တွင်တည်ရှိသည့် circuit circuit အတွက်ဆုလာဘ်။ ဒါဟာ အဆိုပါ "ဘရိတ် overpowers, ဦး နှောက်၏“ စီအီးအို” သို့မဟုတ်နဖူး၌ prefrontal cortex၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်။ နောက်တစ်ခုသည်အန္တရာယ်ကိုအကဲဖြတ်သည်၊ ရှေ့တွင်စဉ်းစားသည်၊ ဦး စားပေးရွေးချယ်သည်။ အာရုံစိုက်မှုကိုပေးသည်။
ဤအတောအတွင်းဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏသူတို့ရဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအခြေခံ စိတ်ခံစားမှု Impulses သတင်းပို့ ဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆန့်ကျင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် prefrontal cortex ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ“ သူလုပ်ခဲ့တာကိုသူမယုံနိုင်ဘူး” အချိန်လေးနည်းပါးလာလိမ့်မည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချ၍ စိတ်ဓာတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပိုမိုထိရောက်စွာစီစဉ်ခြင်းနှင့်မှတ်မိခြင်းများပြုလုပ်သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းဆယ်ကျော်သက်များသည်“ ယင်းသို့သွားခြင်း” ၏အကျိုးဆက်များကိုသိရှိရန်အခက်တွေ့ကြသည်။ တနည်းကား, ဒီမတော်တဆမှုမဟုတ်ပါဘူး။ Daredevil သဘောထားတွေ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မျိုးစိတ်များကိုအစေခံ။ ၄ င်းတို့အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ရှာရန်အတွက်စွန့်စားမှုများယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူသားများအနေဖြင့်ဆင့်ကဲအစဉ်အလာသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အမြန်ကားများ၊ အဖျော်ယမကာများ၊ အွန်လိုင်းကစားနည်းများ (သို့) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုများအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အချိန်မရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒါဝင်ဆုတွေရတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့, 10 နှင့် 13 တစ်ဦး၏အသက်အရွယ်အကြား ဝေဖန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလကျနော်တို့လူသားမြားသအသက်အရွယ်-သင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပရောနှင့်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျွမ်းတဝင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတွေးပုံစံများကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာစေရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ hone ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးသည်။ အခြားသူများကိုခိုင်ခံ့စေနေချိန်မှာဒီလိုဆောင်ရွက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကတကယ်တော့, အသုံးမပြုတဲ့အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုပပျောက်ရေး။
ထို့ကြောင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်! မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့သည်အတူတကွဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏ရှေ့တန်း cortex ၏ရွှံ့စေးကိုထုလုပ်သည်။ use-it-or-lost-it ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှ ဦး နှောက်သည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည်
ကောင်းစွာအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းခိုင်ခံ့စေနေစဉ် cortex သုတ်သင်ပယ်ရှင်းအနည်းငယ်သာ, ဆားကစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရုပ်ဆိုးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ် axon အာရုံကြောများ၏မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်, myelin နှင့်အတူပိုကောင်း insulator တွင်လည်းဖြစ်လာသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိကြောင်း Little ကအကိုင်းအခက် (ကိုခေါ် dendrites) ပိုကောင်းဝင်လာသော signal ကိုနားထောငျစပျစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့အပေါက်ပါဘူး။ axon နှင့် dendrite အကြားဆက်သွယ်မှု (synapses) ခိုင်မာတဲ့ဆားကစ်ပေါ်မှာများပြားခြင်းနှင့်အားနည်းသောသူတို့ကိုမအပေါ်ကွယ်ပျောက်။ အဆုံးမှာ သင်အချိန်များ၏စမ်းသပ်ရပ်ကြောင်းအမှတ်တရများ, ကျွမ်းကျင်မှု, အလေ့အထများ, ဦးစားပေးများနှင့်ဖြေရှင်း၏နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။ (Ibid ။ , Dobbs တို့က, အလေးပေးထည့်ပြီး)
ဒီထက်မီးအသုံးအနှုန်းများမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ-မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး, pubescent, အာရုံခံတိုးတက်မှုနှုန်း spurt စဉ်အတွင်းခဲ့ကြသည်ဘယ်လောက်အရေးပါသဘောပေါက်တားမြစ်ထားသည်။ သုတေသီအရ ဂျေး Giedd, (ဒီဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပါ - အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute မှဒေါက်တာဂျေး Giedd ) ဂျေး Giedd အားဖြင့်
ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်ဂီတ၊ အားကစားသို့မဟုတ်ပညာရှင်များကိုလုပ်ဆောင်နေပါက၎င်းတို့သည် hardwired ခံရမည့်ဆဲလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများဖြစ်သည်။ သူတို့အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေရင်ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ၊ MTV [သို့မဟုတ်အင်တာနက် porn] တွေကိုကစားနေရင်၊ သူတို့ဟာရှင်သန်မယ့်ဆဲလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပါ။
ဤအချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းက၎င်းတို့အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုမေးမြန်းခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသောကလေးများသည်၎င်းတို့အားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုမသိပါ။ (“ သူတို့ကိုယောက်ျားကဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့တာလဲ” ဟုမေးမြန်းသကဲ့သို့) သူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်စရာဘာမှမရှိပါ။ အဟောင်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများကိုကြီးထွားသည့်အချိန်၌ပင်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မချိတ်ဆက်ကြောင်းသတိရပါ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (PISD) ။ porn သည်အမြဲတမ်း“ cure” ကဲ့သို့သောပုံဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်လိင်မှုကိစ္စအတွက်မတက်နိုင်လျှင်ပင်များသောအားဖြင့်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလျှင်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တက်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကထွက်တွက်ဆမျှော်လင့်နိုင်ပါသလား?
ခံစားချက်အပေါ် porn ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ သူတို့ကိုမေးနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာ။ အသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုအသုံးပြုလေတောင်မှအသုံးပြုသည့်အခါ“ ပိုမိုသက်သာ” လာသည် ပိုဆိုးသူတို့ခံစားရ ခြုံငုံ။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာအဖြစ်ရှုမြင်ခံရမလဲ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ, သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံဒါအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်, ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရက်သတ္တပတ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအစားအဖြေများအတွက်မှားနိုင်ပါသည်။
အမှန်မှာ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပိုလျှံမှုမှနံရံများထိမှန်ရန်ကြိုးစားနေသောလေးလံသောအသုံးပြုသူအများစုသည်သူတို့၏နှစ်ဆယ့်နှစ်ဆယ်မတိုင်မီအထိထိုသို့မပြုလုပ်ကြပါ။ သူတို့၏ဆုိုင်ရာအခြေအနေသည်၎င်း၏အာရုံခံစားမှုခံစားမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အချိန်လောက်သာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသောသူများအတွက်ဆုသောတိုက်နယ်ရှိ dopamine receptors များသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားသည် တတိယတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝက်။ ယခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပါ၊ ပိုလျှံမှု၏အကျိုးဆက်များသည် ပို၍ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ သဘာဝတရား၏ခြေသည်အရှိန်မြှင့်အရှိန်မြှင့်ပိတ်ထားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မုဆိုးစုဆောင်းသူသည်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်အချို့ကိုအခြေချရန်နှင့်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ပဲငှက်တို့သည်သို့မဟုတ်ပျား, pixels ကိုအဘယ်သူမျှမကျေးဇူးပြုပြီး
ဤအတောအတွင်းအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖြစ်ပါတယ် စုံလင်သောမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းအဘို့အသီးမှည့် မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အသစ်အဆန်းအတွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအင်တာနက်၏အဆုံးမဲ့အန္တာတိကတိုက်နှင့်တိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Hypnotic Web-surfing သည်မည်သည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှမလိုအပ်ဘဲ scrolling လုပ်ခြင်းနှင့် fapping လုပ်ခြင်းအားဖြင့်မျိုးနွယ်စုမှထွက်ခွာ။ မြေသြဇာကောင်းသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေရန်အစားထိုးသည်။
ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ သူမကသူမ“ တစ်လျှောက်လုံးလမ်းဆုံး” ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည် Reaper သည်ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေသကဲ့သို့ကွန်ဒုံးများကောက်ယူရန်အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်သို့သွားခဲ့သည်။ လုပ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက်“ ဟမ်…ဒါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့လုံးဝမတူဘူး၊ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလိုချင်တယ်။ Meh, ငါညစ်ညမ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်နှင့်မိန်းကလေးနှင့်အတူနှောင့်အယှက်မပေး။
ငါ့အတွေးတွေအတိအကျ နောက်ကျောနာကျင်မှု, ကြွက်သား strain, အသက်ရှူခြင်း, ချွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ တစ်ခုတည်းကိုသာခွဲထုတ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်“ သံလက်သီး” သည်သင့်အားယောနိထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထိုမျှမကသင်သည် 'porn girlfriend' နှင့်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောအမြင်ကိုရရှိသည်။ လှပသောကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဌာန်များအားလုံးကိုပြည့်စုံသောအလင်းရောင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရင်သား n 'butts n' ပေါင်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးအမြဲတမ်းမြင်နိုင်သည်။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌ဖြစ်ခဲသောအရာ။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ခဲ့တာကကျမတကယ်မပျော်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သည်မည်မျှအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုစဉ်း စား၍ အောင်မြင်မှုတစ်ခုခံစားခဲ့ရသင့်သည်။ သို့သော် ဒါဟာအတုခံစားရတယ်။ ဒါဟာကျွန်မ tad အမှားတစ်ခုခုဖြစ်ကောင်းရှိခဲ့သိခဲ့ထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့ * စိတ်ကို * အတွက်လိင်အမြဲ sexy နှင့်ပျော်စရာသလိုပဲ။ ငါရှိခဲ့ * အစစ်အမှန် * လိင်အဓိကအားစက်မှုဇုန်နှင့် unexciting ဖြစ်ခဲ့သည်။ မကောင်းဘူး။
ယနေ့ဆယ်ကျော်သက်များသည်တခါတရံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သဘာဝမဟုတ်သောပြင်းထန်သော၊ ဒြပ်ဆွဲအားလှုံ့ဆော်မှုများကိုတကယ့်မိတ်ဖက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မကြိုးစားမီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာ၎င်းတို့၏နှိုးဆွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (စာမျက်နှာများကိုကြည့်ပါ Self-အစီရင်ခံစာများ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုကြည့်ပါ။ ) ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏အပြစ်ကင်းစင်စွာဂျိုလီကိုလိုက်စားခြင်းကပိုမိုအခြေခံကျသော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အခါအခြေအနေသည် ပို၍ ဆိုးဝါးသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ စှဲမွဲမှု။ တနည်းကား, ဆယ်ကျော်သက်များမှာ နောက်ထပ် သူတို့ရဲ့ hyperactive ဆုလာဘ် circuitry နှင့်နုအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်လူကြီးများထက်စွဲမှဖြစ်ပေါ်နိုင်။
မိမိအမျက်နှာပြင် (s) ကိုမှလျှက်ရှိကြောင်းစဉ်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသော, လူငယ်တစ်ကောင်လေးသည် မဟုတ် ပိုးပန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်း။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူသည်တကယ့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များ - အချိန်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များကြီးထွားမှုအတွက်တာ ၀ န်များ - အတွက်အချိန်မဖြုန်းပါ။ သူ့ ဦး နှောက်က မဟုတ် ပရောပ, pheromones သို့မဟုတ်သာမန်ခြင်း simulation ပေးသာမန်အချိုးအစားသုံးခုရှုထောင်မိတ်ဖက်ရန်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး wiring ။ လွန်ကာလ၌, ဦးနှောက်အာရုံကြောငယ်ရွယ်လူတို့သညျ Kamas န္တာန်တိမှဘွဲ့ရမတိုင်မီနည်းနည်းဘို့တ-on-one, vanilla လိင်မှတဆင့် fumbled ။ အခုတော့တစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်ကညာသူမ၏မိတ်ဆွေများကနှစ်ခုပါဝင်သော, လက်ထိတ်ခတ်, သိုင်းကြိုး-အပေါ်ဂီယာနဲ့ lube ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအဖြစ်သူ၏ပထမဦးဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မည်ဟုယူဆသည်။
မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတစ်ဦးအနာဂတ်ရည်းစားမှဒေါသမီးသူ၏သရုပ်မရှိခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မည်, မိမိအနွမ်းစိုက်ထူ နှင့်ကွန်ဒုံးတွေလည်းရှိတတ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကိုကူးယဉျအားဖြင့်ခဲယဉ်းနေပါကသူ့လွန်မိပြီကြိုးစားမှု စောင့်ကြည့် တစ်ယောက်ယောက်ကလိင်ဆက်ဆံတယ်။ သူဘာကြောင့်မတုံ့ပြန်တာလဲ၊ ပျက်စီးတာကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာသူမသိဘူး။ သူ၏ရွယ်တူများလည်းမပြုလုပ်ပါ။
ငါတကယ်ကြောက်တယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက်သိတဲ့အတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ (ဒါတွေဟာငါတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှစ်ခုပါ။ သူတို့လုံးလုံးလျားလျားကျရှုံးမှုပါ) ငါ့ ဦး နှောက်ကိုအရမ်းရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီးဒါကငါဘယ်တော့မှပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ ဆိုလိုတာက၊ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပါ။ ငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးပုံဖော်တဲ့နှစ်တွေထဲမှာတော့ငါဟာ porn ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ငါ့ ဦး နှောက်သိတယ်။ သာမန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်ရနိုင်မည်လား။ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိထို pixel များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်သာမန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်မည်လား။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တာကိုတကယ်ကြောက်တယ် ငါပြောင်းလဲလို့ရမလား
ဝမ်းနည်းစရာ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များစွာသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်လှည့်စားရန်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးကြသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်ယောက်ျားလေး ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြင်သစ်လူငယ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကဘာကြောင့်လဲ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်အတွက်အကျိုးစီးပွားမပါ? US ကသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့် abstinence နှုန်းထားများ တိုးပွားလာလျက်ရှိသည်?
ယနေ့ ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိသူ၏လိင်လမ်းကြောင်းကိုအမာရွတ်များ၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Dad ၏ Sally နှင့်သူ၏မြေသြဇာကောင်းသောစိတ်ကူးကိုရင့်ကျက်စေသည်။ အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PISD (ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု) မှလူငယ်များထက်ပိုမိုလျှင်မြန်သောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်ကိုတွေ့ရ။ အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဆယ့်လေးဆယ်လေးဆယ်အတွင်းမှာအင်တာနက်မတိုင်မီကအစစ်အမှန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကောင်းစွာတည်ထောင်ထားလို့လား။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစက်တင်ဘာလ ၂၀၁၅ တွင် TEDx စကားပြောမှုကိုအချိန်ပိုလိုအပ်သော porn-induced ED နှင့် anorgasmia ကိုကျော်လွှားရန် / ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောလူငယ်တစ် ဦး ပြောသောစကားကိုကြည့်ပါ။
သတင်းကောင်းမှာ ဦး နှောက်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ပင်ပလတ်စတစ်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ဓာတုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို (သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း) ၂-၃ လလုံးလုံးရပ်တန့်လိုက်သောအခါသူ၏ ဦး နှောက်၏ပြန်လည်ကောင်းကျိုးများသောတိုက်နယ်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိလာသည့်လိင်အင်္ဂါများကိုရှာဖွေရန်စတင်လာသည်။ ပြီးနောက်၎င်း၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးသည်မျိုးရိုးဗီဇကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်၊ တဖြည်းဖြည်းနှင့်သဘာဝအချက်များအတွက်အာရုံခံလမ်းကြောင်းကို ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်စင်တာသို့ပိုမိုအားကောင်းလာစေသည်။ နောက်တံခါးကမိန်းကလေးကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
တစ်ဦး 21 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးသုံးလ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းပြီးနောက် said:
ငါအဆိုးရွားဆုံးသောလိင်ဆက်ဆံမှုကာလများနှင့် porn -related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကာလများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းခံရသည်ဟုမခံစားရကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအားပြောခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသေးသည်။ သူမကတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့် OMG ကအရမ်းခံစားရတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုခံစားနိုင်ပြီး, ကြီးလှ၏။ ကျွန်တော့်ရဲ့ penile sensitivity ကဝန်တွေတိုးလာတယ်။ ငါ့ဘဝမှာပထမဆုံးအပျိုစင်ဘဝပျောက်သွားသလိုခံစားရတယ်
[အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်] နေ့ 43 ယခုငါကျိန်းသေယခုငါ၏အ arousal ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုမြင်လျှင်, ထက်ငါထသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်မပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်သူမ၏ကိုမြင်လျှင်ငါ နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်။ ယခုတွင်ငါသည်ပူပြင်းသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်။ 'ဤအရာသည်ငါလိုချင်သောအရာ' ဖြစ်သည်။ သူမနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်ခလုတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်ပစ်လိုက်သည်။ အဲဒီမှာ ၉၀% လောက်ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀%၊ ၂၀% စတာတွေပေါ့။
ယနေ့ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ငယ်ရွယ်အနောက်တိုင်းသား feverishly များမှာ အာရုံခံဆက်သွယ်မှုကိုမှေးမွူ အင်တာနက် porn အားလုံးထုံးစံနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအကြား။ တစ် ဦး ချင်း၊ မပြောင်းလဲသော၊ အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်နှိုးဆွမှုသည်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်တော့ပါ။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အဆက်မပြတ်ပျင်းရိငြီးငွေ့မှုကိုပိုင်ရှင်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အချို့သည်သူတို့၏အရသာကိုသံသယဖြစ်စေသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည် အခြေခံလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့.
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ထူးခြားသောကာလဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်၎င်းသည်မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်နိုင်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတို့ကိုပြုလုပ်သည် မုဆိုးစုဆောင်းတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဘယ်လောက်များများရချင်နေစေကာမူသူတို့ဟာဘန်ပါကားမောင်းသမားတွေလိုပါပဲ။ သူတို့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုအိမ်နီးချင်းဟိုတယ်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှကြိုးမဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဒီနေ့ကလေးများ၏ ဦး နှောက်သည်တူညီသောစိတ်အားထက်သန်မှုရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့၏ခလုတ်များအားလုံးကိုတွန်းအားပေးသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်ပေးသည့်эрရိုတီကာများနှင့်အတူအလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ အသစ်အဆန်းကိုနှစ်သက်ခြင်း၊
လူကြီးများသည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်မကင်းဟုယူဆလေ့ရှိပြီး၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင်မွေးဖွားသောယောက်ျားအရေအတွက်မည်မျှရှိသည်ကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်ခန့်တွင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် hard-core, အဆုံးမဲ့ဝတ္ထု ယခုရရှိနိုင် porn?
ငါ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းကလိုပဲငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ ငါခုခံတွန်းလှန်ရုံနဲ့အခုသိပ်လုပ်နေပြီ။ ငါအခုရပ်တန့်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးဘဝ၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျောင်းအဆင့်များကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုထင်သောကြောင့်၎င်းကိုရပ်တန့်လိုပါသည်။ ငါဘယ်လိုရပ်ရမလဲ။
အရွယ်ရောက်သူများတွင်လည်းကလေးများသည်လူကြီးဘဝတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုမကြာခဏယူဆကြသည်။ အမှန်စင်စစ်လေ့လာမှုများအရကောလိပ်အရွယ်ကလေးများသည်အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ အိုးအသုံးပြုခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများသည်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုကျော်လွှားသောလူငယ်များသည်အသက် ၁၁ နှစ်တွင်နေ့စဉ်သောက်သုံးရေကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သလား။
 အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝတုန်းကကျွန်တော့်အမေကကျွန်တော်တို့ကိုစာကြည့်တိုက်ထဲခေါ်သွားတဲ့အခါခေါ်ဆောင်သွားမယ့်ဝတ္ထုတစ်ခုကိုရှာတွေ့ဖို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဟောပြောချက် / ဖော်ပြချက်သာကျွန်ုပ်ကိုသွားစေနိုင်သည်။ ထိုနေ့ရက်ကာလကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လောက်အထိတောင့်တသလဲဘုရား။ ယနေ့သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရပါတယ်။ ယခုတွင်၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှု / ဆုလာဘ်ထက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းတာလဲ ငါညစ်ညမ်းဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားကန့်ကွက်ရှိသည်။ တကယ်တော့အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သင်ကငါ့ပြည်နယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ဒါဟာအပြုသဘောမဟုတ်တော့ဘဲကြီးမားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာပဲ။ ငါ့လည်ပင်းတစ်ဝိုက်မှာကြီးမားတဲ့အဆီကျောက်ဆူး။
သတိရပါ၊ အရက်သောက်ရန်သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးသို့တက်ရန်သင်ယူခြင်းသည် ဦး နှောက်၏အဓိကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာမဟုတ်ပါ။ မျိုးပွားသည်။ အစားအစာအလေ့အထကပိုကောင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိသူများသည်သူတို့၏ပုံမှန်အစားအစာရွေးချယ်မှုကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပစ်သလား။ ယခုအညစ်အကြေးများသည်နေရာအနှံ့သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သောအမေရိကန် ၅ ယောက်တွင် ၄ ယောက်သည်အဝလွန်ကြသည်။ အဝလွန်သူများ၏ထက်ဝက်နီးပါး (ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်) ။ သူတို့၏အမြစ်စွဲနေသောလိင်အရသာကိုသူတို့ပြောင်းလဲသလား။ သူတို့ PISD ၏နံရံကိုထိမှန်မဟုတ်လျှင်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချိန်ကတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူဟာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုတက်ကြွသော၊ အချို့သောသူများကလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေဖြင့်အရာဝတ္ထုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအဆောက်အအုံများရှိနေစဉ်“ မျက်နှာများ” ကိုနှစ်သက်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဝမ်းနည်းစရာမှာသုံးစွဲသူရာခိုင်နှုန်းသည်စွဲလမ်းမှုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နေသည့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းထားများအရကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ များသည်။ ဤနှုန်းသည် ၆-၁၈% ဖြစ်ပြီးအီတလီ၊ တရုတ်၊ ဟန်ဂေရီတို့မှသုတေသနပြုမှုအပေါ်မူတည်သည်။
အမြားအပွားအားဖြင့်, လေးလံသောအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရှိနေဆဲဟုသက်ရောက်မှုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားအပေါ်သက်ရောက်မှုမှအလားတူဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ Overstimulation တစ်ဦးနှင့်အတူဦးနှောက်အရွက် ပြင်းထန်သောဆွဘို့အလိုအပျ (ကသတိရှိရှိပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်နေသည်မဟုတ်လျှင်) ။ သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်။ ဤတိုတောင်းကို TED ဟောပြောချက်ထဲမှာ ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို? နာမည်ကြီးစိတ်ပညာရှင် Philip Zimbardo ၏ကျယ်ပြန့်သော“ နှိုးဆွသောစွဲလမ်းမှု” ၏ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည်။
ထိုသို့သောဆိုးကျိုးများသက်ရောက်မှုဆက်ဆံရေး။ constant အသစ်အဆန်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဦးနှောက်တစ် superstimulus သည်သုဒ္ဓအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါ်မှီခိုကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားလေ့ကျင့်ရေး aphrodisiac အဖြစ်အသစ်အဆန်း အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့ luster- ဆုံးရှုံးကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများသည်အခြေအနေနိုင်ပါတယ်ထိခိုက် confining အသုံးပြုသူများသည် ရေတိမ်ပိုင်းချိတ်-ups ရန်။ ဒါ့အပြင်လိင်၏ non-ထှတျအထိပျရှုထောင့် (အရေပြားမှအရေပြားကိုထိတွေ့, နမ်း, etc လေဖြတ်ခြင်း, ပျြောအပြုအမူ, နှစ်သိမ့်) အဖြစ် Delicious ကြိုးမှတ်ပုံတင်ရန်လွန်းကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်သိမ်မွေ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီဦးနှောက်နှင့်အကူအညီနဲ့ဝေဒနာတွေသောအလွန်အပြုအမူတွေများမှာ စုံတွဲများမိမိတို့၏ငွေချေးစာချုပ်များကိုခိုင်ခံ့စေ.
ပထမယောက်ျား - ဖြစ်နိုင်တာကကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သောပုံများကိုကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီးထိုင်ရတာအဆင်ပြေပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်သွား။ သူတို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။ ကျွန်မအိပ်ရာထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတာကငါ့ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေတယ်။
ဒုတိယကောင် - ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသုံးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါ့သမိုင်းပုံတွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်နာရီအတွင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတခါတလေကြည့်မိတယ်။ ငါ [အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော] ကြောင်းညာဘက်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ပုံရိပ်ကိုရှာနေတာပါ။ Porn သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုထိခိုက်စေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ငါသည်ငါ့ကြီးမားသောအင်တာနက် Harem ထင်ပါတယ်။
ဦးနှောက် plasticity ပညာရေး
ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းမရှိဘဲမည်သူမျှယနေ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမလွတ်မြောက်သင့်ပါ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းထူးခြားသောအားနည်းချက်များ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ i-Phones နှင့်အွန်လိုင်း erotica တို့ကထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သောအခါဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်အပေါ်အလွန်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်နောက်ကွယ်ရှိရိုးရှင်းသောသိပ္ပံပညာကိုကလေးများကိုဘာကြောင့်သင်ပေးမလဲ? (ကြည့်ပါ Porn အကြောင်းသင်မသိသောအရာ, 10-13 နှစ်ကြားရှိများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်သောသဘောတရားအဘို့။ )
ဒီနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေတစ်ခါမှမစဉ်းစားမိတဲ့ကျပန်းလိင်စိတ်နိုးထစေသည့်ရုပ်ပြောင်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် porn ၏ကာတွန်းကာ 2D D လှုံ့ဆော်မှုသည် Santa ကဲ့သို့နီးပါးမျှသာမဟုတ်ကြောင်းသိပေမည်။ သို့သျောလညျး gonzo porn themes များမှအထွတ်အထိပ်မှသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကြိုးမဲ့သူကိုတခါတရံထိတ်လန့်နေကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောကောက်ချက်ချသူများဖြစ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်အကူအညီတောင်းရန်ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေကြတယ်။
အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ကျပန်းဝယ်ယူမှုအကြားခြားနားချက်ကိုနားမလည်သောအကြံပေးသူများသည်ပလပ်စတစ်အရသာသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏စိတ်ကိုတိုးစေနိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာကျွမ်းကျင်သူအနည်းငယ်သည် ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်မှုန့်အကြောင်းကလေးငယ်များပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်စေရန်ကူညီခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်စွာမသိသေးသောကြောင့်အချို့သောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည် စိတ်မကောင်းပါဘူးအကွံဉာဏျ။ (ကြည့်ပါ - Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်)
pubescent ဦးနှောက်သူတို့ရှာကြံ-မပါဘဲနေကြသည် porn ထုတ်လုပ်သူများအဘယ်သူ၏ဦးနှောက်များကြည့်ရှုဆွဲဆောင်မှအပေါ်မှီခိုရ implausible ကးလေးတွေအချက်အလက်များနှင့်အကဲဆတ်သောသတင်းအချက်အလက်ပေး, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာတက် wiring စတင်ရန်သွားကြသည်နှင့်အမျှ ထုံစိုက်ပျိုး သိမ်မွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးရန်။ ကလေးတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအကြားခြားနားချက်ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့နှစ်ခုအစွန်းရောက်ဆွ၏လေ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းထဲကချော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကို behavioral- သင်ပေးစွဲနိမိတ်လက္ခဏာများ မှုအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့, ဘယ်လို reverse မှ သူတို့အားအပြောင်းအလဲများကို။
[၁၇ နှစ်တွင်အားနည်းသောဆေးများဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီးနေ့ ၅၀ တွင်ညစ်ညမ်းမှု / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်နိုင်သည့်နေ့ ၅၀ တွင်စိုက်ထူနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြသနေဆဲဖြစ်သည်။ နေ့ ၇၆ ။ ယနေ့နံနက်သစ်ပင်သည်ရယ်စရာကောင်းလှသော်လည်းမတ်တပ်ရပ်သည်အထိမိနစ် ၂၀ မျှပင်မတ်တပ်ရပ်နေသည်။ ငါရက်ပေါင်း ၉၀ ပေးမယ်။ ငါ ၃ လလုံးလုံးလုပ်ပြီးပြီ။ ငါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သင့်ပြီးမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှာရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်သက်သာရာရ။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တွင်သိပ္ပံနှင့်ဆေးပညာသင်ကြားမှုရှိပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်သောအမြင်သည်ထွက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်အတွင်းမှာဇီဝကမ္မပြproblemsနာတွေခံစားနေရတဲ့လူငယ်တွေကိုပညာပေးဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့မိရင်ကောင်းမှာပဲ။
ငါနောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ထိုသို့စဉ်အတွင်းငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၌ porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်
ငါအသက် ၁၅ နှစ်မှာစပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပြီး၊ ၁၆ နှစ်မှာ porn ကိုစကြည့်တော့တယ်။
ငါကစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သော7နှစ်အဘို့, ထိုအချိန်မှစ။ ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတသမတ်တည်းမှချွတ်လူရှုပ်နေခဲ့တာ။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်မကြိုးစားခဲ့ / r / nofap တော်တော်အစွဲအလမ်း, ထို့နောက်ငါတှေ့ / r / pornfree နှင့်ပိုမိုအရေးကြီးသောပြissueနာခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်; ခြောက်လကြာနေသော်လည်းငါမရှောင်လွှဲနိုင်ဘဲအမြဲတမ်းပြန်လာပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ, ဒါဝေးကိုငါ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၌အမှန်တကယ်ကျွန်မအဖြစ်ဖော်ထုတ် / r / foreveraloneနှင့်အစွန်းနီးပါးသော်လည်းတစ် ဦး / r / incel နီးပါး။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ပြင်းထန်သောမိမိကိုယ်ကိုပုံရိပ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပြissuesနာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုအထီးကျန်ဆန်သော၊ ကြောက်လန့်သော၊ မိမိကိုယ်ကိုရွံမုန်းဖွယ်၊ မကျေနပ်မှု၊
ဒါကငါ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်, ငါ၏ဘဝကြီးနှင့်ငါနောက်ဆုံးတော့တစ်ဦးမောင်းများ၏အမြန်ဆွဲနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်ပစ်ရန်အရဲစွမ်းသတ္တိကိုတက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသောအခါငါယူဆရနောက်ငါးသို့မဟုတ်ဒါနှစ်အတွင်း, ငါသေဆုံးနေ့ရက်တိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ခဲ့ အစားသောက်သုံးခြင်းနှင့် Self-အားဖျက်ဆီးခြင်းများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ငြင်းဆန်၏နှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်၏။
ထိုအခါသုံးလအကြာ, ဘယ်နေရာမှာများထဲက, ဒီမိန်းကလေးအရာရာကိုပြောင်းလဲသွားသူကိုငါ့အသက်ကိုဖွင့်ပြသခဲ့သည်။
ယခုငါတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ကုသမှုခံယူရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်လက်ခံရန်သင်ယူသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်လူမှုရေးဘ ၀ ရှိသည်၊ ဤမိန်းမနှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်မိသည်မှာသေချာသည်။ သူမသည်ကျွန်မထက် ၁၂ နှစ်သာလွန်သော်လည်းသူမနှင့်မတူပါ။ သူမသည်သူမအငယ်ကိုကြည့်, အငယ်ပြုမူ။ ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်အသက်အရွယ်ယောက်ျားလေးအများစုထက်ကြည့်ပြီးပြုမူပြောဆိုတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာပြီးတော်တော်လေးမြန်ဆန်တဲ့အလွန်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည် ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံး shit မှတဆင့်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုမှားယွင်းတဲ့ဘ ၀ တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသပြီးအသက်ရှင်ခြင်းဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အံ့သြစရာ၊ ရှုပ်ထွေးမှု၊ ရွှင်လန်းမှုနဲ့ရံဖန်ရံခါပေမယ့်မလွှဲမရှောင်သာနာကျင်မှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လေးနက်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ငါမသေချင်တော့ဘူး ငါအသက်ရှင်ချင်တယ်, ငါသူမနှင့်အတူဘဝတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်နှစ်တွေတစ်လျှောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီဝိသေသလက္ခဏာဟောင်းပျောက်သွားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီမှာရှိနေတုန်းပဲ။ ငါ့ဘဝရဲ့ ၂၃ နှစ်လုံးလုံးရင်းနှီးမှုနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေကင်းမဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုငါ့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုထိမိခဲ့သလဲဆိုတာကိုမင်းယောက်ျားတွေကိုမင်းကိုရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူး။ နက်နက်နဲနဲသိသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်နှင့်ရှုပ်ထွေးနေပြီး၎င်းကိုပုံ ဖျက်၍ အရာဝတ္ထုများအားလုံးကိုမမှတ်မိလောက်အောင်ပုံသဏ္intoာန်များဖြင့်လှည့်ဖျားနေကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ကျွန်မအကြောင်းကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကဖို့ဆွဲဆောင်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ခံစားမှု, အပြည့်အဝကိုငါ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အနှစ်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ပျက်စီးပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို, ငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံး။
v-card ဆုံးရှုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်တာကငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့ပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်သည်။ ငါလုံးဝမပြီးနိုင်ဘူး ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူမတစ်ကိုယ်တည်းသွားနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့သော်လည်းသူဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းသည်ကိုသူမသိသောကြောင့်၎င်းသည်လုံးဝအေးဆေးစွာနားလည်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမဝတ်ဆင်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းအဝတ်အစားများပြတ်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားသည်။ ရုတ်တရက်ငါသူမသည်မဖြစ်နိုင်စုံလင်သောအလောင်းတွေနှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာသောမိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းသောမိန်းကလေးများမဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ သူသည်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါသူမ၏ချစ်ကြတယ်။ ငါသူမကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုကြိုက်တယ်၊ သူမအပြုံးကိုချစ်တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ဂရုစိုက်ပြီးသူမသည်သူနှင့်မည်မျှချစ်ကြောင်းအမြဲပြောလေ့ရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းမှအပကျွန်ုပ်သည်လည်းကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။
ငါစာသားလိင်စဉ်အတွင်းနှိုးဆော်နေဖို့နိုင်ဘူး။ အခက်အခဲမရှိဘဲကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနေခဲ့ရတယ်၊ ထိုအခါငါဘာမှမခံစားရဘူး။ ပါးစပ်မှာမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကာလနှင့်တစ် ဦး တည်း၌သာလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရ။ အဲဒါဟာကျွန်မနဲ့ကျွန်မလက်ဖြစ်ရမယ်၊ ပိုဆိုးတာကအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်နေတာကကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးပါ။ သူမဘာပဲလုပ်လုပ်သူမကိုဘယ်လောက်ပဲကြည့်ကြည့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းဘာမှမခံစားရပါ။ ငါခံစားချက်မျှမရှိ, လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်သွားခဲ့ပါသည်။
နှစ်ခါစလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းမှဖြစ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ခါစလုံးကသူမနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူခဲ့ဘူး ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ်လေးကကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲကိုကျသွားတယ်။ ဒါကငါပယ်တယ်ဘယ်လောက်။ ငါ့ခေါင်းထဲမှာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ရတယ်။
အဲ့ဒါ fuck ဆိုတဲ့
ဒီကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်အခြားအရာအားလုံးထက်ကျွန်ုပ်ကိုပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသောဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမသည်ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့သူ၊ ကျွန်ုပ်သည်နက်ရှိုင်းသော၊ နတ်မင်းကြီးအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်ချစ်သောသူဖြစ်သည်။ သူမဟာကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။ ကျွန်မသူမကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမနဲ့အတူကျွန်မဟာဒုတိယအကြိမ်သူ့ကိုလွမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ခေါင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားနေတဲ့ဒီအပိုင်းကအခြားမိန်းကလေး ၁၀၀ ကိုသူမအပေါ်ပိုချစ်စေချင်တယ်၊ ငယ်ရွယ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ ငါ့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ ငါဂရုမစိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတခြားသူနဲ့မတွေ့ရသေးဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုကြုံတွေ့ရဖို့အခွင့်အရေးမရသေးလို့ပါ။
ဒါကသူမနဲ့အတူရှိနေခြင်း၊ သူမနဲ့သူမအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပ်နှံတာကိုမသေချာစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာပဲ။ ငါကြည့်နေတဲ့ပူပြင်းတဲ့မိန်းမတိုင်းကိုတံတွေးထွေးစေတဲ့ဟုန်းဟုန်းဟုန်းဟုန်းဟုန်းဟုန်းမြည်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုခံစားနေရတုန်းပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခဲ့သည် အားလုံးကြည့်ရတာ။ ငါ့ကိုလှည့်စားပြီးထွက်သွားစေသည့်ဤအရာအားလုံး၊ အထူးစိတ် ၀ င်စားစရာများနှင့်အစပျိုးပေးသောအရာများ၊ ထိတွေ့မှု၊ ထိတွေ့မှု၊ အနံ့မရှိ၊ အရသာမရှိ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိပါ။ ရုပ်ပုံများနှင့်အသံများသာဖြစ်သည်၊ ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်သူ့ဟာသူကြိုးပမ်းနေသည်။
ငါတကယ်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ တကယ်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ၊ ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူး၊ နှိုးဆွမှုမရှိဘူး၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဗလာကျင်းမှု၊ ထူးခြားမှုတစ်ခုခုရှိသင့်တဲ့နေရာ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလိုချင်သောအရာများရရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး ၈ နှစ်တာကာလကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာယခုမိမိကိုယ်ကိုအဆက်ပြတ်နေပြီးရှက်ကြောက်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါကိုယ်တိုင် ပြီးတော့သူမနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာငါလိုချင်လာရင်ဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါလုပ်သမျှအားလုံးဟာငါ့အတွက်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ငါ့လက်တော့ပ်ကိုဖွင့်ထားတယ်။
ငါရှေ့မှာမျက်နှာပြင်မရှိရင်တောင်မှပုံတွေရှိနေဆဲပဲ။ သူတို့ကိုငါဆင့်ခေါ်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ညည်းညူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်မျက်လုံး၌ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုကြည့်နေစဉ်သူမသည်ငါနှင့်အတူရှိနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မသိသောဟိုတယ်အိပ်ခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်တွင်နေနေစဉ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုအလိုအလျောက်ခေါ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် cum လုပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ငါဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်တဲ့အခြားမိန်းမနှင့်ရေချိုးခန်း။ ကျွန်တော့်ကိုနာနေတယ် ဒါဟာစာသား cheat နဲ့တူခံစားရ၏။ လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ် ၃၀ လောက်ကပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီးအော်ဂဇင်ပြုခဲ့တယ်၊ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ အနတ္တဆန်သလိုခံစားရတယ်၊ အမြဲလိုလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ ​​ငါ့ရည်းစားကမြို့ထဲကလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ၊ ငါသူမအပေါ်သစ္စာမဲ့ခဲ့တယ် ငါသူမကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ကလူတိုင်းအတွက်မျက်စိပဲ။ ငါ shit လူသား၏အပိုင်းအစပေါ့
(လေ့လာချက်) "တုပနှင့် cathartic သက်ရောက်မှု: ဘဝသင်တန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု"ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထိတွေ့မှုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ပိုမို၍ အကြမ်းဖက်နှိမ့်ချစေသည်။
(ဗီဒီယို) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက် - ဒေါက်တာဂျေး Giedd နှင့်စကားပြောသောနေရာ
Adriana သွပ်ရည်စိမ်မှာ: အဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲသို့ဝိပဿနာ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: တိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးကအလုပ် (အဖြစ်မှန်စာရွက်) NIH
FRONTLINE - ဆယ်ကျော်သက်များကမ္ဘာနှင့်မတူသည့်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခု - နုသော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်း
ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အတွင်းပိုင်း (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်)
အဆိုပါဦးနှောက်: ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနှင့်အတူအဆိုပါ Trouble
လေ့လာမှု: ပူပန်လိင်စိတ်နိုးထ (1983) တိုးပွါး
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝေဖန်ကာလသင်ယူဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်: လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ကလေးမွေးမြူ
လိင်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'သဘောထားအပေါ် erotica ဖို့ထိန်းအကွပ်မရှိသော access ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
YBOP တင်ဆက်မှု: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ
လေ့လာချက် - လိင်အင်္ဂါ Cortex: လိင်အင်္ဂါ Homunculus ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2019)
အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်မတူဘဲ "sensory homunculus" ၏လိင်အင်္ဂါသည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်သိသိသာသာကြီးထွားလာသည်။
ကန ဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုကိုပုံသွင်းခြင်းသည်၎င်းသည်ကြီးမားသောထူးကဲသောအလေးချိန်နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လိင်အပေါ်အမြင်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။။ ...
လေ့လာ - အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2019) မှ၎င်း၏ထူးခြားသော sensitivity ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 25 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 50 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ) ။ နောက်ထပ်စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 10 လေ့လာမှုများ.
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုအဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ? (2011)"
10 မှာ 11 / 2011 / 9: 36 ညနေ
ဗြိတိန်အသုံးပြုသူများကို web porn ဘို့အတွက်ရွေးချယ်ရမယ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူလေးယောက်သည်ဖောက်သည်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်လိုပါက ၀ င်ရောက်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းသည်။
BT, ဗာဂျင်းမီဒီယာ, Sky နှင့် Talk ကို Talk ကိုတို့၏အညစ်အကြေးကနေကလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အစိုးရနှိမ်နင်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်တိုင်းတာရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ဝဘ်ကုမ္ပဏီကြီးများမှတက်လက်မှတ်ထိုးဖောက်သည်သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်သလဲဆိုတာကိုကန့်သတ်မယ့်လေလံအတွက်အကဲဆတ်သောဆိုက်များပေါ်တွင် log နိုင်တော့မည်ချင်ရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်မိခင်များသမဂ္ဂ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Reg Bailey ၏အစိုးရမှထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရကလေးသူငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံခြင်းပြofနာကိုဖြေရှင်းရန်ယနေ့ကြေငြာသည့်လှုပ်ရှားမှုများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိသားစုများအလံတက်မီဒီယာ offending နိုင်သောနေရာ - လေးဒေးဗစ်ကင်မရွန်လည်း Parentport ကိုခေါ် website တစ်ခုပြသလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ site ကိုမိဘများအင်တာနက်အကြောင်းအရာ, တီဗီအစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာ, ဗီဒီယိုများ, ကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကလေးငယ်များမှစျေးကွက်ခံအဝတ်အစားတွေအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ကြားမှုများမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအစမသင့်လျော်မီဒီယာနှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်နှိမ့်ချ clamping များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အားပြိုင်မှုကိုဆက်သွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် ၀ န်ကြီးချုပ်သည်ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ၏အကြံပြုချက်များအပေါ်တိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အားပြိုင်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊
ဒါ့အပြင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအနီးရှိစာသင်ကျောင်းအဖြစ်ကလေးများကသူတို့ကိုကြည့်ဖို့များပါတယ်ဘယ်မှာတည်ရှိသည်လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, ကန့်သတ်ခြင်းငှါ, Advertising ကြော်ငြာစံနှုန်းများအာဏာပိုင်များကလွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်းထုတ်ဝေအသစ်သောလမ်းညွှန်ချက်များ, ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်အသက် ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများအား“ peer-to-peer” ကြော်ငြာကိုဖေ့စ်ဘွတ်လိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့်သူငယ်ချင်းများသို့ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချရန်ကုမ္ပဏီများကကလေးများခေါ်ယူစုဆောင်းထားသည့်ကြော်ငြာကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ဇွန်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောမစ္စတာဘေလီ၏အစီရင်ခံစာကခေတ်သစ်ဘဝသည်ကလေးများအားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစားသုံးရန်နှင့်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွင်ပါဝင်ရန်ဖိအားပေးမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။
12 မှာ 01 / 2011 / 5: 49 ညနေ
Reuniting ထံမှ comments: PMO vs. Puppy မတ်ေတာသညျ
PMO vs. ခွေးကလေးမတ်ေတာသညျ
ငါ "ခွေးကလေးချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ရလိမ့်မည်ဟုသောအခါငါပြန်ငယ်ရွယ်သောနှစ်ပေါင်းပြန်စဉ်းစားခြင်းနှင့်ငါတကယ်ခံစားချက်တွေကိုလက်လွတ်။ PMO ကိုစလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီခံစားချက်တွေပြန်ပေါ်လာတာပဲ။ သင်ကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းကသူတို့လိုချင်တပ်မက်တာကိုပြန်စဉ်းစားမိလို့ပါ။ ငါထင်တာကခွေးကလေးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတချို့ဟာပတ်ပတ်လည်မှာကပ်နေတယ်ထင်ပေမယ့်မင်းက PMO ထဲကို ၀ င်နေပြီးအဲ့ဒီလူကိုသင်လိုချင်တဲ့တပ်မက်မှုအပိုင်းကအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။
ရယ်စရာကောင်းတာကငါ့အသက် ၂၀ ကျော် (နှောင်းပိုင်းအသက် ၃၀ ကျော်ခါစ) တောင်မှငါခွေးကလေးကိုချစ်နေတုန်းပဲ။ ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာရှိခဲ့တာငါသတိရတယ် (အများစုကငါထင်တယ်) အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်ငါစိတ်ပျက်သွားတာကိုမရိပ်မိပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာတပ်မက်စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေရှိခဲ့တာကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ သူတို့ကသဘာဝပိုအပြစ်ကင်းတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တွေဟာသူမနဲ့လက်ကိုကိုင်တာ၊ နေဝင်ချိန်မှာလမ်းလျှောက်တာ၊ သူမမျက်စိကိုကြည့်တာစတာတွေပါ ၀ င်မယ်။
PMO သည်ခွေးကလေး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ဆန္ဒကိုသင်၏စိတ်ထဲတွင်မှတ်မိနေပြီး PMO နှင့်အတူစိတ်ပျော်စရာပါ ၀ င်သည့်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် PMO နှင့်အတူရှိနေသည်။ PMO သည် Bizarro Superman ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာနှင့်မတူသူသို့မဟုတ်ရူပဗေဒနိမ့်သူသို့မဟုတ်ပျမ်းမျှပုံပန်းသာသူတစ် ဦး ဦး ကိုသင်ချိန်းတွေ့လိုပါသလား။
PMO သင်ဘုံဆွဲဆောင်မှုလူတစ်ဦးအတွက်ဘာမျှချိန်းတွေ့ကြပါလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သည့်သူငယ်ချင်းများကိုလည်းအဘယ်အရာကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းထင်နှင့်ဝသကဲ့သို့, ထိုလွန်းအရေးကြီးသောဖြစ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု play ပုံပါဘဲ။ ဒါအပေါ်ယံလူတိုင်းစောင့်ရှောက်။ ငါ matrix ကို (ပြန်ဖွင့်) မှ unplugging တစစ်မှန်တဲ့သော့ချက်ပုံပါဘဲ။
02 မှာ 13 / 2012 / 10: 07 ညနေ
ဒီ site ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများနှင့်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုယခုငါခဏလေ့လာနေသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တော်တော်များများလိုပဲငါဟာငါ့ရဲ့ဆင့် (၂) ဆင့်တန်ဖိုးကိုသာအကောင့်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရေးသားသူနှင့်အသုံးပြုသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်ဤကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကခုန်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချက်အလက်များအများအပြားပြသရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတိတ်အခြားသူများထက်ငါ့အဘို့ဤအသဘောတရားများကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာထွန်းလင်း။
ကျွန်မအသက် ၂၁ နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကောလိပ်အလုပ်သင်မှာဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်အပြာရောင်မျက်လုံးတစ်လက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာပွင့်လာတာနဲ့အမျှပထမလမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ တစ်နေ့ကျတော့သူမရှေ့မှာရှိနေတဲ့မြှားကရိုက်သလိုငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင်အမဲသားနဲ့ပူပြင်းတာကိုခံစားရတယ်။ နောက်နှစ်နှစ် (သူမငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်) သည်ငရဲပြည်ဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်။ အိပ်ပျော်ရန်မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ငါနှလုံးခုန်ခြင်း, အိပ်မပျော်, အလေးအနက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ခံစားခဲ့ရတုန်လှုပ်, pallor, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအိပ်မက်ထဲမှာစွဲနေသလိုမျိုး၊ ငါထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲလေလေအိပ်မက်ကကျွန်ုပ်ကို ပို၍ ပြင်းထန်စေသည်။ သူမသည်အခြားယောက်ျားတစ် ဦး နှင့်ရေတိုဆက်ဆံရေးကိုနှစ်လခန့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသန်းခေါင်စာရင်းညနေခင်း၏ပုံရိပ်များသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်စိတ်ကူးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထဲမှာတွေ့ရတဲ့လိင်အယူအဆတွေကြောင့်ကျွန်မစိတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုအလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်မှာနှောက်ယှက်စေတယ်။ လိင်ပညာရေးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှသာခံယူထားသောအပျိုစင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သူမအနိုင်နိုင်သိသောယောက်ျားလေးတစ် ဦး ၏ fuck ဆိုတဲ့မျက်နှာကိုမင်းရဲ့ဘဝချစ်ခြင်းမေတ္တာကတစ်ညပြီးတစ်ညဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ဟူသောအတွေးကကျွန်တော့်ကိုကျော်စေခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်မှားယွင်းနေသောအရာများကိုပြန်တွေးတောနေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောမေးခွန်းများစွာ၏အဖြေများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကတည်းကရွယ်တူချင်းများကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည့်အချိန်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၂ နှစ်တွင်ငါဘာကြောင့်ချစ်မိခဲ့တာလဲ။ ဒီအချက်မတိုင်ခင်အထိငါတကယ်ဘ ၀ မှာဘယ်သူကိုကြိုက်ခဲ့တာလဲ။ ထိုအချက်သည်ငါ့မျက်လုံးကိုမထိမှီတိုင်အောင်မည်သူမျှမည်သို့လာရောက်လာသနည်း။ အခြားသူများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည်ဘွဲ့ရှိလူများကိုအဘယ်ကြောင့်မကြိုက်သနည်း။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာရုတ်တရက်ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်သလိုမျိုးပဲ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစဉျးစားဆငျခွနှင့်အတူလာမယ့်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တိုင်းတာ။ မရ၊ မရနိုင်သောနယ်မြေသို့ကျွန်ုပ်သွားနေခြင်း၊ အနည်းဆုံးမည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်နည်းနှင့်မျှတိုင်းတာ။ မရပါ။ ဦး နှောက်ကိုရပ်တန့်ပြီးစိတ်စတင်သည်ကိုမည်သူမျှမသိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောငွေကြေးမှာအကြွင်းမဲ့ရိုးသားမှုနှင့်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်မသက်သေပြနိုင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှရိုးသားပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါရပြီအားလုံးပဲ
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ငါပင်မစီးပွါးရေးနှင့်မတူသည့်အကြောင်းအရင်း * မှာကျွန်ုပ်အမေနှင့် ဦး လေးတို့ကဲ့သို့ပင်တရားဝင်နှောင်းပိုင်းတွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မီအထိ၊ အလွန်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးများကလိင်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ခဲ့သည်။ မဖြစ်နိုင်လောက်သောပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးများ - PlayBoy၊ porn စသည်တို့အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင်မည်သူမျှဤမဖြစ်နိုင်လောက်သောမြင့်မားသောစံနှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ပြီးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရှားပါးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး (ဆိုလိုတာကနမ်းခြင်း၊ cuddle၊ မိတ်ကပ်၊ caress, hump) ။ ကိုယ့်သူတို့ကိုလိင်အားဖြင့်နှိုးဆော်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျမြင်တယ်။ သို့သော်လှပသောလူကိုအသိဥာဏ်ရှိရှိအသိအမှတ်ပြုခြင်းထက်ခံစားမှုတွင်အမှန်တကယ်ကွာခြားမှုမရှိပါ။ သူတို့ကကျွန်မနဲ့အတူတူပဲ
ကျွန်တော့် ၁၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်မီနှစ်လအလိုတွင်၊ ကျွန်မရဲ့အကြီးတန်းအတန်းထဲမှမိန်းကလေးသုံးယောက်ဟာကျွန်မမျက်လုံးကိုဖမ်းစားမိသည်။ အဲဒါကိုနှိပ်စက်မှုလို့ခင်ဗျားခေါ်မလားတောင်မသိဘူး။ "စိတ်ဝင်စားသည်" ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲ့တာတွေကခဏပျောက်သွားပြီးကျွန်တော်ကအိမ်ကနေမိုင် ၃၀၀၀ ဝေးတဲ့အိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။
ကောလိပ်ပထမနှစ်တွင်မိန်းကလေးများကိုစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏လိင် / ချစ်ခြင်းဘ ၀ သည်ဗီရိုဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်သည်ပုရစ်၊ မြွေဆိုး၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဟုတ်မဟုတ်ကိုတွေးမိသည်။ ငါကျောင်းနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များအပေါ်အလွန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်စဉ်းစား, ငါကအများကြီးစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ အသက် ၁၉ နှစ်ရောက်တော့ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတကယ့်အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ အဲ့ဒီနောက်တောင်မှကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုလူတစ်ယောက်ကစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်နယူးယောက်ရှိအေးစိမ့်သောဆောင်းရာသီများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်ခံစားချက်အများစုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Ergo၊ ဒီအရာကငါနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာတောင်မရှိဘူး။
ထို့နောက်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဘာမျှမ ငါတရားဝင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနားသတ်မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
မတူကွဲပြားခြင်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်သဘာဝသိပ္ပံလေ့လာမှုများတွင်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးမျိုးစိတ်များ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။ တနည်းအားဖြင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားရန်ရည်ရွယ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့၏မတူကွဲပြားမှုများမရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးပွား။ မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးရဲ့အောက်မှာပြုပြင်ဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်စစ်မှန်သောချွတ်ယွင်းမှုကိုထူးခြားမှုမှမည်သို့ခွဲခြားသနည်း။
ဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်မတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကိုအဘယ်ကြောင့်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းအချို့ကိုအဖြေရှာရန်ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဟယ်လင်ဖစ်ရ်ှသည်ကျွန်ုပ်ထိမိခဲ့သောပထမ ဦး ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်သူမ၏သုတေသနငါ၏အမေးခွန်းများကိုအဖြေအချို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူမကလူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထားလေးမျိုးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သော (ဒါရိုက်တာ / testosterone ဟော်မုန်း၏ရလဒ်) သည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအပေါ်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့စိတ်တွေကအတိအကျပဲ။ သူတို့လုပ်ပေးဘာမှတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးသူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၏အကျိုးစီးပွားသည်အလွန်နက်ရှိုင်းပြီးကျဉ်းမြောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသောလူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြင့်အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်သည်။ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အတူတူပင်သူမကဆိုသည်။ သူတို့ဟာကျပန်းချိန်းတွေ့တာကိုသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့လိုချင်တာကိုမရမချင်းမရပ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာချိန်းတွေ့ခြင်းနဲ့မပေါင်းသင်းခဲ့ဘူးလို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ၂၂ က ၂၂ ကငါ့ရဲ့စရိုက်ပဲ။ ငါပေါ့ပါးတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအနှောင်းပိုင်းတွင် bloomer ဖြစ်ခြင်း, ထိုထည့်ပါ။
သို့သော်ထိုထက်မကရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်နားမလည်လို့ပဲ။ ရော်ဘင်ဝီလျံပြောခဲ့သည့်အတိုင်း“ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းကင်တမန်ကိုမြေကြီးသို့ချထားခဲ့ပြီ” ဟုတစ်စုံတစ်ယောက်အားယုတ်ညံ့စေသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။ အလားတူပင်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရုပ်ရှင်များတွင်ဇာတ်လမ်းများကိုသတ်ဖြတ်သော်လည်းမျက်မြင်သက်သေတစ်စုံကသူသည် Pixels များကိုအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲကြည့်နေသည်ကိုနားလည်သောကြောင့်အမှန်တကယ်အိပ်စက်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးပါ။ ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုများစွာမစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ဒါကတကယ့်လူတွေဖြစ်တဲ့တကယ့်ကမ္ဘာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာလို့ကျွန်မတကယ်မထင်ခဲ့ပါ။ အားလုံးလူတိုင်း။ ဒီသဘောပေါက်နားလည်မှုကကျွန်တော့်ကိုလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တကယ့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှငါလုံးဝပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဟန်မတူတဲ့အရာတွေပါ။
၁။ တကယ့်ဘဝလိင်ဆက်ဆံဖက်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အသားအိတ်များအဖြစ်မမြင်ပါ။ လိင်မှုဆိုင်ရာပညာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြီးပြင်းလာသည့်ကလေးများသည်လူကြီးများက“ ပေးသော” များသာဟုယူဆသောအရာများကိုနားမလည်ကြပါ။ လူငယ်တစ်ယောက်သည်တိပ်ဖြင့်လိင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်သောအခါငါကဲ့သို့ပင်၊ လိင်ဆက်ဆံသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခံစားချက်ရှိသည်ကိုသူနားမလည်ပါ။ သူမြင်သောအရာသည်ပါ ၀ င်သူများက“ တွေ့မြင်သည်” နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသူနားမလည်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကချစ်ခင်တွယ်တာမှုများကိုမြင်သည်၊ ဘယ်တော့မှအရူးအမူးမလုပ်ဖူးသူ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်သမတ်တည်းကြည့်ရှုသူတစ် ဦး အတွက်၊ သင်သည်သင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြည့်သောအခါသူသည် LITERALLY ကိုအသားတစ်အပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်ဟုယုံကြည်လာသည်။ လူတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါင်နှံဖို့ရုတ်တရက်တိရိစ္ဆာန်ဆန်ဆန်လှုံ့ဆော်မှုတွေရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လာခဲ့တယ်။ ဒါကလူတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ“ အမဲသားတစ်ခွက်” လို့ပြောလိုက်ရင်လူအများစုကငါဟာအနည်းဆုံးဥပစာစကားဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရှိရှိနဲ့ယူဆတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့လိင်ဆက်ဆံသူအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမိနစ် ၃၀ ကြာတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်လာကြပြီးကိုယ်ခံဖို့အတွက်လိင်အင်္ဂါတွေကိုပါးစပ်ထဲထည့်ဖို့အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်, ငါထင်, လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိခဲ့; ငါ့မျက်စိထဲမှာအာလူးကြော်တွေစားတာ၊ ဒါဟာသင်ပြုရုံတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်တာကတားစီးပိတ်ပင်ခြင်းပဲ။
၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာအားလုံးအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့စိတ်ကူးယဉ်လူငယ်တစ် ဦး အတွက်အလွန်ဆိုးရွားစေသည့်အရောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ makelovenotporn.com ဟုခေါ်သည့်အိပ်ခန်းထဲတွင်လျောက်ပတ်သောလူများအဘယ်သို့ပြုနေကြသည်ကိုကျွန်ုပ်၏အသစ်တွေ့ရှိထားသည့်နားလည်မှုကိုဖော်ပြထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်ကျွန်ုပ်သည်နမ်းခြင်း၊ ကိုင်ခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာမငြိမ်မသက်မှုတွေရဲ့နာရီနဲ့နာရီတွေကိုငါတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။ သို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောလျှို့ဝှက်ချက်ခွဲဝေမှု၏နှစ်ပေါင်း။ ဒါမှမဟုတ်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဒါမှမဟုတ်မျက်လုံး၊ အပြုံးကြောင့်လှပအောင်နှိုးဆွခြင်းစတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အရာတွေ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြီးထွားလာခြင်းကလိင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘဲယုတ်ညံ့စေတယ်၊ ငယ်ရွယ်သောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းမျိုးကိုမည်သူမျှနားမလည်နိုင်ပါ။ Porn ဟာkissရာမအနမ်းကိုဘာဖြစ်လို့များသောအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာလဲ။
2. porn = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ; အစစ်အမှန်ဘဝ = ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အသည်းအသန်နှင့်ရင်းနှီးသောခံစားချက်များကို။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်ရရှိသည့်ခံစားချက်သည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ porn သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလိင်နှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကွဲစေသည်။ အပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားနက်ရှိုင်းစွာလေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြောင်း (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) ကလေးတွေနားမလည်သကဲ့သို့သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်နေစဉ်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်သူတို့၏ခံစားချက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ အစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းရလိမ့်မည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမှု၏နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအမှန်တကယ်ဘဝမှာလူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စေတယ်၊ ​​အဲဒါက porn ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငါလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊
၃။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုနှိုးဆွခြင်းသည်အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင်ဖြစ်ပေါ်စေသောနှိုးဆော်ခြင်းထက်လေးဆပိုမိုပြင်းထန်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုခံစားခဲ့ရသည့်နိုးကြားမှုအများစုကိုအစစ်အမှန်ဘဝတွင်အချစ်ဆုံးခံစားချက်ဖြင့်အစားထိုးသည်။
၄။ သရုပ်ဆောင်တွေကို porn မှာလုပ်တဲ့အရာကလူအများစုကတကယ့်ဘ ၀ မှာမလုပ်ကြဘူး။ လျောက်ပတ်သောလူအများစုတွင်စစ်မှန်သောဘဝ၌ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ငါဒီမှာငါယူဆချက်တစ်ခုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်တကယ့်ဘဝမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ rectum ကနေသုတ်ရည်နို့စို့ဖို့သူတို့နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာဖို့ (မုန်းတီးခြင်း)၊ သူတို့ရဲ့လျှာကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့မှန်ဘီလူး (rimming) မှာမျက်နှာလွှဲပြီးမျက်နှာညှပ်တယ်လို့မယုံကြည်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့သုတ်ရည် (snowballing) နဲ့လုပ်ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားကသာသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုသုတ်ရည် (မျက်နှာ) နဲ့ပက်ဖြန်းရမယ်။ “ ရငျးနှီးမှု” ဟူသောစကားလုံးကိုနားမလည်သောလူငယ်တစ် ဦး အားဤအပြုအမူများသည်ချစ်ခင်တွယ်တာသော်လည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
၅။ စစ်မှန်သောဘဝရှိလူများသည်လူငယ်တစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြုလုပ်နေကြလျှင်၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့ဒီမှာလုပ်နေတာကသူတို့လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးမကြီးပါဘူး။ အစစ်အမှန်လောကရှိလူများသည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနေရာတိုင်း၌သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုနမ်းခြင်း၏တိုးချဲ့ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပေမည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် blowjob များသည်ညစ်ညမ်းသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာအတွက် porn အတွက်ကားမောင်းပုံ; အစစ်အမှန်ဘဝ၌မူ၎င်းသည်နည်းနည်းမသက်မသာနှင့်ရှက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
၆။ Porn သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကြည့်ရှုသူအားစိတ်ရှုပ်စေပြီးသူ့စိတ်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ သူကလူနှစ်ယောက်၊ စောင့်ကြည့်သူနှင့်ပါ ၀ င်သူဖြစ်လာသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်သူ့အားသူနှင့်ဝေးကွာသွားခြင်းကသူ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
ဤအကြောင်းအရာများအားလုံးမှတစ်ဆင့် porn နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိပြီး၊ အချစ်သည်လိင်နှင့်ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောလူနှစ် ဦး သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိင်ဆက်ဆံလျှင်ပင်၊ သူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလျှင်သူတို့လုပ်နိုင်သမျှကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သူတို့ကမိန်းကလေးပူသည်ဟုထင်ကြသော်လည်းမိန်းကလေးငယ်များကိုချစ်သည်ဟုပြောသူများသည်ယခင်ကချစ်ခင်တွယ်တာမှုမရှိသည့်အနမ်းဖြစ်သည်ဟုပြောရန်ကြိုးစားနေကြသော်လည်း၊ အနမ်းဆိုတာနမ်းတာပဲ အဲဒါကိုအကြမ်းဖက်အောင်လုပ်ဖို့ငါစဉ်းစားနိုင်တဲ့နည်းနည်းလေးရှိပါတယ်။ တကယ့်ဘဝလေးစားမှု၊ ရောင်စဉ်တစ်ခု၏အဆုံးတွင်အချို့သော“ ဆက်ဆံရေး” များသည်အချစ် (လိင်တူချင်းချစ်သူ) ထက် ပို၍ လိင်မှုကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာ -“ Romeo နှင့် Juliet”) ထက် ပို၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အစွန်းရောက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်တကယ့်ဘဝဆက်ဆံရေးသည်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကင်းမဲ့ခြင်းလုံးဝကင်းမဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးဟာပေါင်းစပ်မှုတွေပါ။ လူငယ်များသည်ဤအရာကိုနားလည်ရန်လိုသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်စိတ်မပျက်ရ။
02 မှာ 14 / 2012 / 6: 54 နံနက်
သင်တင်ပြသည့်အချက်များ (၁-၆) သည်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်“ ဆန့်ကျင်သောညစ်ညမ်းမှု” ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတင်ပြသောအဓိကအငြင်းပွားမှုများဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုက်နှိပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မလေ့လာရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအခြားဆိုဒ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအများစုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှာစွဲလမ်းမှု၏နဗ်ကြောပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုအားကျွန်ုပ်တို့သိသောပညာနှင့်ပညာပေးမှုများကိုရေးသားရန်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သင်ဖော်ပြသည့်အရာကိုမပြုလုပ်ဟုလေ့လာမှုအနည်းငယ် (မကောင်းစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်း) ကဖော်ပြသည်။ သင်၏ခိုင်လုံသောအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါကပြိုင်ဘက်များသည်ဤအချက်များကိုချေပရန်အတွက်ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောလေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုသည်။
မင်းကိုသတိရ၊ မင်းဟာမင်းထက်ပိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါဟာအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်သောစာဖြင့်ညံ့ဖျင်းသောမေးခွန်းလွှာများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုက၎င်းတို့အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အားမေးမြန်းခြင်းသည်ငါးနှင့် ပတ်သက်၍ ရေနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ထင်သည့်အရာနှင့်တူသည်။ အမှန်တရားကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ခြင်းမှာထောင်နှင့်ချီသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှကင်းလွတ်သောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းမှပြန်ကောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint နှင့်ပတ်သက်။ အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ အရမ်းကြီးတယ် အကြှနျုပျ၏ site ကိုထင်ရသောနေရာတိုင်းမှလင့်များ။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ လောက်ကနေထောင်ပေါင်းများစွာသောအကြောင်းအရာတွေထောင်နဲ့ချီတဲ့ပို့စ်များကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ မင်းပြောခဲ့သမျှကိုငါအတည်ပြုလို့ရတယ်
02 မှာ 15 / 2012 / 8: 40 ညနေ
သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ငါ“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ” ကိုရှာဖွေပြီးသုတေသနအားလုံးကိုစဖတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတိတိကျကျပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ တခါတလေမှာတူညီတဲ့ဘာသာစကားနဲ့တောင်မှ။ ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပင်ကိုစရိုက်သို့မဟုတ်ဟော်မုန်းများမည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဆိုလိုတာကလူတိုင်းကမတူကြဘူး။ ငါပထမ ဦး ဆုံး porn ကိုစတင်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါကြည့်ရှုသောအရာကိုဇာတ်စင်ဖြစ်ကြောင်းငါ့အဖို့အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှုအရာများတိုးတက်အဖြစ်, တိပ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နှင့်စစ်မှန်လိင်အကြားမျဉ်းမှုန်ဝါးစတင်ခဲ့သည်။ အချို့ဗွီဒီယိုများတွင်သရုပ်ဆောင်မဟုတ်သူများကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ သို့သော်အခန်းထဲရှိအခြားသူတစ် ဦး ကမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းသူတို့သိသည်။
ဘာဖြစ်လို့порноကငါ့ကိုအခြားသူများထက်ပိုပြီးကွဲပြားစေခဲ့တာလဲ။ အခြားယောက်ျားများသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်မိန်းကလေးများအပေါ်ကျရောက်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ ဒါကသူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့လိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုတန်ပြန်လိမ့်မယ်။ သူတို့မှာအားနည်းတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းငါ့ကိုအခြားမဟုတ်ယောက်ျားတွေချိတ်နှင့်ငါ့ကို? ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ကောလိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာပြwatchingနာမရှိဘဲကြည့်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူရှောင်ကြဉ်ဘယ်တော့မှ; ကိုယ့်ကထဲကကြီးပြင်းလာတယ်။
တကယ်တော့ကလေးတွေကတစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်ချင်ရင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာတကယ်သိချင်ရင် "Titanic"၊ "Good Will Hunting" (သို့) Forrest စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာပိုကောင်းတယ်။ Gump ။ " Porn သည် hyperbolize နှင့်လက်တွေ့ကျသောလိင်နှင့်မခြားမလပ်ဆက်စပ်နေသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ချွတ်လိုက်သည်။
ယောက်ျားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အချစ်နှင့်ပတ်သက်သောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်သူမခံစားရသည့်နှိုးဆွမှုသည်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုမရှိသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူက“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” နှင့် ပတ်သက်၍ သူဘယ်လောက်အထိစဉ်းစားသည်ကိုသူအရေးမထားပါ။ သူကနှိုးဆွခံရဖို့တိကျတဲ့နှင့် visceral တစ်ခုခုစိတ်ကူးရပေမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်အကြားရှိဤဝိရောဓိသည်မိန်းမများကြုံတွေ့ရသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ ယောက်ျားများသည်မိန်းကလေးများကဲ့သို့“ နှိပ်စက်ခြင်း” ကိုများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မဖွံ့ဖြိုးတတ်သည်ကို၎င်းကရှင်းပြသည်။ ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်ယောက်ျားများသည်ရုပ်ပုံများမှသာအလွယ်တကူနှိုးဆွနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက္ကူလမ်းကြောင်းများလိုအပ်နေသည်ကိုလည်းရှင်းပြသည်။
05 မှာ 02 / 2012 / 9: 14 ညနေ
ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဟာရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးပွေလီလှပြီး၊ ဒီကြေကွဲဖွယ်ဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့များစွာဆက်စပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်သိဖူးသမျှတစ်ခုတည်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Heck, ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအော်ဂဇင် hardcore P & M ၏ session တစ်ခုနှင့်အတူရှိ၏။ ဒါပေမယ့် PMO ကကျွန်တော့်ဘဝကိုဘယ်လောက်အထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဘူး။ ငါ၏အတွန်းအားပေးသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အထသည် libido မြင့်မားခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်ဟုအစဉ်အမြဲထင်ခဲ့သည်။ အခြားလိမ်လည်မှုများတွင်လူငယ်များကိုမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ကြုံပြီးနောက်, ငါပြန်သွားနိုင်နည်းလမ်းမရှိ။ ညစ်ညမ်းတဲ့ကြိတ်ဆုံနဲ့ဝေးနေခြင်းကငါ့ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစိတ်အားထက်သန်မှု၊ စွမ်းအင်ကိုခံစားစေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်သည်နှစ်များစွာအတွင်းကျွန်ုပ်မခံစားခဲ့ရသောခံစားမှုနက်ရှိုင်းမှုကိုခံစားစေသည်။
05 မှာ 11 / 2012 / 2: 21 နံနက်
ကတင်ပြ Westminster93 သုပေါ် 2012-05-10 13: 49
ဒီပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး post မှ - အွန်လိုင်း porn ၏ဗြောင်ကျကျအကျိုးသက်ရောက်မှု
ကျွန်မလက်ရှိ porn သွေးဆောင် ED ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ခံစားနေရနှင့်မျှမ PMO ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသို့ 8 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနေပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီကယင်း၏အလားအလာသက်ရောက်မှုငါ၏ 18 နှစ်အရွယ်သားကိုသတိထားမိစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မသူ့ထံမှသင်ယူသောအရာကိုမှာအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသူသည်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အင်တာနက် porn အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူသည်အွန်လိုင်း porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်၏အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ခြင်းအားနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ - ဒါက ၁၇/၁၈ အရွယ်ဖြစ်တယ်။ သူကပုံမှန်စိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ဖူးလား (သားလေးကိုကြိုတင်စိတ်ပူထားပေမယ့်အရမ်းကိုလွယ်ကူပြီးလွယ်လွယ်ကူကူစကားပြောလို့ရမလား) လို့သားကိုမေးခဲ့တယ်။ သူဟာသူ့ဘဝမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခုသာရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သူကဒီအကြောင်းကိုသူ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့အားလုံးရယ်ကြတယ်။ သူတို့ကရယ်ကြတာကတော့သူတို့အိပ်မက်ထဲမှာအိပ်မက်မမက်ဖူးဘူးဆိုတာပါပဲ။
07 မှာ 21 / 2012 / 9: 57 ညနေ
ဇူလိုင်လ 20, 2012 စိတ်ပညာ & စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်
အနောက်ဂျာမနီဆန့်ကျင် 1974 ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်နယ်သာလန်ဘောလုံးဒဏ္ဍာရီ Johan Cruyff (မှောင်မိုက်ရှပ်အင်္ကျီ) ။
(Medical Xpress) - အကြောင်းအရာသည်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးသောဘောလုံးသမားဖြစ်စေဖြစ်စေအတိတ်ကိုအမှတ်ရခြင်းအပေါ်မှီခိုအားထားသည့်စစ်တမ်းများသည်ပါဝင်သူများ၏ဘဝ၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းသို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟု Flinders တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတစ် ဦး ကဆိုသည်။
စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာစတိဗ် Janssen ကပိုအမှတ်တရများအသက်တာ၏အခြားမည်သည့်အချိန်ကထက် 10 နှင့် 20 ၏အသက်အရွယ်အကြားစုဆောင်းနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
ဒေါက်တာ Janssen လမ်းကိုမှတ်ဉာဏ်အကျင့်ကိုကျင့်သို့သူ့ရဲ့သုတေသန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ထိုဆင်တူဖုအဖြစ်လူသိများသောဖြစ်ရပ်ဆန်း, လေ့လာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကပါရဂူသုတေသနပြုသူချင်းအဖြစ်စိတ်ပညာ၏ Flinders ကျောင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ဒေါက်တာ Janssen အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်ကနေဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိထားသူနှင့်အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်အတွက်တက္ကသိုလ်များမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
သူကလူတွေကိုသူတို့ဘဝမဆိုအချိန်ကာလကနေအိမ်တအိမ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတစ်ဦး၏မွေးဖွားဝယ်ယူ, ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်မင်္ဂလာအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်တရများရှိသည်ဖို့များပါတယ်စဉ်ဘဝသူတို့ရဲ့ဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကနေအမှတ်တရများ ပို. များပြားထို့ကြောင့်ပိုမိုတာရှည်ခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည် နှင့်သြဇာ။
တစ်ဦးကစိတ်အားထက်သန်ဘောလုံးပရိတ်သတ်ဒေါက်တာ Janssen ကသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှစ်ခုနှင့်အတူ, ရှိသမျှအချိန်ငါးအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကသူတို့ကိုမေးမလျှောက်သောဒတ်ခ်ျဘောလုံးအသင်းပရိသတ်တွေ၏စစ်တမ်းတစ်ခုပို့ချခြင်းအားဖြင့်ဆင်တူဖုများအားကောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
သူကရလဒ်တွေကိုလူတွေကသူတို့ 10 နှင့် 20 ၏အသက်အရွယ်အကြားမြင်ဂိမ်းများကိုပိုပြီးအမှတ်ရစရာရှိသည်ကြောင့်, ၎င်းတို့၏အဆိုပြုချက်သူတို့ဘဝအတွက်ကာလကနေကစားသမားမျက်နှာသာမှတော်မှာအတည်ပြုပြောခဲ့သည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့်ကစားသမားများ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်ဒေါက်တာ Janssen သည်အသက် ၁၇ နှစ်တွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောတိုက်စစ်မှူး Johan Cruyff အဖြစ်တာတော့သေချာတယ်ကြီးမြတ်ကစားသမား (သူကစားအချိန်တွင်မွေးဖွားမဟုတ်သူတွေကိုအပါအဝင်) အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးတက်ရောက်လာသူများကိုအားဖြင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်နှင့်အညီ, ဒေါက်တာ Janssen Cruyff များအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးထောက်ခံမှု 10 အကြားခဲ့ကြသူအသက်အုပ်စုတစ်စုမှလာသောကပြောသည် နှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အထွတ်အထိပ်မှာ 20 ။
"Cruyff 1974 ၌သူ၏အထွတ်အထိပ်ခဲ့ - Cruyff ရှေးခယျြခဲ့သောလူအများစုကိုသူတို့ရဲ့ 50s နှင့် 60s ရှိကြ၏," ဟု၎င်းကပြောသည်။
UEFA ၏တရားဝင်ထုတ်ဝေမှုဖြစ်သောချန်ပီယံမဂ္ဂဇင်းမှဒေါက်တာ Janssen အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအရတွေ့ရှိရသည်။
ဒေါက်တာ Janssen ဟာဆင်တူဖု၏နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားလည်းရုပ်ရှင်များ, စာအုပ်များနှင့်ဂီတနှင့်အတူတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ကပြောသည်။
"သင် 15 နှင့် 20 ၏အသက်အရွယ်အကြားမြင်သောအဆိုပါရုပ်ရှင်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ရှိနေဆဲလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
ဒေါက်တာ Janssen မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်စှမျးသူတို့ရဲ့အမြင့်မှာဖြစ်သည့်အခါကဘဝတစ်အဆင့်ကပြောပါတယ်။
“ ၁၀ နဲ့ ၂၀ ကြားမှာမင်းတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်စနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ သတင်းအချက်အလက်အသစ်တွေကိုအလွယ်တကူယူနိုင်တယ်” ဟု Dr. Janssen ကပြောကြားခဲ့သည်။
အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်းဟာသုဒ္ဓဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်: "သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကာလများတွင်ကစကားလုံးအသစ်သင်ယူဖို့မျှမျှတတလွယ်ကူသည် - ကနောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်မှာဘာသာစကားသင်ယူဖို့အများကြီးပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကြာ," ဟု၎င်းကပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကဒီအသက်အရွယ်မှာ, မှတ်ဉာဏ်စနစ်ကပိုကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်နောက်မှဤအချက်အလက်ရယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ "
“ အကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်လား။ မင်းကဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ” ဇူလိုင်လ 20, 2012 ။ http://medicalxpress.com/news/2012-07-memory-youre-teen.html
09 မှာ 18 / 2012 / 9: 15 ညနေ
ငါဒီနေ့ဘတ်စကားနဲ့နှစ်ချောင်းတည်း။ ၁၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများသည်ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လာပြီးထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ကြသည်။ ပထမအချက်ကသူ့အဖေကသူ့ကိုမနက်ခင်းမှာကွန်ပျူတာသုံးခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်တစ်ခုခုအတွက်ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပြောတာကသူတို့ဟာပြmနာတက်တဲ့သူတွေပေါ့။ ဒုတိယတစ်ခုကသူသည်ကွန်ပျူတာကိုနံနက်အချိန်၌ပင်အသုံးပြုပြီးအံ့အားသင့်ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်သူနိုးနေသည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ပထမတစ်ယောက်ကသူ့အဖေ (သို့) အဖွားကသူ့ကို ၆ နာရီ ၇ နာရီလောက်မှာနိုးထစေပြီးကွန်ပျူတာကိုခဏလေးသွားပြီးနံနက်စာစားပြီးကွန်ပြူတာမှာပဲဆက်လုပ်သည်။ ထို့နောက်သူကသူ့သူငယ်ချင်းကို“ ကွန်ပျူတာထဲမှာငါဘာလုပ်လို့ထင်သလဲ” ဟုမေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူကတကယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးနံနက်တိုင်း fapping ကြည့်နေတာကိုတွေ့တော့သူကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါဒီကလေးလုပ်တာဟာပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလို့တွေးမိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးငယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ သူကမနက်တိုင်းညတိုင်းသူဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးဟာအနာဂတ်မှာနောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ED ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ် PMO ပြfromနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူသည်သူ့ ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆုချနေသောဆားကစ်များကိုမသိဘဲပင်သူကိုယ်တိုင်မထိပါးဟုမထင်ဘဲတက်ကြွစွာချိုးဖောက်နေသည်။ ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလူငယ်အများစုကလုပ်နေကြတာကို PMO'ing ကို“ စံ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
ကိုယ့် 14-15 တုန်းကကိုယ့် porn ပုံမှန်နှင့်ထိုသို့ပြုမှအေးမြသောအရာကြီးကြောင့်ပင် considered ကြီးစောင့်ကြည့်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းလုပ်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူကကျွန်တော့်ကိုဖက်လိုက်ပြီး PMO'ing ကိုစွဲလမ်းစေပြီး ED ပြissuesနာအချို့ကိုပေးပြီးငါ့ကိုပိုပြီးလူရွှင်တော်နှင့်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည်။ အခုငါတို့ပိုကောင်းလာပြီ။ တခြားသူတွေနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ။
လူတိုင်းကအမြဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလုပ်ဖို့ကပုံမှန်ကျန်းမာအရာကြီးကပြောသည်။ ငါကသေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရှိကျန်းမာကြောင်းသဘောတူပေမယ့်သင်အလွန်အကျွံကြောင်းပြုကြနှင့်တစ်ခုစွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း porn စွဲအကြောင်းကိုပိုမိုပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုလိုထင်ပါတယ်။
ငါအသက် ၁၄ နှစ်မှာမင်းကညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်မှာဗုံးတစ်လုံးကျလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မင်းအမေသိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အများစုမှာအိမ်မှာပိုက်ကွန်မရှိသေးဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်တိုင်အောင်ပုံမှန်အင်တာနက်သုံးစွဲသူမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ယနေ့ကလေးများအတွက်အလွယ်တကူအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်သွေးဆောင်မှုများစွာရှိနေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစေလိုလျှင်၎င်းကလေးများသည်အချိန်မကောင်းကြလိမ့်မည် ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်နောက်မှသူတို့အတွက်အရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လိမ့်မယ်။
09 မှာ 22 / 2012 / 5: 04 နံနက်
မွန်, စက်တင်ဘာ 17 2012
By Genevra Pitmann က
New York (Reuters Health) - ဆဲလ်ဖုန်းပါသော Los Angeles အထက်တန်းကျောင်းသားခုနစ်ယောက်လျှင်တစ် ဦး သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်စစ်တမ်း၏ရလဒ်များအရ sexters သည်အန္တရာယ်များသောနေရာတွင်ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် လိင်အပြုအမူ။
လေ့လာမှုအသစ်တွင် LA မှဆယ်ကျော်သက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များမလုပ်ချင်သူများထက်လိင်မှုကိစ္စပြုရန်ခုနစ်ဆပိုများသည်။
လေ့လာမှုအသစ်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူ Los Angeles ရှိတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှလူမှုကွန်ယက်သုတေသီအဲရစ်ရိုက်စ်ကလိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမည်သူမည်ဝါဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ငါတို့တကယ်တကယ်သိချင်တာက sexting နဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်စားဖို့ဆိုတာဆက်စပ်မှုရှိသလား။ ပြီးတော့အဖြေက 'ဟုတ်တယ်' လို့ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနေတယ်” ဟုသူက Reuters ကျန်းမာရေးသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟူစတန်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏လေ့လာမှုတစ်ခုထွက်မြင့်မားသော Schooler အစောပိုင်းကဒီနွေရာသီလေးဆယ်ကျော်သက်အတွက်တဦးတည်းကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတစ်ဦးအချည်းစည်းဓာတ်ပုံကိုစလှေတျတျောခဲ့ကြောင်း, အဲဒီကလေးတွေလည်းအန္တရာယ်များလိင်ဆက်ဆံခံရဖို့အများကြီးပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ဇူလိုင်လ 2, 2012 ၏ရိုက်တာသတင်းဌာနကနျြးမာရေးပုံပြင်ကိုကြည့်ပါ) ။
တနင်္လာနေ့ Pediatrics ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသောဆန်၏တွေ့ရှိချက်များကိုလော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်အထက်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားပေါင်း ၁,၈၃၉ ဦး ကိုအခြေခံပြီးအများစုမှာလက်တင်စကားများဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကလေးပုံသုံးပုံဟာသူတို့ပုံမှန်သုံးတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာမှကမကထပြုသည့်စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ဆဲလ်ဖုန်းပါသောဆယ်ကျော်သက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာသူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးသုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်သူတို့နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဟူစတန်ရှိဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများသည်လူ ဦး ရေအချိုးအစားကွဲပြားမှုကြောင့်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ကြောင်း Rice ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ အလယ်အလတ်တစ်နေရာရာမှာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်” ဟုဟူစတန်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် Galveston ရှိ Texas Texas Medical ဌာနမှစိတ်ပညာရှင်နှင့်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးသုတေသီ Jeff Temple ကဆိုသည်။
Sexting ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်တာဒါမှမဟုတ်အရိပ်အမြွက်ပြတာပဲဟု Temple က Reuters ကျန်းမာရေးသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
သူတို့အော့ဖ်လိုင်းဘဝမှာသူတို့လုပ်နေတာကသူတို့အွန်လိုင်းဘ ၀ မှာသူတို့လုပ်နေတာပဲ”
လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးမှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ကြောင်းဆန်ကသဘောတူခဲ့သည်။ "ဒါကတချို့မိဘတွေအတွက်သတိမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကအခြားသူတွေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်" ဟုသူကပြောသည်။
၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်လူနည်းစုပါဝင်သည့်အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လူနည်းစုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲစွန့်စားသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။
sexting ဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံများအဆုံးသတ်သွားပြီးဆယ်ကျော်သက်များသည်အနိုင်ကျင့်ခံရမည်၊ သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသောစာများလက်ခံရရှိသည့်ကျောင်းသားများသည်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြင့်တရားစွဲခံရနိုင်သည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုလည်းရှိသည်။
သုတေသီများတွင် sexting နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျောင်းသားများသည် sexters တွင်မည်သည့်အမူအကျင့်များနှင့်အခြားအပြုအမူများသို့မဟုတ်စရိုက်လက္ခဏာများသည် sexters များကြားတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသနည်း။ Temple နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကို sexting သို့မဟုတ် sex ဟုသိရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။
ယခုအချိန်တွင်မိဘများနှင့်ဆရာများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစာသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်စကားပြောရန်နောက်ဆုံးပေါ်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများအားမီဒီယာများမှသတင်းပေးပို့နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့နှစ် ဦး သည်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွှယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူကဆက်ပြောသည်။ “ Sexting ဟာဆရာ၊ ဆရာမတွေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာစတင်စကားပြောဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့စကားပြောလို့ရတယ်၊
SOURCE မှ: bit.ly/jsoh2P ကလေးအထူးကု, အွန်လိုင်းစက်တင်ဘာလ 17, 2012 ။
10 မှာ 03 / 2012 / 4: 45 ညနေ
ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ငါတို့ဘယ်လိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းက။ ၎င်းသည်မှီခိုခြင်းမခံရမီက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်ဘဝများအပေါ်အလွန်ကြီးမားစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်သာသိခဲ့ရသည်။ ၎င်းရဲ့ဆွဲဆောင်အားကျဆင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။
“ အကယ်၍ သင်ပြaနာရှိကောင်းရှိပါက” ပို့စ်ကိုတင်ပါ
10 မှာ 10 / 2012 / 7: 29 ညနေ
ငါပင်ကောလိပ်ကျောင်းငါ၏ဒုတိယနှစ်အထိအင်တာနက်ကိုကြားတော့မှ, ဒီမှာငါသညျဤစွဲကျော်လွှားငါ၏အနှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်၏။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်ကနေဒီကင်လုပ်ခိုင်းထိတွေ့ခဲ့သူကိုလူပျိုတို့အဘို့အမှန်တကယ်စာနာမိပါတယ်။
10 မှာ 16 / 2012 / 12: 25 နံနက်
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2012 Aug;51(2):101-5.
ဦးနှောက် Imaging ကပုဒ်မ, ကလေးသူငယ်စိတ်ရောဂါကုသမှုဘဏ်ခွဲ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, Bethesda အမျိုးသားအင်စတီကျု, မေရီလန်းပြည်နယ်, USA ။
1s သို့မဟုတ် 0s ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အစီအစဉ်များအဖြစ် encoded သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို enable သောနည်းပညာများအတွက်ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပုံစံသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်နည်းပညာများကိုကျွမ်းကျင်ရန်နှင့်အရွယ်မရောက်သေးသောလူငယ်များအားဤနည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည်ဒီ“ ဒီဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး” ၏ရှေ့တန်းမှ ဦး ဆောင်နေသည်။ ဤကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစိတ်အားထက်သန်စွာလက်ခံခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို ဦး နှောက်ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်း၏အကျိုးဆက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
10 မှာ 22 / 2012 / 8: 03 ညနေ
ငါစိတ် ၀ င်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါ porn ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်တဲ့အချိန်က (၁၂) နှစ်ကေဘယ် (၁၂၁ နှစ်) ကိုဆိုလိုတာပါ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအားလုံးအတွက်ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုသုံးနေတယ်။ မေ့နေတဲ့ဘဝကဒီလိုပဲလွင့်စင်သွားတယ်။ ငါမရှိခဲ့ဘူးဘ ၀ နဲ့တူတူပါပဲ။ ငါပျင်းနေပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလို့ဆိုလိုတာ။ ငါအိပ်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ပူပြင်းတဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရှိအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့အခါငါဖြစ်မယ်ငါဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါမသိဘူး။ ငါကဒီလိုတစ်ခုတည်းလားငါသိချင်လား?
Nope, ငါအဲဒါကိုရှုံးနိမ့်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်လိုမှတ်ယူလိုက်တယ်။ ငါ PC နဲ့ PMOing မှာထိုင်ပြီးလူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးပစ္စည်းတွေလုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘ ၀ ကိုလူမှုရေးအရအလွန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ယခုအသက် ၂၁ နှစ်နှင့် and ည့်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်သော်ရထားတော်တော်များများကုန်သွားပြီ ဖြစ်၍ အတွေ့အကြုံမရှိဘဲတစ်ယောက်တည်းရှိနေသည်။ ဘယ်တော့မှလှည့်မကြည့်နိုင်တော့ပါ။ တူညီသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့။
တကယ်တော့“ ငါ့ဘဝမှာဘာမှမလုပ်တာဘာမှမမှားဘူး” လို့ဆင်ခြေပေးလိုက်တယ်
“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းနာကျင်အောင်မလုပ်မိရင်၊ အချိန်ကုန်ဆုံးပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ပုံတွေကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအလဟ didn't မဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ငါဟာပြောင်းလဲခြင်း၊ သိကျွမ်းခြင်းနှင့်အရင်ကလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခဲ့ဘူး”
11 မှာ 02 / 2012 / 4: 45 ညနေ
တစ်ဦးချင်းစီကတခြား molesting 2nd တန်းကျောင်းသူလေးနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှုပ်တော်ပုံ
post သို့လင့်ခ် - ဆိုင်းငံ့မရ
ဒါကြောင့်ငါဘော်ဒါကျောင်းကိုသွားတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်မတို့ကအထက်တန်းကျောင်းတက်နေသူ (၂) ယောက်ဟာတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာအရှုပ်တော်ပုံကိုကြုံခဲ့ရတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျောင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုသူများကိုနှိမ်နင်းသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကျောင်းသားများကိုဤအရာများကိုပြုလုပ်ရန်အကြံဥာဏ်များပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်မတို့ Multivariable Calc အတန်းကနေထွက်သွားကြပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းတွေကို porn ကိုရှာဖွေကြတယ်။ ငါ့ပစ္စည်းတွေလုံးဝသန့်ရှင်းနေလို့ငါပြောနိုင်တာကတော့ nofap အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်သူ၌သူ၏ရှာဖွေမှုသမိုင်းတွင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရှိပြီးသူသည် (၃) ရက်အတွင်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ (။ ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူသည်မကြာမီ nofap ကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေသည်ဟုယုံကြည်သည်။
TL; DR ကျောင်းတွင်မူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအချင်းချင်းတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အနှောက်အယှက်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေရေးရာပြhighနာများရှိသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားလက်ပ်တော့များကိုစတင်ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းသည် nofap ကြောင့်သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။
တရားစွဲဆိုမှုအတန်းဖော်များက Burris ကျောင်းသား၏လိင်အလွဲသုံးစားမှုမလုပ်ပဲ
Edit ကို: အရင်းအမြစ်
11 မှာ 06 / 2012 / 7: 48 ညနေ
50 နှစ်အရွယ်ကနေ Comment
သင်အတိအကျမှန်ကန်ပါတယ် ကျွန်ုပ်အသက် ၅၀ ရှိပါပြီ ငါအရမ်းချစ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည် ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးမြတ်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင်ငါ Penthouse နှင့် Hustler မဂ္ဂဇင်းကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်း-ခေတ် porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသာယာကြည်နူးဖွယ်ဆီသို့ ဦး တည်ရန်အလွန်နက်ရှိုင်းသောလမ်းကြောင်းရှိသည်ဟုယူဆတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အတွင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သည်။
မည်သည့်စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တောင်းပန်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းမှစာပို့ရန်မိန့်ခွန်းကိုအသုံးပြုသည်။ နေ့လည်စာစားဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်ပြီးလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့သွားမယ်။
11 မှာ 06 / 2012 / 7: 51 ညနေ
45 နှစ်အရွယ်ကနေ Comment
ငါဒါ porn ငါ့ထိတွေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှဖြောင့်လိုက်လာသောအငယ်ယောက်ျားတွေထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ 45 နှစ်ရှိပြီပေါ့။ သင့်ရဲ့ကနဦးထိတွေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့ပဲလိုလျှင်သင့်ရဲ့ပြန်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကောင်းအတိုင်းအတာ၏ကြာကြာအဆုံးအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံစားမဟုတ်ပုံမှန်ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ကုမ္ပဏီအတွက်ရယ်သည်တိုင်အောင်, ငါမခံစားရဘူး။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီစွဲလမ်း၏ယခုရှိသည်သောအသိပညာ, ဒီစွဲလမ်းအနည်းငယ်ဆက်ဆံရေးမှုတ်ဖို့ငါ့ကိုစေခဲ့ပါတယ်ခဲ့သောအလိုရှိ၏။
11 မှာ 06 / 2012 / 8: 03 ညနေ
ယခုတွင်ငါသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ရေချိုးပြီးနောက်အားကစားပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုလုံးဝလက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံသည်“ သူတို့သည်ငါ၏အသေးအမွှားကိုရယ်ကြလိမ့်မည်” မှ“ လိင်တံအရွယ်အစားသည်ကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်အဟန့်အတားမဟုတ်” သို့၎င်း၊ သားကောင်ရန်ဝေးကွာသောခြေလှမ်း!
ကြီးမားသောမထင်မှတ်သောမထင်မှတ်သောအရာများဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့နေသော creepy sex ကိုမကြည့်ပါကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်ခံခြင်းသည်အကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိမပြုမိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ NOFAP နဲ့ရဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
11 မှာ 11 / 2012 / 5: 12 ညနေ
အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ vibrator နှင့်အတူ Masturbating အမြဲတမ်း ED စေသော
ငါ 12 နှစ်အရွယ်မှာအကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ကြောင်းအသက်အရွယ်မဆိုကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲအရမ်းမှန်မှန်စိုက်ထူရရန်အသုံးပြုငါ့လိင်တံနှင့်အတူဆော့ကစားလေ့ရှိတယ်။ ထိုအခါငါသူမမရှိတော့အသုံးပြုသောအရာခန္ဓာကိုယ်အနှိပ်တုန်ခါငါ၏အမိခင်တွေလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိ ... ။ တစ်နေ့တော့ကျွန်မရဲ့မိဘတွေထွက်ခဲ့ကြသည်နေတုန်းကျွန်မပေါ်မှာ switched နှင့်ငါ့လိင်တံပေါ်မှာနေရာချစကာ, ကထိုး။ အဆိုပါတုန်ခါပြင်းထန်သောခဲ့ကြသည်နှင့်ခံစားမှုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအော်ဂဇင်နှင့် နေ့မှစ. နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်မနှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခါတိုင်းငါအော်ဂဇင်ကြှနျုပျကိုပို့ဆောငျဖို့တုန်ခါနှိပ်နယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်ပဲငါ့လက်ကိုသုံးပြီးအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ငါကငါငါ့လက်ကိုသုံးပြီးအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ရှေ့၌ငါပထမဦးဆုံးအနှိပ်အသုံးပြုခဲ့သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုလအကြာခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤလုပ်နိုင်တစ်ချိန်ကဒါပေမယ့်တစ်ပတ်ကို5ကြိမ်ငါ့လက်ဒါမှမဟုတ်အနှိပ် 10 ဖြစ်စေသုံးပြီး orgasm မှ masturbating ခဲ့သည်။ ငါအချိန်တွင် porno မဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ (အင်တာနက်ကိုပြီးရင်ပတ်ပတ်လည်မဟုတ်ခဲ့) ဒါပေမယ့်ကျွန်မအတော်လေးမကြာခဏ scantily ဝတ်အမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခဲ့ပါဘူး။
ငါအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေငါအကြောင်းကို2နှစ်ပေါင်း masturbating ခဲ့ချင်ပါတယ်သည်အထိတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့သတိရသောအရာကိုမှ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင့်ယခုအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ဒါတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအသေးစိတ်ကိုမှတ်မိနေလို့မရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါ sexy အတှေးသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံဆွခဲ့လျှင်ပင်အများကြီးလျော့နည်းမကြာခဏစိုက်ထူရတဲ့သတိရဟန်ဘူးခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးငါမပြဿနာများငါ၏အ flaccid လိင်တံလှုံ့ဆော်ဖို့ငါ့လက်ကိုဒါမှမဟုတ်အနှိပ် အသုံးပြု. တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မပတ်ပတ်လည် 14 သို့မဟုတ် 15 မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်းစားရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အပြင်းအထန်သူမ၏နမ်းမှတ်မိခြင်းနှင့်ငါတကယ်သူမ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုတွေ့ပေမယ့်, ငါ့လိင်တံအားလျော့ကျန်ရစ်၏။ ငါပြီးနောက်အနည်းငယ်ပိုပြီးမိန်းကလေးခဲ့ရပြီးသူတို့ကိုငါနမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, ဘာမျှမသည်ငါ့ဘောင်းဘီထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုအားဖြင့်ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေအများဆုံးလိင်ရှိခဲ့ဖူးသို့မဟုတ်ဆိတ်ကွယ်ရာငါ့ထံမှလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည် 16 ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ပဲမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကိုင်ပြီးသို့မဟုတ်နမ်းရာမှတစ်ဦးစိုက်ထူရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါအခြားတစ်ဖက်တွင်မရှိသလောက်ကို manual ဆွခြင်းမရှိဘဲတဦးတည်းတယ်။ ငါသိပ် masturbating ဒါမှမဟုတ်အနှိပ်ငါသည်ကိုယ်မှထင်ငါ၏အလိင်တံ desensitised ခဲ့ခဲ့သလဲ ဒီတော့ 15 နှင့် 18 ၏အသက်အရွယ်အကြားအတော်လေးအကြိမ်အနည်းငယ်ငါအနှိပ် masturbating သို့မဟုတ်သုံးပြီးရပ်တန့်လိမ့်မယ်။ MO ကိုရှောင်နေတဲ့4သို့မဟုတ်5နေ့ကနောက်, ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်တစ်ခုတိုးသလိုခံစားရတယ်။ ထိုအခါထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ ရက်ပေါင်း 6, 7, 8 စသည်တို့အားဖြင့်ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ငါ့ကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန်ရန်နှင့်တဖန်ငါ masturbate စတင်မယ်လို့စေ၏။ ငါနေကြပြီး masturbated ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်အထူးသဖြင့်ပျြောမှေ့စခံစားခဲ့ရဘူး။ ထိုအခါအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးသို့ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးနှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးတစ်ရက်ကာလအတွင်းကြောင့်လုပ်နေတာပြီးနောက်ငါပြန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ် masturbating ကိုသွားချင်ပါတယ်။
11 မှာ 15 / 2012 / 4: 23 နံနက်
ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကငါ့ကိုကွန်ပျူတာများနှင့်အတူ0ကြီးကြပ်မှုပေးခဲ့တယ်
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသကျရှငျဘဝ (rant) မှငါ့ကိုငတ်ထားပြီး
အဲဒါကိုမြှင့်တင်ပါ၊ မဲပေးပါ၊ ငါဂရုမစိုက်ပါ၊
ငါအရင်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာရိုးရိုးသားသားပြောပါရစေ။ ကျွန်တော့်မိဘများကကျွန်တော့်ကိုကွန်ပြူတာများဖြင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း0ပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်လိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ညလုံးပေါက်လမ်းလျှောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေတစ်နေ့ကိုငါးကြိမ်တခါတရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါဟာကုန်ကြမ်းမရောက်မှီတိုင်အောင်၊ တစ်ကြိမ်မှာရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်။
ငါ ၇ တန်းကျောင်းသားဘ ၀ မှာစခဲ့တာပါ။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက်ကောလိပ်ကိုတက်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်“ ပုံမှန်” အထက်တန်းကျောင်းအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အားလပ်ချိန်များတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူး၊ ကလပ်တွေမ ၀ င်ဘူး၊
အခုလား။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအခါငါအိပ်ရာအနိုင်နိုင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ငါကွန်ဒုံးကိုဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာအပြီးသတ်ဖို့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အနိမ့်ဆုံးသို့ကျဆင်းသွားသည်။ အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအလွန်အမင်းအာရုံမခံစားမိခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ် porn ကြည့်နေစဉ်ငယ်ရွယ်သောအချိန်၌ဤအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်သားကောင်များဖြစ်သည်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမလုပ်ရင် ၁၀၀% ပိုကောင်းတယ်။ ငါမကြာသေးမီကရက်သတ္တပတ် ၃၀ ခန့်ကရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ငါ့ဘဝမှာတော့ဘယ်တော့မှမခံစားရဘူး ငါတကယ်အသက်ရှင်လျက်ခံစားရတယ်။ အခုလား။ ငါစတင်ခဲ့ဘယ်မှာပြန်ငါပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ဘဝမုန်း။
ဒီညစ်ပတ်မိုက်မဲတဲ့အကျင့်ဟာငါ့ဘဝကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ။ ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းမှငါ့ကိုငတ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ပြီး NoFap သည်သင့်အတွက်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုလျှင်ယုံပါ။ မင်းကငါလိုမျိုးအဆုံးသတ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ငါကဒီဖျားနာပြီးငြီးငွေ့တယ် ငါတို့ရှိသမျှသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် pawns နည်းနည်းပဲ။ အတိတ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအတိတ်ကိုစွန့်ခွာဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ငါဒီလိုဆက်လုပ်လို့မရဘူး။
11 မှာ 24 / 2012 / 4: 00 နံနက်
ဂါ 15 နှစ်အရွယ်နှင့်အတူစကားလက်ဆုံပြန်ပြောပြသည်
Re: အဂါ (အသက် 25) နှင့်ဂယ်ရီ porn-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဆွေးနွေးရန်
အောက်ပါထံမှဂါကရေးသားခဲ့သည် reboot Nation။ ဂါမကြာခဏဆယ်ကျော်သက်မှပြောသွား, ဤဟောင်းတစ်ဦး 15 တစ်နှစ်နှင့်အတူစကားလက်ဆုံသူ့ရဲ့စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျသူ့ကိုန်းကျင်ထိုင်လှပသောမိန်းကလေးအားလုံးလျစ်လျူရှုနေချိန်တွင်အင်္ဂလိပ်လူတန်းစားကာလအတွင်းကသူ၏စမတ်ဖုန်း porn ကိုချောင်းမြောင်းသော 15 နှစ်အရွယ်ဆိအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုန်းကျင်မိန်းကလေးငယ်များကသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိပါသလား သူတို့ဘယ်လိုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ?
ဟုတ်တယ်၊ တချို့ဆိုရင်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်။ သူတုိ့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲဆိုတာသူမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။
ငါ -“ မင်းတို့ youtube လုံးကိုတစ်နေကုန်မနေစေဖို့၊ ငြီးငွေ့စရာကျောင်းအကြောင်းဘယ်လိုတင်နေတာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာမင်းအိမ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာဘယ်လောက်ဆိုးတာလဲလို့ Facebook နဲ့ Twitter ကိုပိတ်ထားတာလား။ (ဗီဒီယိုဂိမ်း)”
ဆယ်ကျော်သက်: "haha သူတို့အရမ်းကြိုးစားကြပေမယ့်လူတိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုန်းကျင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသိတယ်, ငါတို့ (facebook ပေါ်) ဖမ်းမိရတယ်ဆိုရင်သူတို့သင်ရုံးထံသို့စလှေတျရဟုပြောပေမယ့်သူတို့ကတကယ်တော့ကြောင်းကို back up ဘူး။ သူတို့ကျောင်းသားတစည်းနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကသည်နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုတွေဆီကနေပြီးတော့အွန်လိုင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအဲဒီလိုလုပ်သူကိုမြင်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အကောင့်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် "ဟုပြောသည်။
ငါ့ကို: Xanga နှင့် MySpace ပထမဦးဆုံးအကြီးတွေလေသောအခါလွန်းသည်ငါတို့အဘို့ဘယ်လောက်ရဲ့ "Ya ။ ကျနော်တို့2ရက်အတွင်း၎င်းတို့၏လုပ်ကွက်န်းကျင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲထွက်နေသေးတယ်။ အဘယ်အရာကိုဆဲလ်ဖုန်းအကြောင်းကို, ငါသိ၏လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအားလုံးနေ့နှင့်သူတို့အပေါ်မှာအွန်လိုင်းပိုင်ခွင့်ရနိုင်မလဲ? "
ဆယ်ကျော်သက်: "Oh သေချာဘို့ haha, ငါသည်သူတို့၏ဖုန်းကိုဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားရတချို့ကလေးတွေကိုဆိုလိုတာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ပဲသူတို့ကိုတက်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးအချိန်ကာလအများဆုံး။ ကြှနျုပျတို့သညျ "haha Mam ထို့နောက်5စက္ကန့်နောက်ပိုင်းတွင်အနီးကပ်ခေါ်ဆိုခအကြောင်း tweet post ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ
ငါ့ကို -“ မင်းကိုဒီမေးခွန်းတွေမေးခွင့်ပြုပါ။ ကျောင်းကယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ရဲ့ iPhone တွေ၊
ဆယ်ကျော်သက်: "လူသည် oh, တန်ချိန်။ မဟုတ်တစ်ခုလုံးဟာလက်ပ်တော့အပေါ်အများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖုန်းများအပေါ်ရုံအကြောင်းကိုလူတိုင်း။ "
ငါ့ကို: "အကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်ငါသူတို့လက်ျာဘက်အတန်းအစားညာဘက်အလယ်၌ထိုသို့ပြုသငျသညျအလောင်းအစား, ပြောချင်နေသေးတယ်ဘာလဲ?"
ဆယ်ကျော်သက်: "အားလုံး ... အ ... အချိန်။ အဘယ်သူမျှမဟာသဒီတစ်ခုလေးကိုငါ့နောက်သို့ထိုင်ရုံဗီဒီယိုများတက် lookin ကသူ့ရင်ခွင်၌မိမိဖုန်းကိုမှာတစ်တန်းလုံး stares ။ သူကပင်သူ့ကိုမြင်တော်မူသောဂရုမစိုက်ပါဘူး။ "
ဆယ်ကျော်သက်: "မိန်းကလေးတစ်ဦးကသူ့ကိုမြင်သည်ဆိုပါကအကယ်စင်စစ်သူလျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်, သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းများကိုကရယ်စရာင်ထင်ပါတယ်။ "
ငါ့ကို: "ကငျညာဘကျသငျသညျအနားမှာပေါ်င့်ကိုသိလျှင်အတန်းအာရုံစိုက်ရန်အဘို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပါတယ်။ "
ဆယ်ကျော်သက်: "အစစ်အမှန်များအတွက်! ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်စရာမိန်းကလေးတွေအားလုံးသင်တို့ပတ်လည်ထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု, သင်သဘောမျိုးလုပ်မထားဘူး, တစ်ဦးကိုမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာထိုင်ပါတယ်, bro နဲ့တူတယ်။ "
ငါ့ကို: "သင်ပထမဦးဆုံး porn ကိုမြင်သောအခါ haha ​​အဘယ်သူမျှမက, ကောင်းစွာသင်ဘယ်လောက်ဟောင်းခဲ့ကြသည်ဘဲနေရသနည်း"
ဆယ်ကျော်သက်: "ငါမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်သို့သွားသောအခါ Eh ကြောင့် 5th တန်းရှေ့တော်၌ထိုနွေရာသီရှိ၏ သူသည်မိမိအ, Xbox ပေါ်မှာတစည်းခဲ့ရသည်။ "
ငါ့ကို: "အကယ်စင်စစ်ပျမ်းမျှအသက်ယောက်ျားတွေများအတွက်ယခု 10 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်အဟောင်းဖြစ်ပါသည်, ကအရူးပဲ။ အိုင်ဖုန်းယခုခဏများအတွက်န်းကျင်ရှိနေသောကြောင့်ကဲ့သို့အလယ်တန်းကျောင်းကဘာလဲခဲ့ပါတယ်။ "
ဆယ်ကျော်သက်: "အလယျပိုငျးကျောင်းကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျပင်ပိုမိုဆိုးရွားတူညီခဲ့သည်။ အဲဒီမှာယောက်ျားတွေထို lunchroom table ၏အလယ်တန်းနှင့်လူတိုင်း၌မိမိတို့ဖုန်းကိုသတ်မှတ်ထားပေသည်သည့်အခါ 7th တန်းအတွက်အကြိမ်အနည်းငယ်လိုလူအစုအဝေးတစ်ခုကိုန်းကျင်တို့ကစောင့်နေကြလော့။ "
ကျနော်တို့ကိုငါ့ရည်မှန်းချက် porn ဘုံအသိပညာကြည့်ရှုနောက်ကွယ်မှမှ neuroscience စေရန်ဖြစ်ပါသည်, ဘဝတွေကိုသန်းပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးသောကပ်ရောဂါ၏အလယ်တွင်ရှိကြ၏။
12 မှာ 23 / 2012 / 10: 13 ညနေ
ငါငယ်ရွယ်စဉ်ကပုံစံသို့ခံစားမိသောကြောင့်, ငါသို့ထဲသို့ဝင်ထင်ပါတယ်။ ငါ ၁၁-၁၂ နှစ်အရွယ်မှာငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ငယ်လွန်းသေးတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ၎င်းနောက်မိန်းကလေးများနှင့်ထွက်ခွာခြင်းနှင့် 'စစ်မှန်သော' လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရရှိခြင်းသည်နိုင်ငံခြားပိုင်နက်နှင့်အနည်းငယ်ကြောက်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်အင်တာနက် porn သည်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးလုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
12 မှာ 30 / 2012 / 10: 06 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည် nofap တွင် ၅၅ ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာပေများထွက်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်မှာပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ porn IRL တွင်တွေ့ရသောအရာများကို (ကျွန်ုပ်ယခင်မိန်းကလေးများနှင့်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ) ကြိုးစားကြည့်သည်အထိကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအားလုံးကိုငါ့စနစ်မှထုတ်ယူနိုင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မြင့်မားသောအတန်းအစားအစောင့်အကြပ်ပေးရန်ငါစဉ်းစားနေသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနွေးထွေးစွာဆက်ဆံချင်ပေမယ့်ငယ်ငယ်တုန်းကစမ်းသပ်မှုမလုပ်ခဲ့ရင်ဘဝအလယ်ပိုင်းအကျပ်အတည်းကြုံရနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီဟာကနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကတော့ - မျက်နှာကသူမကို (ကြမ်းတမ်းတဲ့) fuck ဆိုတဲ့၊ ငါ့မြည်းကိုကိုက်ပြီးငါ့ရဲ့ဘောလုံးတွေကိုစုပ်ပေးတယ်၊ သူမအပေါ်ထားတဲ့ atm ကိုသွားပြီးသူမရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ / သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ cumming ၏ဂန္ညစ်ညမ်းဇာတ်သိမ်း။ ဒီအပေါ်မှာမင်းရဲ့အတွေးတွေကဘာတွေလဲ
01 မှာ 03 / 2013 / 12: 25 နံနက်
wome ၏ objectification လျော့နည်းလာ, ငါ့စိတ်ထဲနည်းနည်း rehumanized
၂ လခွဲကြာပြီးတဲ့နောက်၊ ငါဒါကိုရပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပစ်မှတ်ကတော့ ၂၈ ရက်ဖြစ်ပြီး၊ ပြန်ပြီးတဲ့အခါငါ shit လိုခံစားရတယ်။ အခုတော့ငါ shit ကဲ့သို့မခံစားရဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမလုပ်မိဖို့ငါအချိန်မပေးနိုင်သလိုခံစားရတယ်။
ငါ porn ကိုလွှတ်ပေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ငါ့ကိုကူညီခဲ့ဘူးဟုပြောပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်သလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလျော့နည်းစေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါဆိုကျွန်တော်အကြွေးအနည်းငယ်ပေးပါမယ်။
ငါသွားမယ်လို့ထင်တယ် / r / pornfree ယခုမှစ။ အများဆုံးမှာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါဟာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။ NoFap ၏ကျေးဇူးကြောင့်ဘဝတိုးတက်မြင့်မားစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသောသင်တို့အားလုံးအတွက်ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
01 မှာ 15 / 2013 / 4: 39 နံနက်
လိင်ကညျ့စုံညစ်ညမ်း၏6နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်,
ငါ NoFap စတင်သောအခါငါရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ နေ့တိုင်းအနည်းငယ်လိုင်းများပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာယခုပိုပြီးတစ်ခုခုသို့လှည့်ထားသည်။
လိင်ကညျ့စုံညစ်ညမ်း၏6နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ အမျိုးသမီးတွေလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုအားဖြင့်အရှက်, ယောက်ျားမိန်းမများက emasculated ခြင်းကိုမြင်ပြီးနောက်ကစွဲရပ်အချိန်ပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကနေရာတိုင်းပါပဲ။ ကြော်ငြာအမျိုးသမီးအလောင်းကောင်၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောပုံရိပ်တွေဆံ့; YouTube ကိုရှေ့ပေါ်မှာအတွင်းခံမော်ဒယ်များ၏ရုပ်ပုံလွှာတို့ကသီချင်းကိုသို့စို့နားထောင်ပြည့်ဝ၏။ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အဘယ်သူ၏ရိုးကိုယခုအချိန်အထိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသင်အဆောက်အဦးတစ်ခုအဆုံးကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်များမှာတစ်ဦး 24 /7porn ဆိုင်သို့အိတ်ဖွင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းတံခါးဝ၌ထွက်စေပါတယ်။ သင်စတိုးဆိုင်ထားခဲ့ပါတောင်မှပြီးနောက်, အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။
01 မှာ 30 / 2013 / 1: 47 ညနေ
by mrfreshman27 ရက်ပတ်လုံး
နေ့စဉ်နဲ့အမျှဂရုမစိုက်တတ်တဲ့သဘောထားနဲ့တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာသွားလာနေတယ်။ ပြည်သူ့ယခုငါ့ကိုပိုပြီးခြိမ်းခြောက်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကသင့်ကိုယုံကြည်မှုပေးပြီးလူတွေမြင်ကြတာပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပုံမှန်ဖြစ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ အထူးသဖြင့်မနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အခါကလေးတစ်ယောက်လိုငါခံစားခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းအရာစိတ်ဓာတ်ပါ။ ဒီနေ့ငါဘာကြောင့် PMO လုပ်ရတာလဲငါသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ငါဒေါသထွက်လို့ပဲ အသက် ၁၀ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာဒေါသကြီးတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့်အမေနဲ့အဖေကခွဲနေလို့ပဲ။ ငါသာမန်မိသားစုလိုချင်တယ်။ နံရံတွေကိုထိုးပြီးထိုးနှက်တယ်။ ငါ PMO ၏အဆုံးမဲ့သံသရာစတင်သောအခါငါထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ငါလုပ်လိမ့်မယ်။ ဒီ ၂၇ ရက်လုံးလုံးလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြင့်မျက်နှာကိုပါးရိုက်လိုက်သည်။ ငါကျောင်းဝင်းပတ်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါဒီတစ်ကြိမ်လုံးပျောက်ဆုံးနေသောအရာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဘဝဟာအံ့သြစရာပါ။ ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဓိပ္ပာယ်မရှိစေပေမယ့်၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်။
01 မှာ 30 / 2013 / 6: 34 ညနေ
ငါ 27-4yo မှ Porn စောင့်ကြည့်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတဲ့သူတစ် ဦး က6နှစ်ပေါ့
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄ နှစ်မှ ၆ နှစ်အတွင်းရှိ Porn ကိုကြည့်ရှုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ပြီး AMA 27 / 4yo တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
by ProbJustBSing47 ရက်ပတ်လုံး
ငါ ၂၇ နှစ်ရှိပြီ၊ နယူးယောက်စီးတီးမှာနေတယ်။ ငါ ၃ နှစ်အရွယ်မှာနယူးယော့ခ်၊ လောင်းကျွန်းရှိကွန်ဒိုမီနီယံတစ်ခုတွင်ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မမိဘတွေဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့လူတန်းစား၊ ဆင်ခြေဖုံးမိသားစုတစ်စုပါ။ အမေဟာကလေးဘဝတုန်းကသူ့အမေ (အဘွား) ရည်းစားကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါသူမအရမ်းဂရုစိုက်ခဲ့တယ်၊ ကလေးဘဝကိုဘာမှမထိခိုက်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ကလေးတွေအများစုလိုပဲကျွန်မရဲ့အစ်မ (၁၈ လငယ်ငယ်) နဲ့ကျွန်မမှာကလေးထိန်းထားတယ်။ သူမ၏အမည်မှာ Andrea ဖြစ်သည်။ သူသည်အသက် ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်တွင်အသက်ကယ်သမားသို့မဟုတ်ရေကူးလေ့ကျင့်သူဖြစ်သည်။ သူမကကလေးများအားရေကူးတတ်ပုံကိုသင်ပေးသည်။ ကျွန်တော့်မိဘကသူနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်သူမကိုသိကျွမ်းလာပြီးနေ့စဉ်တွေ့မြင်ပြီးနောက်အစ်မနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒီအစီအစဉ်သည်မည်မျှအထိစတင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်အသက် ၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်အရွယ်ရှိ Andrea သည်သူမနှင့်သူမကြည့်ရှုရန်“ ဗီဒီယိုများ” ကိုစတင်ယူဆောင်လာသည်ကိုကျွန်မမှတ်မိသည်။ ဤဗီဒီယိုများသည်စတင်ရန်“ ညစ်ညမ်းသော” တိပ်ခွေများမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်အရွယ်ကလေး (လိင်ဆက်ဆံမှုမြင်ကွင်းများဖြင့် R ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း) အတွက်မသင့်တော်ပါ။ အဲဒီမြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပျက်နေသလိုပဲသူမငါ့ကိုလိင်အကြောင်းပြောတာမှတ်မိသေးတယ်။
ဒီလိုမျိုးထိတွေ့မှုကပိုပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါကြည့်နေတဲ့“ မြင်ကွင်းများ” ကပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်။ အပြည့်အဝလွဝတ်လစ်စလစ်, နှင့်ပိုပြီး။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နေသည့်အရာအားကျွန်ုပ်အားရှင်းပြပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းများကိုကြည့်နေစဉ်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍“ အကြံဥာဏ်ပေးသည်” နီးပါးရှိသည်။
လများစွာကြာပြီးနောက်မှသူသည်အပြည့်အဝလွမ်းဆွတ်သည့်ညစ်ညမ်းသောတိပ်ခွေများကိုယူဆောင်လာသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာငါမြင်ကွင်းများကိုခံစားရန်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်အတိအကျမသိသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုသူတို့နှိုးဆွပြီး“ တိုက်တွန်းခြင်း” ဟုခံစားခဲ့ရသည်မှာ၎င်းကိုဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်၏အစ်မသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိနေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ထက်မလောက်ပါ။ Andrea ကသူမနှင့်သူမတို့ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အားတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ သူမကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ခံစားမိစေပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍“ နှောင်ကြိုး” ရှိသည်။ ကျွန်မရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေပြီးအောင်လုပ်ဖို့သူကသူတို့ကိုသုံးလိမ့်မယ်။ “ သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအပြီးသတ်စားပါ။ သို့မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ” ။
ဒါကနှစ်နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါသူငယ်တန်း (5 သို့မဟုတ်6နှစ်အရွယ်) တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစတင်သတိရပါ။ ငါအမြင်အာရုံနှင့်ရုပ်ပုံများကအလွန်နှိုးဆွခဲ့သည်, ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ငါအဝတ်အချည်းစည်းမဟုတ်သို့မဟုတ်သမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်ဘာမှဝတ်ထားသူအချို့မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရုံနဲ့၊
ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ Porn-Induced ED သည် (နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီ) ဖြစ်သည်။ Sex အမြဲတမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်းကြပ်စွာတည်ရှိပြီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလွန်အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲသို့လောင်ကျွမ်းသွားသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်တော်မကျော်လွှားနိုင်အောင်မလှုပ်ခဲ့ဖူးပါ။
ငါပိုပြီးအသေးစိတ်, အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆက်လက်နှင့်သွားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါပို။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းလိုသူမည်သူမဆိုဖွင့်ထားခဲ့ပါ။
ငါလမ်းလျှောက်-in ကိုခံခဲ့ရပါတယ်အပေါ်, ငါ့အဘအသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး6သို့မဟုတ်7နှစ်ပေါင်းမှာအဟောင်းငါ masturbating နေစဉ်။
ငါအမှုအရာကိုထိ / ခံစားရန်အလွန်ချမ်းအေးဖြစ်၏။ ငါသည်အခြားသူတစ်ဦးဦးထံမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များကနှိုးဆွခဲ့ဖူးဘူး။
“ သဘာဝနှင့်ပျိုးထောင်ခြင်း” အပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်များသည်ဤအခြေအနေအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
02 မှာ 07 / 2013 / 9: 48 ညနေ
ယနေ့ငါတဦးတည်းသီတင်းပတ်အတွင်းအသက်နှစ်ဆယ်လှည့်ငါ, ငါနှင့် ပတ်သက်. အသက်တဆယ်သုံးနှစ်ခဲ့ကတည်းကငါတော်တော်များများ non-stop masturbating ပါပြီ။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲပြီအရှည်ဆုံးတစ်လအကြောင်းကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေမရှိတော့ထက်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများလုပ်ဖို့များအတွက်ဿုံသဘာဝကအရာဖြစ်ပြီး, ငါလက်ခံပါ။ သို့သျောလညျး, ငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်ယုံကြည်ကြဘူး။
ဒါကြောင့်ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အသက်ရှည်သမျှနှင့်ငါ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၏အစအဦးအဘို့အ masturbating ခဲ့ကြရတယ်။ ငါကအများဆုံးယောက်ျားတွေများအတွက်မသေချာပါတယ်တူသောဒါဟာအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ် masturbating, ပယ်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာမီငါနေ့တိုင်းလုပ်နေကြခဲ့ပါတယ်နှင့်မကြာမီငါ porn ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
porn ကိုတွေ့ရှိခြင်းငါ့ကိုရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေ၏တစ်ဖွဲ့လုံးကမ္ဘာသစ်ဖွင့်လှစ်။ ငါ porn လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှာဖွေတာနဲ့ masturbating ခဲ့သည်။ ငါတကယ် porn ၏စော်ကားသောရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. နက်ရှိုင်းစွာစဉ်းစားရန်လည်းနုပျိုကြီးနှင့်မည်သို့သောဤမိန်းမတို့သည်ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေးအဘို့အစော်ကားခံရခဲ့သည်။
အမှုအရာနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ဤကဲ့သို့သောပေါ်မှာထမ်း။ ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းဆိုရေရှည်မိန်းကလေးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါနဲ့ကျွန်မ porn မှ masturbate မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထိုအခါ 16 မှာကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများနှင့်ကျွန်မ Facebook အကောင့်ကိုစတင်ခဲ့ဘယ်မှာကောလိပ်, ဝင်ကြ၏။ Facebook က, ငါ့အဘို့ masturbatory အခွင့်အလမ်းဘုံမှတစ်ခုလုံးသစ်ကိုဖွင့်လှစ်တံခါးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများ, အကြံပေးချက်များ pose အတွက်အချိန်အများကြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဓါတ်ပုံကူးတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏နေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် horny ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကိုရွှေတောင်ပေါ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကနေသိတယ်မိန်းကလေးငယ်များ, ငါကောလိပ်ကျောင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပင်မိန်းကလေးများပုံမှ masturbate လိမ့်မယ်။
ယခုငါတို့ "ရဲ့ပိုလတ်ဆတ်" တပတ်ကိုငါလုံးဝငါ့အခွံထဲကလာနှင့်လုံးဝလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပါဆုံးမိန်းကလေးငယ်စကားပြောနိုင်စွမ်းရှိရာတက္ကသိုလ်မှရွှေ့။ ကျွန်မနှင့်အတူအားထုတ်ခြင်းနှင့်ကခုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေနှင့်အတူထွက်လုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်ကျွန်တော်ထွက်သွားလေ၏ (ညစဉ်ညတိုင်းခဲ့ပြီးသော) နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်အပေါ်ငါပြန်နေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အရပျရပင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံပေမယ့်အခြားသူတော်တော်များများအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့ပါဘူး။ ငါပြန်ရှာနေငါရည်းစားရနှင့်ငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးဖို့အတော်လေးအပူတပြင်းခဲ့, ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါနှင့်အတူအဆက်အသွယ်ထားရှိမည်ဆိုပါစို့။ Embarrassingly ငါသိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အများကြီးပေါ် လာ. , နှင့်သူမ၏စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ကြ။ ဒါဟာစို့, ဒါပေမယ့်အခုကကျော်ပေါ့။
ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်နေစဉ်, ငါတိုးအမာခံ porn စောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ မြည်းအတွက်ဆို့နှင့် fucked ခံရမိန်းကလေးများ Videos ကိုငါအများကြီးစောင့်ကြည့်မယ်လို့သူတွေဖြစ်တယ်။ ငါပင်ငါ Facebook ပေါ်မှာသိတယ်မိန်းကလေးများများ၏ဓာတ်ပုံများကိုတွေ့ရှိရ, ပြီးတော့ငါကငါကဗီဒီယိုထဲမှာ fucked ခံရသိတယ်မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့သည်စိတ်ကူးနိုင်ဒါဗီဒီယိုများအတူထားတော်မူ၏။ ဒါဟာငါနားလည်သဘောပေါက်, ဖျားနာတယ်။
porn, ငါ၏စိတ်ကိုပျက်စီးခဲ့သည်။ ကျွန်မသိသောမိန်းကလေးတစ်ဦးစိတ်ကူးအခါတိုင်း Now ကိုပင်သူတို့အားကောလိပ်၌ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုခဲ့ကြသည်ဘယ်သူငါတကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများလျော့နည်းသွားစေမှာသူတို့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာမိန်းမတို့အဘို့အကြှနျုပျ၏လေးစားမှုပျက်စီးခဲ့သည်။ ငါလိင်အရအခွင့်အရေးဖြစ်ဆိုကြသည်ကြဘူး, ငါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ပေမယ့်ငါတောင်ဒီအချက်မှာအဓိပ္ပာယ်မပါဘဲလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်သူတို့ကို idolize ။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးကြီးကိုနေသောသုံးအမျိုးသမီးအိမ်သူအိမ်သားအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်, ငါသူတို့အပေါ်မှာကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးမှတဆင့်သွားအမာခံလိင်၏အကြံအစည်နှင့်အကြိမ်ဝန် masturbated ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏အချက်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ masturbating ပြီးနောက်, ငါလူတစ်ဦးနေမကောင်း, စိတ်မကောင်းဆင်ခြေဖြစ်ကြောင်းကိုငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ ငါစိတ်ပိုင်းငါသိတိုင်းအမြိုးသမီးတလျော့နည်းသွားစေငါငါ့စိတ်ကိုပုပ်နေပါတယ်။
ငါတကယ်ငါ၏အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုလျှော့ချချင်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်, လုံးဝ porn ထွက်ခုတ်ဖြတ်။ ငါအပြည့်အဝတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရပ်တန့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သံသယ, ဒါပေမယ့်ငါကလုပ်ပေးသောငွေပမာဏကန့်သတ်ချင်တယ်။
အဆိုပါပြဿနာကိုငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့စွဲရှိသည်နှင့်ငါရပ်တန့်ဖို့ willpower ကင်းမဲ့, ဒီအချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါကတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြတောင်မှအခါ, ငါပဲလုပ်နေတာတက်အဆုံးသတ်။ အဲဒီစားပွဲပေါ်ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်မရရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသစ်စတင်ကူညီပေးဖို့, ဒီတောင်းပန်စာအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်စော်ကားသောအတှေးအဘို့, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အမျိုးသမီးများ, စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, တောင်းပန်ပါတယ်။ ငါကျော် masturbated နှင့်စော်ကားသောလမ်းအတွက်စဉ်းစားကြသူငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိကျွမ်းသည်ကိုမိန်းမအား, စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, တောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါလက်ရှိတွင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်နယ်ရခွင့်များအတွက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစိတ်ရင်းမှန်နဲ့တောင်းပန်။
ငါသည်ငါ့ကိစ္စရပ်များတွင်အလုပ်လုပ်ရမယ်, ငါခိုင်ခံ့နေဖို့ကမှာစောင့်ရှောက်လျှင်, ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုကိုယ်နှိုက်ကပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ငါအများကြီးပိုလေးစားမှုလမ်းအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်
03 မှာ 02 / 2013 / 9: 52 ညနေ
nofap ၏ 20 ရက်အကြာမှာတကယ်စိုးရိမ်ရယူခြင်းပေမယ့်လုပ်ရပ်အတွက်ငါ့အစ်ကိုကိုဖမ်းငါ့ကိုအာရုံစိုက်နေဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်!
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါစတင်ကတည်းက ၂၃ ရက်ရှိခဲ့တယ်။ ငါအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေမြင်နေရတုန်းပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ကြည့်ရှု ညစ်ညမ်းမှာဤမျှလောက်များစွာသောကြိမ်ယနေ့ငါကထဲကရိုက်ယူခဲ့သည်မီ။
ငါအခန်းထဲကထွက်လာပြီးငါ့ရဲ့မီးဖိုချောင်ဆီကိုရေနည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်၊ ငါ့ညီလေးကသူ့လက်တော့ပ်နဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နေတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ အခုသူအသက် ၁၃ နှစ်ရှိပြီ။ အိမ်ကနေထွက်မထွက်လာတော့ဒါကိုငါတကယ်သတိမထားမိဘူး။ အမေနဲ့အဖေကအိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတော့သူ့ကိုသွားပြီးမေးကြည့်တော့သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ သူ့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ငါမြင်တာကိုမင်းခန့်မှန်းနိုင်တယ် သူကဖန်သားပြင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီး“ ငါမသိဘူး” (နင်တို့ ၁၃ နှစ်ရှိပြီလား၊ ဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်) ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာတုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူက porn ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ခွေးတွေကိုအိမ်အပြင်ကိုခေါ်ဖို့ကူညီပေးပါလို့သူ့ကိုတောင်းခဲ့တယ်၊ သူအလုပ်လုပ်နေတုန်းသူ့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ထားတာကိုငါကြည့်လိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ထွက်ခွာသွားတော့မယ်။ “ မင်းဘာကိုကြည့်နေတာလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ကိုကွန်ပျူတာပေးပြီးမင်းအဲဒီအကြောင်းကိုမင်းကိုပြောခွင့်ပြုပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေနဲ့အဖေကိုဖုန်းဆက်ပြီးမင်းဘယ်လောက်များများကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်။ ” ဒါကသူ့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်၊ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲငါ့ကိုသူရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပေးခဲ့တယ်။ ငါကအထဲမှာယူ။ သူသည်ခွေးစောင့်ကြည့်ဖို့အပြင်ဘက်ထွက်။ စဉ်ကဖွင့်လှစ်။ ငါမြင်သောအရာဖြစ်ခဲ့သည် porn ၏ 15 tabs များကျော် မိမိအ Google Chrome ပြတင်းပေါက်ပေါ်မှာ။ ငါတကယ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ရှုလိုသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံကိုသတိမရကြသလော ကောင်းပြီအခုကမှာရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့ငါ့ထံသို့ဘက်မှာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါသည်သူ၏သမိုင်းကိုရှင်းလင်းပြီးညစ်ညမ်း blocker installed (ထိုလွန်းရုပ်ဖျက် mode မှာအလုပ်လုပ်မယ်လို့) နှင့်သူမဆို porn တက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အခါတိုင်းကျွန်မအီးမေးလ်တစ်စောင်မှတဆင့်အကြောင်းကြားစာရလိမ့်မယ်ဒါမှထားကြ၏။
သူပြန်ဝင်လာတယ်။ ငါသူနဲ့ထိုင်ပြီး TEDx ဗီဒီယိုကိုပြပြီးသူနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ သူကဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့မိဘတွေကိုမပြောဖို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုကတိပေးပြီးသူ့အိမ်စာကိုဆက်သွားခဲ့တယ်။ ငါသည်သူ၏ကွန်ပျူတာကိုတစ်လသို့မဟုတ်ဒီတော့သူသည်ညစ်ညမ်း blocker ဖျက်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယခုငါတပြင်လုံးကို nofap အကြောင်းမရှိအကြောင်းကိုညျခှနျအား (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်စိတ်အားထက်သန်) ခံစားရတယ်, ငါ့လှုံ့ဆျောမှုယခုယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းပါ!
03 မှာ 26 / 2013 / 1: 03 နံနက်
အသက်အရွယ် 10 မှာကျွန်မပထမဦးဆုံးစကားရှာဖွေနေ, အင်တာနက် browsing အတွက်စတင်
ငါငယ်ငယ်တုန်းက porn စတင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်၊ “ boobs” နှင့်“ အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများ” စသည့်စကားလုံးများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာမာစတာကစားခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ကားလမ်းကိုအိမ်ပြန်အလောတကြီးအမြန်မောင်းခဲ့ပြီး၊
တစ်ချိန်ချိန်အလယ်တန်းကျောင်းအတွက်စတင်ခြင်းကြောင့်ကျိန်းသေဆိုးရွားလာခဲ့သည်အထက်တန်းကျောင်းတလျှောက်လုံး။ ငါ porn ကိုကြည့်, ငါ၏ဒစ်အမှန်တကယ်အဖု / ပေါ်မှာအသားအရေကိုချွတ်ပွတ်ဖူးဒါကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ masterbate မယ်လို့အချိန်များသတိရပါ။
ကောလိပ်၏ပထမနှစ်တွင်အခန်းဖော်တစ်ယောက်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အသုံးပြုမှုသည်လျော့နည်းလာသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝရှိခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါ၏အလေ့အကျင့်တိုင်းတစ်ခုတည်းည porn ကိုကြည့်အိပ်ပြီးတော့ masterbate ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါကလူနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်2န်းကျင်ကြီးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသို့မဟုတ်ဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ပြန်အခန်းထဲမှာသွားသူတို့ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။
ငါမှာရှာဖွေနေခဲ့ porn ကျိန်းသေ ပို. ပို. အကြမ်းဖက်များနှင့် warped ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ် vanilla ပစ္စည်းပစ္စယမရှိတော့ငါ့ကိုနှိုးဆှနိုင်ဘူး။ ငါသည်လည်းကျိန်းသေကြောင်း porn ငါ့ကိုတတျနိုငျသမဆိုမိန်းကလေးထက်အများကြီးပိုခက်တယ်တွေ့ရှိခဲ့
03 မှာ 26 / 2013 / 6: 08 ညနေ
by heisable6 ရက်ပတ်လုံး
- ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလေးစားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး၊ အော်ဂဇင်.
- ငါ့စိတ်ကိုရေချိုး dopamine.
- ငါ့ကိုမှအာရုံ အမှန်တရား.
PMO မှတစ်ဆင့်ယာယီပျော်ရွှင်မှုမှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏သာမန်အခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်လက်ခံသောကြောင့်၊ ရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်မည့်အစားကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်.
- အဲဒါကိုဆက်လုပ်ဖို့အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့် PMO.
ငါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကို y'all နဲ့မျှဝေချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ PMO ကိုငါ့ဘ ၀ ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုတာကိုငါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်စေလို့ပဲ။
04 မှာ 02 / 2013 / 7: 22 ညနေ
ဈဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစတင်မှီ, ကိုယ်သက်သက်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ob အဖြစ် famales ကြည့်ရှုအားပေး
ရက် ၃၀ အစီရင်ခံစာ - သိသာထင်ရှားသောကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
ဟေ့ကောင်တွေ။ မနေ့ကအစဉ်အမြဲငါ nofap ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးငါ၏ 30th နေ့က hit ။ ကိုယ်စတင်ခဲ့ပြီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းပစ္စယမှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ငါအကျဉ်းနောက်ခံ: http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/19lgtr/day_2/ ဒါပေမယ့်ငါကအကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်၊ ငါဒါလုပ်နေတာလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ ၂-၃ နှစ်လုံးလုံးမှာ Ive ဟာစွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကျွန်တော်စာရေးဆရာတော်တော်များများတော့မများပါဘူး၊ ဒါကြောင့် im gunna က၎င်းကိုတိုတို၊ ရိုးရှင်းပြီးချိုမြိန်စေပါ။
အမျိုးသမီး၏အမြင် - ဒါကအသံထွက်သွားမှာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါတွေကိုမစခင်၊ ငါဟာအငတ်ဘေးတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်သာရှုမြင်ခဲ့သည်၊ ဒီခံစားချက်တွေကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီးဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ကိုယေဘူယျအားဖြင့်ဘယ်လိုရှုမြင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတိရစေခြင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီအမြင် Tho ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ (၂၀) ​​ရက်တွင် Vegas သို့သွားသောအခါအထူးသတိပြုမိသည်။ အစင်းကလပ်သို့သွားခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေပုံပေါက်သည်။ ဒါဟာအရာအားလုံးဘယ်လောက်အတုအလွန်သိသာခဲ့ပါတယ်။ ရင်ခွင်ထဲကကခုန်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအပါအ ၀ င်ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာနဲ့ပွတ်တိုက်တာကိုမသိသေးတဲ့ကျပန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းကင်မှာရှိနေပုံရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကငါ PMO စွဲလမ်းသူတ ဦး ဖြစ်တဲ့ vegas ရှိ Strip Club သို့သွားပြီး“ ကောင်းကင်” မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ငါမကူညီနိုင်ပေမယ့်ခဏပျော်ရွှင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားတွေအတွက်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ညွှန်ပြဖို့လိုတယ်လို့မခံစားရတော့ဘူး။ ငါအတိတ်ကာလကတော်တော်လေးလုပ်ခဲ့တယ်။
04 မှာ 05 / 2013 / 1: 09 နံနက်
အနည်းငယ် vanilla SC စောင့်ကြည့်အကြားကွဲပြားခြားနားချက်ရှိပါသည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 3, 2013 05: 24 AM PDT
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မျိုးရှက်ခဲ့ပေမယ့်, ကောင်းတစ်ဦးအိမ်မှာကြီးပြင်းအားကစားကစားကာ loner ဘယ်တော့မှခဲ့ပေမယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူအနည်းငယ်ရုန်းကန်ပြီးရလဒ်အဖြစ်အသက်အရွယ် 23 န်းကျင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအများကြီးမှလှည့်ခဲ့ပါ 16 အသက်တက်ကြီးထွားလာဖြစ်၏။
"ကလေးဘဝတုန်းကညစ်ပတ်တာကိုငါကြည့်ခဲ့တယ်" တဲ့။ vanilla မြင်ကွင်းအချို့ကို VHS တိပ်ဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင် tab ၂၀ ကျော်ဖွင့်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗီဒီယိုများတစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောအမျိုးအစားများနှင့်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် စာရေးသူကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြသည်။
သူတို့အိပ်ပျော်နေချိန်မှာယောက်ျားတွေအဆက်မပြတ်စသည်တို့မှာရှိတဲ့အကျွန်ခံ, ချေမှုန်းရေးကသူတို့ကို, အမာခံလိင်သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျးအမြိုးသမီးမြားမုဒိမ်းကျင့်အကဲခတ်ကြောင့်မျိုးခက်သူမကအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအခါမိန်းကလေးတစ်ဦးတို့ကဖွင့်ခံရဖို့စေသည်။
အဆိုပါပြဿနာသင်သည်အမြဲတစေကစောင့်ကြည့်ကာအော်ဂဇင်အခါသင်တို့ဆီသို့ wiring ဖြစ်ကြောင်းအနှစ်သာရညစ်ညမ်းပေမယ်န့်အသတ်အမြင်အမျိုးမျိုး၏ပမာဏနှင့်အသစ်အဆန်းရရှိနိုင်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့မှာတော့ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနထားရှိခြင်းသည်ပျင်းစရာကောင်းနှင့်ဂြိုလ်သားဖြစ်လာ, သူကတောင် porn ဆိုဒ်များကဲ့သို့အ youtube ကပေးထိမှန်သည့် dopamine နီးစပ်လာမပေးပါဘူး။ လိင်အမှန်တကယ်ဈအမာခံ porn ၏နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အသက်အရွယ် 19 မှာကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသောအခါကိုယ့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူတစ်စိုက်ထူမရနိုင်တော့ငါ့အဘို့စိတ်ပျက်ခဲ့ဈမိန်းမတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမ arousal ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်အချည်းနှီးသက်သက် ၄ လရှိပြီဖြစ်ပြီး (၄ င်း၏ (၄) လတွင် (၃) ကြိမ်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ကန့်ကွက်ခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်၊ ငါ၌ဖျားနာနေသောလိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုမရှိတော့သည့်အပြင်ပုံမှန်ယောက်ျားများကဲ့သို့ခံစားချက်ဖြင့်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပိုလို့ခံစားရတယ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်နောက်တဖန်ပျော်ရွှင်မိပြီးဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့မခံစားရတော့ပါ
အခုတော့အသက် ၁၆ နှစ်မှာစပြီးအပျိုဖော်ဝင်စဖြစ်ခဲ့တယ်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များစသည်ဖြင့်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အကြားလူငယ်များစွာသည်အသုံးပြုသူနှစ်သက်သည့်မည်သည့်အရာများကိုမဆိုလွယ်ကူမြန်ဆန်သော၊ ယောက်ျားများသည်ငယ်ငယ်ကတည်းကစတင်ခဲ့သော vanilla porn နှင့်ပင်ပြissuesနာများကိုသတင်းပို့သည်။ ၎င်းတွင်လိင်မှုကိစ္စ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းနှင့်နှိုးဆွခြင်း၊ dopamine တုန့်ပြန်မှုနှင့်အစစ်အမှန်အခြေအနေများတွင်နှိုးဆွခြင်းများဖြစ်ပုံရသည်။
04 မှာ 14 / 2013 / 11: 40 ညနေ
porn စွဲအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ငါ့ကိုယောက်ျားတွေယုံကြည်စိတ်ချ
porn စွဲယောက်ျားအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်, ယောက်ျားတွေငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ။ ငါခံစားခဲ့ရတယ် နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏အချိန်အားလုံးကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့ပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၊ အမှန်တကယ်မရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ။ ဗီဒီယိုအသစ်တိုင်းသည် ၁၀ စက္ကန့် ၂၀ မှ ၂၀ အထိသာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးနောက်မှအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေရသည်။ ငါ ၀ င်လာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူး ငါကအရာအားလုံးကိုစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး၊ ငါ့ဘ ၀ ကိုမပျော်မရွှင်နဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်မားနေတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လက yourbrainonporn ကိုရှာတာကကျွန်တော့်ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါမရှိရင်ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲနေတုန်းပဲ။ ဒါကငါဟာတက္ကသိုလ်ကနေထွက်ပြီးတခြားလူတွေဆီကနေထွက်သွားရမယ်၊ ဘယ်သူသိလဲဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်။ ငါလည်းအဲဒီအချိန်အတောအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေနိုင်တယ်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ကျွန်တော့်ဘဝဘယ်လောက်များများစို့နေတာလဲဆိုတာမယုံနိုင်အောင်ပါပဲ။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေပေမယ့်ခက်ခဲသည်။ ငါ (ယနေ့ PMO မရှိသည့် ၈၇ ရက်နေ့) သည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကန်ခဲ့ပေမည် လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ရင်ငါဘာမှမခံစားရဘူး စစ်မှန်သောလိင်သည်နှစ်သက်ဖွယ်မဟုတ်ပါ။ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုပြန်တပ်လိုက်သည်နှင့်တူသည်။ ငါအနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
04 မှာ 22 / 2013 / 6: 56 ညနေ
ယခုငါအရာအားလုံးကိုမှ FAP ။ ဂိုး, လျှက်, အမာခံစအို, prolapses
အသက်အနှစ်က start 15 သင့်ပါတယ် NoFap? (NSFW)
ကျွန်မအသက် ၁၅ နှစ်၊ လ၊ ၁၆ လရှိလိမ့်မယ်။
ငါများသောအားဖြင့်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးကြိမ်, နေ့တိုင်း FAP ။ ကျွန်မအကြောင်းကို 12 နှစ်အရွယ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုငါအရာအားလုံးကိုမှ FAP ။ ဂိုး, လျှက်, hardoce စအို, prolapses, မုဒိမ်းမှု, gangbang, bdsm, လိင်တူချစ်သူ, bi, လိင်တူချစ်သူများ, က CP (တစ်ကြိမ်ထက်ကျိန်းသေပိုပြီး), 34 အုပ်စိုးအရာအားလုံး။
ငါသည်ငါ့လိင် atm ကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်စတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ငါသည်ညစ်ညူးသောကျေးဇူးကြောင့်ကိုယ်ကို bi ဟုယူမှတ်သည်။ ငါဘာပေါက်ပေါက်လဲဆိုတာဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါတောင်အချို့စအိုကစားနှင့်အတူစမ်းသပ်။
မေးခွန်းမှာ Nofap ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားသင့်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် porn နဲ့ fapping ကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားတာ၊ ငါတကယ်မသိဘူး
05 မှာ 24 / 2013 / 6: 31 ညနေ
2 လပြည်တန်ဆာအခမဲ့! သုံးပြီးစဉ်းစားသငျသညျမြားအဘို့အ
2 လပြည်တန်ဆာအခမဲ့! အစောင့်အကြပ်သုံးပြီးစဉ်းစားသငျသညျမြားအဘို့အ
by prostaddict9945 ရက်ပတ်လုံး
သငျသညျအကြှနျုပျကဲ့သို့သော - အပျိုစင်၊ လူမှုရေးအရအနည်းငယ်အဆင်မပြေသော၊ ပိုက်ဆံများဖြင့်လှည့်ပတ်သွားလိုလျှင် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတိအကျဖြစ်သည်။ ဒါကငါဘာကြောင့်ရပ်တန့်ပြီး NoFap စိန်ခေါ်မှုကိုယူနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရန်ငါအသုံးပြုသောအတွေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျ $ 250 တစ်နာရီတစ်နိမ့်ဆုံးတစ်လျောက်ပတ်သောအစောင့်အကြပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
1) မင်းဟာဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုသူမမေးလိမ့်မယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့အလုပ်သတင်းအချက်အလက်၊ သင့်နာမည်အပြည့်အစုံနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲပေးခဲ့တယ်။ Goodluck သည်ရုံးသို့ထွက်သည်သို့မဟုတ်တစ်နေ့တွင်အဆင့်မြင့်အလုပ်တစ်ခုရနေပြီ။ သင်ယခုသင်ကшантажလုပ်ခြင်းကိုကျင့်နေသည်။
2) သင် ATM စက်တစ်လုံးကိုသွားပြီးဒေါ်လာ ၂၆၀ တန်ငွေသားကိုထုတ်ယူပြီးပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်လိုက်မယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ဒါကိုကောင်းကောင်းကြည့်ပါ ဦး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဒီငွေတွေကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်။
3) အစည်းအဝေးမတိုင်မီတစ်နာရီအလိုတွင်သင်သည်မိန်းကလေးကိုသင်ခေါ်ဆိုသည် - သင်၏လူမှုရေးအရအဆင်မပြေသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးဖုန်းနှင့်သင်၏စကားများကိုသူမနှင့်ခွဲလိုက်သည်။ သူမကမင်းကိုလိပ်စာမဲ့စွာမပေးတော့ဘူး
4) သင်သည်ဟိုတယ်သို့ရောက်ပြီးသင့်ကားထဲတွင်ရှိသည်။ မင်းသူ့ကိုဖုန်းခေါ်တယ်၊ သူကမင်းကိုအခန်းနံပါတ်ပေးတယ်။ သူမက ၁၀ မိနစ်လောက်စောင့်ရမယ်၊ ကားရပ်နားသည့်ဟိုတယ်တွင်သတိထားစောင့်ကြည့်နေစဉ်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်။ ရဲများကမရှိကြပါ။ သင်သည်အခြားသူများနှင့်မျက်လုံးချင်းမဆုံမိရန်ကြိုးစားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 'သူတို့ဟာထူးဆန်းနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သတိပြုမိရင်ငါလုပ်နေတာကိုသဘောပေါက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ '
5) အချိန်နီးပြီ၊ ရက်ချိန်း ၅ ရက်ကျန်တော့သည်။ သင်ဟိုတယ် lob ည့်ခန်းသို့လမ်းလျှောက်ပြီးဓာတ်လှေကားကိုစတင်ရှာဖွေသည်။ သင်ဟာသင့်ကိုယ်သင်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသော်လည်းသင်၏အာရုံကြောများမြင့်မားနေပြီးသဘာဝအလျောက်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေသောမိမိကိုယ်ကိုကြည့်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်သင်၏မျက်လုံးများသည်ရှေ့မီးများ၌သမင်ကဲ့သို့ကျယ်လာပြီးသင်ထိတ်လန့်သွားသည်။ သင်မှားယွင်းသောအလှည့်ကိုသွားပါ၊ shit၊ သင်ဓာတ်လှေကားဘယ်မှာရောက်နေတယ်၊ ထိုနေ့တွင်သင်၏အစောင့်အကြပ်တွင်ဖောက်သည်အများအပြားရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အကယ်၍ သူတို့ကတစ်ခုခုကိုဖမ်းနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းများကသင့်ကိုမမှတ်မိလျှင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများနှင့်သင့်ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လျှင်ကော။ သင်မျက်လုံးချင်းဆုံပြီးသင်လုပ်နိုင်သမျှအကုန်ရှောင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဓာတ်လှေကားကိုရှာလိုက်သည်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းနဲ့အတူရှိနေပြီ သင်ခလုတ်ကိုလိုချင်သောကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ထိလိုက်ပြီးသင်တက်နေစဉ်တွင်သင်ဘေးတွင်ရှိသောသူသည်သင်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြုရန်သို့မဟုတ် ပို၍ ပင်ဆိုးရွားသွားမည်ကိုကြောက်လန့်နေသည်။ သင်နှင့်အတူတူပင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှဆင်းပါ။ သူမတိုင်မီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာချွတ်ရရှိသွားတဲ့ ... Phew, အနီးကပ်ခေါ်ဆိုခ။
6) နောက်ဆုံးသင်ချိန်းဆိုချက်ကိုရောက်ပြီ မင်းတံခါးဆီလျှောက်သွားတယ် မင်းငရဲလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် သငျသညျအဘယ်သူမျှမရှိတယ်သေချာအောင်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပါ။ ခေါက်တယ် တံခါးကတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်၊ သင်အတွင်းထဲဝင်သွားတယ်၊ ပြီးတော့အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုယူမယ့်မိန်းမနောက်တံခါးကနောက်ကနေထွက်လာတယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲ ၀ င်ရောက်လာတဲ့ပထမဆုံးအတွေး - သူကပြောတယ်၊ သူကနွေးနေသေးတယ်၊ ငါသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာငရဲလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာကိုး။ အာရုံကြောတွေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားတယ်၊ သူကသင်နည်းနည်းပိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုသူကပြုံးပြီးဖက်လိုက်တယ်။ အိုး, လမ်းဖြင့်, သူမသူမ၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သင်သူမ၏ခေါင်းကို၌သင်ကစားသောစိတ်ကူးယဉ်ကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမအနီးရှိအရပ်၌မရှိ။
7) သူမကသင့်ရဲ့လှူဒါန်းမှုကိုတောင်းတယ်၊ သူမကျေးဇူးတင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ရေချိုးခန်းထဲမှာလန်းဆန်းနေသလားလို့မေးတယ်။ မင်းပြောတာသေချာတယ် သငျသညျရေချိုးခန်းသို့ ဦး ။ သုတ်သင်ပြီးအမြန်ရေချိုးပါ။ သငျသညျအလွန်အမင်းအာရုံကြောပါပဲ - စိတ်လှုပ်ရှားမှုထက်အနုတ်စွမ်းအင်နှင့်ပိုမိုအာရုံကြော။ မင်းစူပါမော်ဒယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မင်းရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကသင်တံခါးဝထဲဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအရာနှစ်ခုကကွဲသွားတယ် - 1) *သင်ဟာမိန်းမတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးလိင်အာမခံချက်ရှိရင်တောင်မှအစောင့်အကြပ်ဟာနောက်ထပ်လူသားတစ်ယောက်ပါ။ မင်းခေါင်းထဲမှာမြင်ယောင်မိတဲ့စိတ်ကူးယဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခင်ဗျားမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ *2) သူမသည်သင်ထင်လိမ့်မည်ဟုထင်သကဲ့သို့သင်တို့ကဲ့သို့ပူသို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်ဘယ်နေရာမှာမဆို။ သင်ရုံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤအချက်မှာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသွားတာပေါ့။ သငျသညျကိုယျ့ကိုယျကိုခန်းခြောက်, သုတ်ပဝါပေါ်တွင်တင်, သူမနှင့်အတူအခန်းထဲသို့ ဦး တည်။
8) သူမသည်သင်နှင့်စတင်စကားစပြောပြီး ၁၀-၁၅ မိနစ်အကြာတွင်သင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာခံစားရသည်။ ငရဲ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမလည်းသင်အနည်းငယ်ချီးမွမ်းပါလိမ့်မယ်။ ယခုတွင်သင်သည် 'ဤမိန်းကလေးအမှန်အားဖြင့်သူသည်မိမိအားဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်' omg ကဲ့သို့ခံစားမိနိုင်သည်။ ထိုမိန်းမသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှဆင်းရရှိသွားတဲ့။
9) သင်၏အချိန်နာရီကုန်ပြီ။ ဒီအတွေ့အကြုံကခင်ဗျားထင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကမင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့မကိုက်ညီခဲ့ဘူး၊ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းနဲ့မတူဘူးဆိုတာပါ။ သင်၏လူမှုရေးဆိုင်ရာတားဆီးကန့်သတ်မှုများကသင့်အားသင်လိုချင်သောအရာကိုမေးမြန်းခြင်းမှတားဆီးသောကြောင့်သင် ဦး ဆောင်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိပါ။ မင်းရဲ့အချိန်ကုန်ပြီဆိုရင်သူမရုတ်တရက်အားလုံးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာပြီးသင်တံခါးအပြင်ဘက်ကိုအမြန်ထွက်သွားတယ်။
10) သင်သည်အခန်းမှထွက်ခွာပြီးလမ်းပေါ်တွင်မျက်လုံးချင်းမဆုံမိစေရန်ကားရပ်နားရန်နေရာသို့သွားသည်။ သင်သည်သင်၏ကားထဲသို့ရ, အိမ်ပြန်ကားမောင်းစတင်ပါ။ မင်းရဲ့ဒစ်ကမထိန်းချုပ်တော့ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကမင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်လာတယ်။ သူမသည်သူမ၏ကြော်ငြာများတွင်သူမအမှန်တကယ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောသူတစ် ဦး နှင့်သင်၏အပျိုစင်ဘ ၀ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်သင်ဒေါ်လာ ၂၆၀ သုံးစွဲခဲ့သည်။ နောင်တရနေပြီးသင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shit ကဲ့သို့ခံစားရသည်။ ယခုတွင်သင်သည်အရင်ကထက်ပိုဆိုးလာသည်။ ယခုသင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါသင်၏အပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မိတော့သည်။ “ Umm … yeah … uhh …ငါအထက်တန်းကျောင်းအကြိမ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ငါမျှော်လင့်ထားသလောက်မကြီးနိုင်ဘူး။
11) လပေါင်းများစွာကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအစောင့်အကြပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်မှော်ကျည်ဆန်မဟုတ်ဘဲသင်နှင့်အတူအိပ်ချင်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ မင်းက porn နဲ့ fantasy ကိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ sites တွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်နေတယ်။ 'ဒီတစ်ခါလည်းဒီကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်!' ' သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေရန်မျိုးစုံလိုအပ်သည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လက်ခံသည်။ သင်၏ဒစ်ကသင့်အားအခြားဟိုတယ်တစ်ခုရှိအခြားအစောင့်အကြပ်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးရလဒ်မှာအတူတူဖြစ်သည်။
12) အဆင့် 11 ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပျက် - ပြည့်တန်ဆာများနှင့်အတူအိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာမှ jacking သင့် ဦး နှောက်လိင်အကြောင်းကိုသိတယ်အားလုံး။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုရှာဖွေသည့်အလေ့အထကိုညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဖြစ်စေ၊
နိဂုံး - အစောင့်အကြပ်မတွေ့ပါနှင့် - သင်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည့်မိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြgotနာများရှိနေသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ခြင်းနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ဒါက NoFap တစ်ခုလုံးရဲ့အမှတ်ပါပဲ။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ - မထိုက်တန်ဘူး
06 မှာ 10 / 2013 / 8: 29 ညနေ
by Passthejelly16 ရက်ပတ်လုံး
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာအမေကကျွန်တော့်ကိုရိုက်နှက်ပြီး“ မင်းဒါမမှန်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။
အဘယ်သို့ငါသူမကဒီဆိုလိုသောအရာကိုသိရန်ခဲ့သလဲ ငါသည်ငါ့ဦးနှောက်ထဲမှာ ingrained မုသာစကားနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏နှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းအတူငယ်ရွယ်ပြီးနုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့နှစ်အကြာမှာကျွန်မနောက်ဆုံးတော့သူမဓိပ်ပာယျကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
porn သည်မမှန်ပါ လိင်မှာမည်မျှရှိသည်ကိုမပြပါ။ အားလုံးမိတ်ကပ်နှင့်ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ "သရုပ်ဆောင်။ " ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မင်းဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်လိမ်ပြောနေတာပဲ၊
06 မှာ 16 / 2013 / 1: 03 နံနက်
ငါ porn ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
ငါတစ်နှစ် porn ရုပ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေနှင့်3ပတ်ရိုက်နှက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ငါအသက် ၉ နှစ်လောက်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေသူအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီ။ အသက်မရှိဘူး။
ငါအငယ်စဉ်အခါညစ်ညမ်းထံမှ pornstars တူကြောင်းမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ခံရမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ porn ဈဈနေ့စဉ်အဆုံးမဲ့နာရီ binging အကြောင်းကို 16 နှစ်ပေါင်း porn နေ့စဉ်အသုံးပြုခဲ့ porn ၏အစွန်းရောက်အမျိုးအစားများကိုလိုအပ်နေစတင်ခဲ့သည့်အခါအသက်အရွယ်2မှာငါ့ကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။
ငါ porn သွေးဆောင် ed ဖွံ့ဖြိုးဈဈကျောင်းမှာကနေဒီမိန်းကလေးနှင့်အတူထွက်နှင့်သူမ၏အိမ်သူအိမ်သားပတ်ပတ်လည်ကိုသွားသတိရခဲ့ပါတယ် 16 တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်သူမ၏နှင့်ဈ porn စဉ်းစားဖို့ကြိုးစားနေသတိရတစ်ခုစိုက်ထူရမတတျနိုငျနှင့်အတူဆိုဖာနှင့်အိုင်ဒီတင်ခြင်းသတိရနည်းနည်းရ ကိုယ့်ကိုရပ်တန့်အဖြစ်ထို့နောက်မကြာမီပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုခက်။
ငါမကြာမီသူမကိုအတူတက်ဖဲ့ဈဈပင်ထိုအချိန်ကမသိဘဲ ed porn သွေးဆောင်သောကြောင့်လွန်ခဲ့သောလကယ့်ကိုကဖြစ်သည့်အခါကိုယ့်သူမ၏စွန့်ပစ်အဘယ်ကြောင့်အဘို့ဆင်ခြေတက်အောင်သတိရပါ။
ကိုယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလိင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သိခဲ့သော်လည်း၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောအချိန်တွင်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည်။
ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က porn စွဲအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ဘင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် Ive ယခုဈအားလုံးမျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်အောင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ရောက်သွားတယ်။
06 မှာ 16 / 2013 / 1: 09 နံနက်
« အပေါ် #25 Reply: ယနေ့တွင် 08: 09 AM 05 မှာ
ဇွန်လ 09 အပေါ် Daimon, 2013, 02: 09: 37 pm တွင်ထံမှ quote
ဒါဟာဆက်ဆက်ကိုပြု၏။ ငါနေဆဲငါ porn ရှေ့မှာငါသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၌ရှိ၏လူတစ်ဦးကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ အရမ်း, အထွက်စွမ်းအင်အပြည့်အဝနှင့် Hilary ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမ PMO အရာကြောင့်အသင်၏အစွဲ၏မေ့လျော့သောသငျသညျကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်အကြောင်းပါ။
09: 2013 pm တွင်ဇွန်လ 02, 56, 13 အပေါ် Big Lebowski: ကနေ quote
ကိုယ့်တစ်ဦးမူးရူးသွားသောအခါငါစကားပြောဆိုရန်နှောင့်အယှက်ခံရမရှိမဖြစ်တူသောငါ့စကားသံကို slurs ။ အဖြစ်တာငါသင့်နှင့် General မှလူကန်လန်နှင့်ရှက်တတ်၌ရှိသကဲ့သို့မျက်လုံးချင်း mantain dont ။ သို့သော်တကငါ့ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
10: 2013 AM ဇွန်လ 07, 15, 42 အပေါ် Bazooka ဂျိုး: ကနေ quote
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ဤ reboot ၌ကြာကြာမနေလိုတော့ဟုခံစားမိသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နဲ့တကယ်တက်စေတယ်။
06 မှာ 20 / 2013 / 3: 43 ညနေ
porn မတိုင်မီငါကြင်နာခဲ့ပါတယ်။ ရက်နဲ့ပတ်တွေကြာအောင်ကျွန်တော်သည်းခံခဲ့တယ်၊ ကြာကြာနားထောင်ပေးမယ်။ သူမနှလုံးသားပြောနေတာကိုငါကြားနိုင်ပြီ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအနားမှာငါရှိနေမယ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေခြင်း၊ နွေရာသီမြက်ပင်နှင့်တောက်ပသောကောင်းကင်ပြာများကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲအရောင်များဖြင့်ပြည့်စေပြီးကမ္ဘာမြေလှည့်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ရှာဖွေသည်။
porn မတိုင်မီငါငယ်ရွယ်ခဲ့သည် ငါအိပ်ရာမှစောစောစီးစီးထွက်ပြီးနောက်ကျနောက်ကျပြီးမှလွင့်မျောနေတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပျော့ပျောင်းတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနည်ထိုင်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းမတွန့်မဆုတ်။ လူတွေကပြောတာကငါ့မျက်လုံးဟာကျယ်ပြန့်ပြီးသိမ်မွေ့ညင်သာတဲ့ရှုခင်းတွေအတွက်တောင်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာပျော့ပျောင်းလွန်းပြီးမွန်းလွဲပိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ငါကအားလုံးကိုမြင်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မတိုင်မီငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုအသံရှိခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမကြည့်မီငါဟာအားကြီးတယ် အဲဒါပြီးပြီထိငါလုပ်မယ် ဦး ခေါင်းကိုမြှောက်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲ ၀ င ်၍ မင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကြောက်စိတ်မရှိဘဲရိုးရှင်းစွာ“ မင်္ဂလာပါ” ဟုရှက်မိခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်လက်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ အချိန်တန်ရင်သူမကိုကောက်ယူလိုက်မယ်၊ သူမအတွက်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘတွေဆီကိုသူမတက်ခိုင်းလိုက်သည်။ ငါဖြိုချရလိမ့်မယ်အခါ, cue အပေါ်တွန့်ဆုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်မုန်းခဲ့ပါဘူး။
ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီငါပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်နိုင်တဲ့ကန်ပုညေရိုက်ကူး။ ပင်အရှည်ဆုံးနာရီတိတ်ဆိတ်၏ဟာသနှင့်အတူခြိုးဖဲ့၏။ Shit ကံကောင်းပါစေ့ခဲ့သည်။ လူ့ဖြစ်ခြင်းအဟောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမယ့်ဟာသဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုလူအပေါင်းတို့၏ရယ်စရာအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်? ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီငါသူကပြောတယ်အရာသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီငါတစ်စုံတစ်ယောက်, ဒါပေမယ့်မရယနေ့ငါဖြစ်၏ထိုလူဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမပြုမီမေတ္တာခံစားခဲ့ရပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာကြောင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသိပညာကိုငါပြန်ရောင်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအပြစ်ကင်းစင်မှုကိုငါပြန်လိုချင်သလောက်ပျောက်သွားပြီ၊ ဘယ်တော့မှအရေးမပါဘူး
ဤတွင်အဘယ်အရာကိုလုပ်ပေးသည်: porn စွဲငါ့ကိုအခြေခံအကျဆုံးမိမိကိုယ်ကိုနှင့်ငါ့ကိုဖော်ထုတ်စေခဲ့သည် ငါအရမ်းခက်ခဲတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲအချိန်မရှိခဲ့ဘူး။ သို့သော်ယနေ့ငါရပ်နေသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအမြင့်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်၊ ထိုအမြင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်အတန်လှသည်။
06 မှာ 27 / 2013 / 4: 06 ညနေ
ငါ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သည်အထိငါမဟုတ်ဘဲငါ porn စွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သည်သဘောပေါက်လာတယ်။
ED ကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကန ဦး တွေ့ပြီးနောက်ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့သေခြင်းချုပ်ကိုင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုငါကန ဦး တွေးမိခဲ့တယ်။ တရားပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ပါ ကျွန်ုပ်၏ ED အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်မောင်းနှင်မှုပြားသည် ၂ ပတ်လုံးတန်းစီနေပြီးကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျှော့ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကအနည်းငယ်သောစွမ်းအားကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာပြproblemနာ porn ဖြစ်ပါတယ်ထွက်လှည့်။ ငါ (တစ်ချိန်တည်းတွင်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်တိုက်တွန်းမှုများစွာမလိုချင်။ ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်တိုက်တွန်းချက်များစွာရရှိခဲ့သည်။ [ငါအလားတူအတွေးအခေါ်နှင့်အတူမည်သူမဆိုများအတွက်ခလုတ်မဟုတ်ပါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအကျင့်များနှင့် ဦး နှောက်အကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားမည်။ ]
အသစ်ကရုပ်ရှင် / မြင်ကွင်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များ filesharing က်ဘ်ဆိုက်များမှထွက်စစ်ဆေးနေ။
အလှည့်၌ငါ့အကြိုက်ဆုံးပရီမီယံ porn ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းများနှင့်သူတို့အဘယ်သို့ဆိုင်အသစ်သောမြင်ကွင်းများတစ်ခုချင်းစီကိုစဉ်းစား။ အမြဲတမ်းပုံသေဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုအမြဲရှိနေပုံရပြီးစိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကသူတို့၌ရှိသည့်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရူးလုပ်နေသည်။ "ရုံကြည့်ရှုပါ။ ရုံ peek ။ အဲဒီမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဆက်သွားပါ ကြည့်ပါ ဦး အဲဒါကိုဖွင့်ပါ။ ရုံ previews ။ ooooon သွားပါ”
cam ဆိုဒ်များ။ ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမိန်းကလေးအွန်လိုင်းဖြစ်နေနိုင်ပါသည်! သူမသည်အစဉ်မပြတ်ငါသူမ၏ပြုပါတွေ့မြင်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ရှေ့တော်၌ပြုလေ၏ဘယ်တော့မှကြောင်းအရာလုပ်နေစေခြင်းငှါ, စတင်ခဲ့သည်သစ်တစ်ခုစူပါပူမိန်းကလေးရှိစေခြင်းငှါ,!
ဒါကြောင့်ငါထင်တကယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော porn ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရင်တုန်းက NoFap ကိုငါကြိုးစားခဲ့တုန်းကငါဟာ MO ကိုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် porn ကိုကြည့်ဖို့တွန်းအားပဲ။
ငါ ~ ၁၂ နှစ်တုန်းကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးခွင့်ရခဲ့တယ်၊ အဲဒါကတစ်ချိန်တည်းမှာအပျိုဖော်ဝင်အသစ်တစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ 12k“ broadband” ရလာပြီးနောက်မှစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်တော့သည်။ ငါအသက် ၂၄ နှစ်မပြည့်သေးမှီတစ်ပါတ်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများစွာကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရာထူးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်အောင်လုပ်တာဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ရှိနေပြီးခံစားချက်အချို့ကိုချရေးခြင်းက ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်သာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး / ကြံ့ခိုင်ရေး၊ လူမှုရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်ရန်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးလှုံ့ဆော်နေပါသည်။ tfwnogf ငါတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာမတိုင်ခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူစွာထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အခါငါနဲ့အတော်လေးကွဲပြားခြားနားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူကနည်းနည်းပဲနှိပ်လိုက်ပြီ။
06 မှာ 27 / 2013 / 8: 42 ညနေ
ငါ PMO အကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းတွေနှင့်အတူစကားပြောခဲ့ပါသည်, ငါ Nofap ဖော်ပြခဲ့တယ်။ 3, (သူကို3+ ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် fapping မှတစ်ခုချင်းစီကိုဝန်ခံ) ၏အုပ်စုတွင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုမှာရယ်နဲ့ကျွန်မထွက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပုံကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ငါသိသာဒီခွဲပေါ်မှာရှိသမျှ 62,792 fapstronauts ခုခံကာကွယ်ခဲ့, ဒါကြောင့်ငါ nofap ဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ် ပတ်သက်. ရှည်မိန့်ခွန်းအပေါ်သွားလေ၏။ သူတို့ကငါ့ကိုပျော်စရာလုပ်ပေမယ့်အထဲမှာကျွန်မဒီတော့ကြောက်မက်ဘွယ်များနှင့်အဘယ်သို့ငါကွဲပြားခြားနားကြီးနှင့်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင် jerking သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းသောဤလူများအနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်။
ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်? တက်ကွဲသူငယ်ချင်းအုပ်စုပြီးနောက်,2၏3nofap အကြောင်းကိုငါ့ကို texted, သူတို့က start ချင်ခဲ့ပုံကို။ သူတို့ကအုပ်စုတစုထဲမှာဝန်ခံ embarassed ခဲ့ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်စွဲခဲ့ကြသည်, သူတို့ရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်သိတယ်။ Awesome ကို။ ငါသည်ဤခွဲအကြောင်းကိုသူတို့အားလုံးကိုပြောသည်, သူတို့သည်အမှန်တကယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သလိုပဲ! fapstronauts ငါ၏အဆွေများ၏မြေယာမှကြိုဆိုပါ၏!
TL: ဒေါက်တာ: nofap အကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောခဲ့, ရှိသမျှပထမဦးဆုံးမှာပယ်ရယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မှာလည်း nofap စတင်ရန်လိုချင်နဲ့သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းဝန်ခံဘယ်လောက်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုကံဆန္ဒရှိ😀
07 မှာ 02 / 2013 / 2: 54 နံနက်
အဘယ်သို့ငါ porn ထံမှလေ့လာသင်ယူ
by drwoning21 ရက်ပတ်လုံး
အမြိုးသမီးမြားကြီးတွေ Dick ကိုချစ်ပြီးသေးငယ်တဲ့တဦးတည်းရှိခြင်းဘို့သင့်ကိုအရှက်လိမ့်မည်ဟု
အမျိုးသမီးတစ် ဦး လိုအပ်သမျှသည်သင်၏လိင်တံဖြစ်သည်။ သူသည်လိင်တံအတွက်နေထိုင်သည်။ cunnilingus သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမကိုစိတ်မရှိသော ecstasy အခြေအနေသို့ရောက်စေရန်အတွက် clitoral stimulation ကိုမလိုအပ်ပါ
အမျိုးသမီးများသည် fellatio ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့မလုပ်ရင်သူတို့အရကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ လိင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်သာသာနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်
လူတိုင်း cheats ။
အမျိုးသမီးများနေ့ cum ကိုချစ်
လိင် PACE အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန် Acrobat ဖြစ်ပါသည်
ဤသူသည်ငါအခုမှတ်မိနိုင်အားလုံးပါပဲ။ သငျသညျ porn ကိုကြည့်ထဲကနေဘာတွေသင်ယူခဲ့တာလဲ
Krowg အားဖြင့်37 ရက်ပတ်လုံး
ပြည်သူ့လိင်အချိန်မရွေး, မည်သည့်နေရာ, နှင့်မည်သူမဆိုနှင့်အတူရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်ခံစားနေရသောတစ်ခုတည်းသောအာရုံမှာနားကြားခြင်းနှင့်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ငါမနမ်းနိုင်၊ မမြည်းနိုင်၊
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း, ပျော်စရာလုံခြုံ, တတ်နိုင်နှင့်ပြဿနာ-အခမဲ့
အားလုံးပြည့်တန်ဆာအလွန်လှပ STD-အခမဲ့, ကြွယ်ဝသော, နှင့်စူပါကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကများလွန်းပြီးပြည့်စုံသောအံသွားပြီ
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏တစ်ခုတည်းသောအမွေးအမွေးအစိတ်အပိုင်းမှာသူမ၏ ဦး ခေါင်းဖြစ်သည်
ကလေးများမရှိပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့ရှိခဲ့ပါကသူတို့အဘယ်မှလာသည်ကိုမည်သူမျှမသိနိုင်ကြပါ
သငျသညျအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ,2ယောက်ျားနှင့်အတူအိပ်ရာ၌သင်တို့၏ဇနီးတွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထား
တစ်ဦးနဲ့လက်ထပ် 45 နှစ်အရွယ်မိခင်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသင်အသက်တာ၌တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ
“ ပူသော” အမျိုးသမီးများတွင်အားနည်းချက်များမရှိပါ
မိန်းမတွေကမင်းကိုဖွင့်ဖို့ပြောတာသာ - မင်းကိုပိတ်ဖို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး
အမြိုးသမီးမြားကိုအမြဲတမ်းသူတို့တစ်တွေရက်နာနှင့်အတူအိပ်ရာထဲကတွားပင်အခါ, streetwalkers တူအောင်
အသက်တာ၌အရာရာလိင်တစ်ဦး backseat ကြာ
အစားအစာစားရန်အတွက်“ ကောင်းသော” လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်
ဘယ်သူမှအံ့သြဖွယ်လိင်တူချစ်သူလိင်ရှိသည် မှလွဲ. ထောင်ထဲမှာသွား
သူတို့ကြီးမားသောရင်သားနဲ့အလွန်လှပသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်လျှင်မည်သူမျှအပေါင်းတို့, တစ်ဦးတည်း, တစ်ဦးကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏ရှေ့မှောက်၌ masturbates ။ ပြီးတော့လိင်တူချစ်သူလိင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်
ကျနော်တို့ porn များအတွက်ပေးဆောင်သင့်တယ်
ကျနော်တို့ porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏နိဂုံးကိုငိုကြွေးမြည်တမ်းသငျ့သညျ
ကျနော်တို့ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအခမဲ့တစ်လောကလုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသင့်ပါတယ်
သင် porn အကြောင်းမကောင်းတဲ့ဘာမှမစဉ်းစား၊ စကားပြောရုံနဲ့မပြောနိုင်ပါ
Larry Flynt သည်ပျော်ရွှင်သောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် Larry Flynt ဖြစ်လိုသည်
Hugh Hefner တစ် scumbag မဟုတ်ပါဘူး
Playboy ယုန်များသည်ပျော်ရွှင်မှုရှိပြီးအမှားမကင်းနိုင်သောဖော်ရွေသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသူများထက်သာသည်
သင်၏မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းထက်ပြည့်တန်ဆာကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်
သင့်ရဲ့မိဘများကသင်၏ porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူလုံးဝပြဿနာရှိသင့်
သင်က“ ကြယ်တစ်လုံး” ဖြစ်ရင်မင်းမိဘတွေအရမ်းဂုဏ်ယူသင့်တယ်
သင်နှင့်သင်၏မိဘများသည်တူညီသော porn ကိုကြည့်လျှင်ကောင်းပေသည်
သင့်ယောက္ခမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်
သင်၏အစ်မဖြစ်သူ၏ ၁၈ နှစ်သမီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အကောင်းဆုံး
သင်သည်လိင်ပိုင်းအရတက်ကြွမှုမရှိပါက၊ ထိုအချိန်အထိတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်
အခမဲ့ porn ကိုကြည့်ခြင်းသည်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းဖြစ်သည်
ညစ်ညမ်းဆရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ
access ကိုမှ porn တရားမဝင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခက်ခဲပြုလုပ်ခြင်းသည်လူများတို့အားပြင်းထန်စွာအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မည်
အကယ်၍ သင်သည်မိန်းမတ ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ၅ မိနစ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါက၊
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့မြည်းထ္ထု shoving ပျော်မွေ့
သငျသညျအမြိုးသမီးတသင့်ရဲ့ asshole အတွက်သူမ၏လျှာကိုထားခွင့်ပြုသင့်တယ်, ပြီးတော့သင်ပြင်သစ်ထိုနောက်သူမ၏နမ်းသင့်တယ်
အသက် ၄၅ နှစ်ရှိသည့်မိခင်များကိုတောင်ရင်သားမထိုးပါ
လူတိုင်း orgies ပါဝင်အတော်ပင်
ကြိုတင်လောင်းကစားခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပြီးစက္ကန့် ၂၀ အတွင်းအစဉ်ပြုလုပ်သည်
အဘယ်သူမျှမထက်ပို3မိနစ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်
အမျိုးသမီးများသည် tampons များကိုမသုံးကြပါ
လိင်သင့်ရဲ့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေး, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအားလုံးဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်
လိင်မှုကိစ္စတွင်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါ - လူတစ် ဦး စီသည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒကိုအတိအကျသိသည်
အမျိုးသမီးများသည်တဆေးပါ ၀ င်သည့်ရောဂါပိုးမကူးစက်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံနေရသည်
ဒီလောကအတွင်းအဘယ်အရာကိုမျှအခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လိင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးအရာ, အစဉ်မပြတ်ခပ်သိမ်းသောကာလအခမဲ့ရရှိနိုင်
အားလုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေအကျင့်ပျက်လိင် fiends များမှာ
တစ်ဦး 18 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကညာတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တက် drugged ဟောင်းတစ်ဦး 38 ယခုနှစ်ရလဒ်တွေစိတ်ကူးယဉ်, စိတ်ပိုင်းနေမကောင်းအထက်တန်းကျောင်းထွက် drop အဘယ်အရာကိုသိတယ်
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းမတရားပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်
လူတိုင်း threesomes ချစ်သောသူ
Black ကအမျိုးသမီးတွေစူပါ horny လိင် fiends များမှာ
ညစ်ညမ်းကြယ်များ“ ကြယ်များ” သည်အလုပ်အကိုင်များပြောင်းလဲသည့်အခါအထူးကုသမှုခံထိုက်သည်
"ပူသော" အမျိုးသမီးများသည်စာသားအရအကောင်းဆုံး၊ အရသာနှင့်အနံ့ကိုခံနိုင်သည်။ ထိုသူတို့က, နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောလုံးဝကိုယ်ကျိုးနှင့်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အတူအလွန်လွယ်ကူသည်
အမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်လိင်ကာလအတွင်း3+ လက်မဒေါက်ဖိနပ်ဝတ်ထားကိုချစ်
ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များက visitors ည့်သည်များကိုညစ်ညမ်းသောလူကြီးများအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပါကကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
Porn ကိုရှေးခေတ်ရောမမြို့ Pompeii မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် porn ဟာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်
ပွန်ပေ၌ဘာသာရေးဘုရားကျောင်းများစွာရှိသည် - ဘာသာတရားသည်မကောင်းမှုဖြစ်သည်
သင်က porn ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်၊
သငျသညျ Tom ၏ဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံလျှင်, Tom စိတ်ထဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
သင်၏မယားနေရာဖြစ်သည်နေချိန်မှာသင်က FedEx ပေးပို့ရလာမယ့်အချိန်, သေချာသင်တစ်ဦး threesome ရှိစေ
အချစ် = cheating = threesomes = 69 = စစ်မှန်တဲ့အချစ် = အိမ်နီးချင်းရဲ့အမေ၊ အစ်မနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလိင်
အသက် ၁၄ နှစ်မှာသင်အပျိုစင်ဘဝကိုမဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်ပြည့်တန်ဆာကိုသွားတွေ့ပါ
Porn မင်းသမီးများတွင် boogers မရှိပါ။ အကယ်၍ သူတို့လုပ်ခဲ့ပါကသူတို့ boogers ကိုဘယ်သောအခါမျှမစားနိုင်ပါ
အပျိုစင်ဘ ၀ ပျက်လေလေ၊ သာယာလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုလိင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနားလည်လိမ့်မည်
07 မှာ 09 / 2013 / 9: 37 ညနေ
“ အခြား” ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများကိုမမေ့ပါနှင့်။
၎င်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၌ညစ်ညမ်းခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ED သည်အမျိုးသမီးများအားခွဲခြားခြင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပေါ်အမြင်လွဲခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ငါမည်သူမဆိုသော်လည်း porn ၏အခြားအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စကားပြောဖို့တချို့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် penises ၏ရှိသည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမြင်ကြည့်ရှုခဲ။
ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကြီးမားသောဒစ်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သူရဲကောင်းဆန်ဆန်သက်သေအဖြစ်ပြလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လူအများစုကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် မှလွဲ၍ တကယ့်ဘဝ၌စိုက်ထူသောဒစ်ကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးကြပါ။ ဒီတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကိုလုံလောက်တဲ့လိင်တံဆိုတာဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဒါမှန်တယ် - porn ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်ယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသာရှိသည် - ၎င်းတို့တွင်ကြီးမားသောဒစ်များရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့တွေ့တဲ့တစ်ခုတည်းသော schlongs တွေဟာထိပ်ဆုံး ၁% ဖြစ်တဲ့အခါယောက်ျားတွေဘယ်လိုခံစားရသလဲ။ သူတို့ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ခံစားရတယ်၊
သင်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောခံစားမှုသည်ကြီးထွားလာသော (pun ရည်ရွယ်) ပြproblemနာဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ငါဟာဒစ်ခ်ျသေးသေးလေးရှိတယ်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ ငရဲ, ငါဆီး၌ piss ဖို့ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်မိန်းကလေးများကအချိန်ကြာမြင့်စွာကမြင်ချင်ကြဘူး။ ငါသည်လည်းလိင်တံတိုးချဲ့အကြံပေးချက်များ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုကြည့်အပေါ်နာရီပေါင်းများစွာ (ကံကောင်းချင်တော့, ငါသူတို့ထဲကမလုပ်ခဲ့ဘူး)
ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် လိင်တံတိုးချဲ့လုပ်ငန်းသည်ဤနောက်ဆုံးနှစ်များအတွင်းပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ သာမန်အရွယ်အစားရှိသောယောက်ျားများသည်လိင်တံတိုးပွားစေသောဆေးဝါးများအတွက်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ကုန်ဆုံးပြီးသင်၏လိင်တံကိုချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဖိုရမ်များရှိသည်။ ဒီယောက်ျားတွေအများစုမှာ micropenises မရှိဘူး၊ သူတို့မှာလုံးဝလက်ခံနိုင်တဲ့အရွယ်အစားရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် porn ကသူတို့ကိုမိန်းမတစ်ယောက်နှစ်သက်အောင်မလောက်ဘူးလို့ယုံကြည်စေတယ်။
ငါဒီမှာ NoFap မှာရေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေဟာယေဘုယျအားဖြင့်လိင်အပေါ်အမြင်လွဲမှားတဲ့အမြင်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေကြရတယ်၊ ယင်းကိုမျက်လုံးဖွင့်သူအဖြစ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေရန်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ပါ၊ သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
TL; DR Porn သည်လူတို့၏အရွယ်အစားအပေါ်လူတို့၏အမြင်များကိုလွဲမှားစေသည်။ ဒီ shit ကိုဆက်မကြည့်ပါနဲ့။
07 မှာ 26 / 2013 / 5: 24 ညနေ
nofap စတင်မဆိုဆယ်ကျော်သက် redditors? မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး
by Young-Reddit1 နေ့က
ဒါနဲ့ကျွန်မက ၁၂ နှစ်ပါ၊ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေးရာကိုအဝေးကိုရောက်သွားတယ် ပထမ ၇ နာရီကအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Alive ဆက်နေခဲ့တယ်။ ငါသာထွက်ရှိတစ်ခုတည်းသောဆယ်ကျော်သက်ငါမဟုတ်ဘူးသိချင်တယ်။ မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအောက်မှာပြောပြနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းခုခံတွန်းလှန်ဖို့အကြံဥာဏ်တချို့ပေးနိုင်တယ်။
10 မှာ 02 / 2013 / 6: 03 ညနေ
ငါ porn မှရှောင်ကြဉ်ရန်အဘို့အဒါဟာမယ့်ခဲယဉ်းသည်မစိတ်ကိုသတိရ ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းခြင်းမရှိသောအသံများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအခြားနည်းလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည်သုံးနှစ်အတွင်းအဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေပြီး၊
အဆိုးဆုံးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၌လူမှုရေးဘ ၀ သုညရှိခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာထွက်ဖို့ငါမှာလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူး၊ ကျောင်းအပြင်မှာသူငယ်ချင်းအသစ်တွေဖွဲ့ဖို့ငါမနှောင့်ယှက်သေးဘူး၊ ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာစိတ်ပူစရာဖြစ်နေတဲ့ပါတီပွဲတွေကိုမတက်ချင်တော့ဘူး။ ငါလုပ်ချင်တာက porn ကို mastubrate ပဲ။ ဒီညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာလား။
rewiring စုစုပေါင်း abstinence လိုအပ်ပါသလား?
12 မှာ 12 / 2013 / 9: 15 ညနေ
ငါ (အငယ်ယောက်ျားတွေ, porn နှင့်လိင်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်) တစ်ဦး 26 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို
ကျွန်ုပ်သည် ၂၆ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထက်အသက်ကြီးသောအမျိုးသားများနှင့်ချိန်းတွေ့သည် (အသက် ၂၂ နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၃၂ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး) ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးတွင်အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်သူပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟုထင်မြင်သည့်ခြားနားချက်သည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ “ ညစ်ညမ်းမှုမျိုးဆက်” အကြောင်းလူတွေကြားနေကြတာကိုကြားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအင်တာနက်ကိုအခမဲ့သုံးခွင့်ရတဲ့အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ခင်အထိဘာကိုဆိုလိုတာကိုငါတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ ငါတို့အချင်းချင်းချစ်ကြပေမဲ့သူကအချစ်ဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့အမြဲမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရှုပ်ထွေးသွားပြီးသူ့မှာရှိခဲ့သည့်အပေါက် / အဆန်ကိုချထားလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နှစ် ၂၀ လောက်မှာသူငယ်ချင်းငယ်တွေကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာလုံးဝမအံ့သြခဲ့ကြဘူး၊ လူငယ်များအနေဖြင့်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ဆက်ဆံသင့်သည်ဟူသောအတွေးဖြင့်ကြီးထွားလာသည်
01 မှာ 20 / 2014 / 12: 16 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ဓာတ်သည်လျော့နည်းသွားပါသည်
ငါ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ၊ အပြာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်စွဲလမ်းသူ၊ ငါနှင့် 15% သဘောတူသည် ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်မှာ iPod Touch ရခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်တနှစ်မှာ 100-2 ကြိမ်လောက်ရုပ်ရှင်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ iPod ကိုရရှိပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏လိင် drive သည်လျော့နည်းသွားပြီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များကဲ့သို့သောပြproblemsနာများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အပိုစိတ်ကြွဆေးများနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်သည်။
ညစ်ညမ်းသည်မှားသည်ဟုမထင်သော်လည်း၎င်းသည်စွဲစွဲလမ်းစေပြီးကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်သိလိုခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့သူကငါ့ကောင်မလေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အတွက်ရပ်တန့်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။
04 မှာ 05 / 2014 / 2: 53 ညနေ
Update ကို။ အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်မှမရှိပါဘူး။
ငါကတစ်ဦးပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာလိမ်ဖို့ကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကနို့တိုက်ကျွေးမှုစလေိုကွောငျးငါ၏အစွဲင်ပင် horny ဘူးအဖြစ်သူ့ဟာသူတကယ်ရီစရာသောပုံငါနောင်တနှင့်မိုက်မဲဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် PMO အသုံးပြုအစောပိုင်းကပြန်ရောက်သွားတယ်။
ငါ horny ကြီးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်တဦးတည်းထွက်ပွတ်သပ်ချင်ပါတယ်နှင့်ပြုပေမယ့်အဲဒါကိုငါ့ဦးနှောက်ကိုမနှောမြောကြောင့်အတုအဖျက်ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်လိုသောရဲ့မင့်ကအခုမေးမယ့်အဘယ်အရာကိုပါပဲ။ မ "horny" ရဲ့လို့ပဲ။
porn လုံးဝတန်ဖိုးဘာမှလုပ်ဖို့အစစ်အမှန်ဘဝ drive ကို့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်လည်းငါသည်နောက်တဖန်ယနေ့ည PMO မဖွစျသငျ့အဘယ်ကြောင့်အကြီးအကျယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
porn ကပဲဦးနှောက်သေလွန်သောသူတို့သည်ကြွက်ကဲ့သို့သင်၏ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုအရပ်၌ငါထိုင်နှင့်န့်အသတ်အော်ဂဇင် button ကိုနှိပ်ထားရန်အဆင်ပြေမယ့်ကပြောပါတယ်။
porn သင့်ဦးနှောက်ကဤအတုအမျိုးသမီးတွေ fertilising အကြားခြားနားချက်မပြောနိုင်လို့အဆင်ပြေမယ့်ပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ fucking တစ်ခု alpha အထီးနေယုံကြည်သည်။ ကြောင်းအတွေးကိုသင်ပြန်ရောက်သွားတယ်င့်ပြီးနောက်သည်အထိထားမည်မဟုတ်သောကြောင့်, ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။
porn ကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်, သငျသညျအမြိုးသမီးမြားကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲသို့အားထုတ်မှုထားရန်မလိုပါ, porn သင်တို့သည်နောက်အားထုတ်မှုနှင့်အတူကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယပေးသည်ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကသင်အားနောက်မှခံစားရစေသည်ဘယ်လိုသိကြ၏။ ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျ။
porn သင်နိုင်အောင်ဖွင်ရတဲ့နေအဘယ်ကြောင့်အံ့သြလူရွှင်တော် porn မှာရှာနေ Bam သည်အထိ dopamine hit ပြီးနောက် dopamine အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ် burry ဖို့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်မရအဆင်ပြေမယ့်ကပြောပါတယ်။
porn က facebook ကိုပေါ်ရဲ့ Refresh နှိပ်ထားရန်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးနေစောင့်ရှောက်ရန်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝအရောင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလြော့ဖို့, သင် dopamine မှစွဲလမ်းနေနို့တိုက်ကျွေးမှုစောင့်ရှောက်ဖို့အဆင်ပြေမယ့်ကပြောပါတယ်။ သငျသညျကိုကြည့်တက်အဆုံးသတ်တော့ဘာဖြစ်လို့သို့မဟုတ်သင်တစ်ခုလုံးကိုနေ့လည်ခင်းဖြုန်းပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ထိုအခါသင်သည်တွေးမိ။
သင်တို့မူကား, porn မှအဆင်ပြေပြောပါတယ်သူကိုသိသလော
သင် ... လုပ်သည်။
04 မှာ 05 / 2014 / 4: 45 ညနေ
(၁၆) နှစ် - Porn သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ
ငါကသတိနဲ့ပြော။ သိသာထင်ရှားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ဝေးကွာသောနေရာမှဝေးကွာသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမှန်ကန်သော ဦး စားပေးမှုများဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်အဲဒီအကျင့်ကိုသုံးနေတုန်းမှာရှိတဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ဘဝပုံစံကိုပြန်မသွားချင်ဘူး။ ငါအသက် ၁၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါစကြည့်တော့ ၁၀ နှစ်ပေါ့။ တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငယ်ငယ်ကတည်းကစခဲ့တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
အမြဲဒီကိုသတိရပါ: သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝါရှိသည်။ သင်ချင်တယ်ဘာမှမှမပြောပါနိုင်သလား။ သငျသညျတစ်ခုခုလုပ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချို့ကြင်နာမှုပြရန်နှင့်သင့်အသက်တာ၌အပြောင်းအလဲများလုပ်ကြိုးစားကြသည်။ NoFap သို့မဟုတ် PornFree လုပ်နေသင့်ရဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးပျောက်ကင်းစေမည်မဟုတ်။ သငျသညျအရေးယူရန်ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ဟေး, သင်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်စေလိုသောဝန်ခံဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? သင်လုပ်နိုင်သည်! ခိုင်မာတဲ့လူတိုင်းနေပါ။
06 မှာ 24 / 2014 / 3: 10 နံနက်
ဒါကြောင့်ထွက်နှင့်ဒါ tabs များနှင့်ဒေါင်းလုဒ်များနှင့်ရေစီးခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုစသည်တို့နှင့်
r / nofap ထံမှ
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုထပ်ပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်အခန်းထဲမှာ၊ သီးသန့်အခန်းထဲမှာပြန်ထားနိုင်ပြီးပြthisနာတွေစတင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်သည်အခြားမည်သူမဆိုကဲ့သို့စတင်ခဲ့သည်။ မင်းကဒီ porn ကိုတွေ့ပြီ၊ ဒီ porn ကငြီးငွေ့နေပြီ၊ သင်ရှာတော့မယ်။ စသည်တို့ကို Tabs နှင့်ဒေါင်းလုပ်များနှင့် torrents နှင့်စသည်တို့စသည်တို့ကို။ သငျသညျစိတ်ကူးရ။ ပျော်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်၊ အဆိပ်ရှိတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်စွဲလမ်းမှုလည်းဖြစ်သည်။ ငါအခုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်နေတာ။ တစ်ခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပါးစပ်ထဲသို့ဆီးသွားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော၊ ထိုအခါက kinda ပူ, ပြီးတော့ kinda ပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှမင်းကဘယ်လောက်အထိပြီးသွားမှာလဲလို့တွေးမိတယ်။ ဘယ်တော့မှအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့သင်သုတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယို၊ အသံ၊ တီးမှုတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျက်နှာကိုနှင်တံနှင့်မုန့်လုပ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုမေးရတော့မယ်၊ ရပ်တန့်ဖို့အချိန်တန်ပြီလား။
06 မှာ 27 / 2014 / 4: 05 နံနက်
အဘယ်ကြောင့်ငါ (17 yo) ရပ်တန့်
ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်ဖြစ်ပါ၏၊ nofap ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ အခုကျွန်တော့်ကောင်တာမှာ ၇ ရက်ရှိနေပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားဖို့ပိုပြီးကတိကဝတ်ပြုခဲ့ဖူးတယ်လို့မထင်ဘူး။ ငါသည်လည်းစွဲလမ်းသောစကားလုံးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါ။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုအမြင့်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကားတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လမ်းခရီးစဉ်တွင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် PMO ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတွင်သို့မဟုတ်အားကစားခရီးစဉ်များတွင်ရေချိုးခန်းသို့အလျင်အမြန်သွားခြင်းကကျွန်ုပ်၏ dopamine ပြင်ဆင်ချက်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ငါသွားဘယ်မှာနေပါစေ, PMO နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ငါအင်တာနက်မရှိရင်ငါသိမယ်ဆိုရင်ငါ ipod ကိုကြိုတင်ကူးချမယ်။ ငါအနိမ့်ဆုံးအခိုက်သူမ၏အိပ်ခန်းထဲမှာရှိနေစဉ်ဝမ်းကွဲညစ်ပတ်အတွင်းခံအဝတ်အစားမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် သိသာထင်ရှားတဲ့ငါတော်တော်ရှုပ်ထွေး -up, အန္တရာယ်များ jacking ချွတ်ပြုမိ, ငါ porn ၌ငါ့အရသာ awfully လည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ PMO အလေ့အထရှိခဲ့ပေမယ့်, ပူးပေါင်းရန်ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂန္ nofapper နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါ r / nofap တွင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်လူမှုရေးငြင်းပယ်မှုဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောသံသယမရှိ။ တကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမသူငယ်ချင်းများစွာရှိသောအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အားကစားသုံးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထိုသူများ၏အပြင်ဘက်တွင်ဝါသနာများရှိသည်။ အထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံး A A ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခင်။ ကြွယ်ဝသောမိသားစုရှိသည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်းပဲ၊ ငါ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါ။ Porn ကအမျိုးသမီးတွေကိုလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဖြစ်မြင်စေတယ်။ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေဟာလိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတွေအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး PMO ကငါ့မှာရှိခဲ့သမျှလိင်ဆန္ဒအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်လို့တစ်ခါမှမခံစားရဘူး။ တကယ်တော့ဒီနှစ်မှာကျွန်မဟာအပြင်းအထန်လှပပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်မကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်တယ်။ ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါလုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရနိုင်လို့ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲ။ ဒီမိန်းကလေးကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကအဲဒီလိုထင်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကသူမအပေါ်အကြီးအကျယ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ငါအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။ သူမသည်စုံတွဲတစ်တွဲရက်စွဲများတွင်ငါ့ကိုမေးသော်ဤရက်စွဲများတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုမျှမပြခဲ့သဖြင့်သူမအရှုံးပေးခဲ့သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာအရမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရတယ်၊ ငါဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ PMO စွဲလမ်းမှုထဲရောက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါဟာဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်မြင်ကွင်းထဲမှာသာမကဘဝတစ်ခုလုံးကိုတကယ့်မိန်းကလေးတွေအကြောင်းလုံးဝမေ့သွားခဲ့တယ်။ PMO မရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်လိုချင်သောဘယ်တော့မှမပျက်ပြားသောလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပုံရိပ်မဟုတ်သောအစစ်အမှန်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုချစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
TL: DR fuck ဆိုတဲ့သင်ဤကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီးအများဆုံးဖွယ်ရှိ reddit အပေါ်မှာငါ့နောက်ဆုံးပို့စ်ဒါကြောင့်ဖတ်ပါ
06 မှာ 29 / 2014 / 11: 05 ညနေ
ဤသည် shit တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲသွားပြီကြောင့်အားလုံးသဘာဝကျပါတယ်
ရယ်စရာသင်ပြောပါ။ ငါကအသက် ၂၀ ရှိပြီ၊ ငါကိုယ်တိုင်လှပသောကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တဲ့နေရာမှာအလျင်အမြန်ပဲပြေးနေတုန်းပဲ ဒီ shit ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုနီးပါးဖွင့်ထားခြင်းအပေါ်စွဲလမ်းစေသည်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ပြုမူတဲ့အကျင့်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ် တစ်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝခံစားလို့ရတယ် ငါသည်လည်းမိန်းကလေးများကြီးပြင်းလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သော်လည်း ၁၉ နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုသတိပြုမိခဲ့သည်။
ငါအသက် ၂ ဝရှိနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်အတွက်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိဖို့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ပဲ။ ငါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းမှာအလွန်နီးကပ်နေလိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်သိသည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှ စ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလန်းလန်းကစားခြင်းသည်ယခုအခါကျွန်ုပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စိုက်ထူမှုများသည်နည်းပါးလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးငါနှင့်ငါ့ရည်းစားများ၌လိင်များများစားစားရှိသည်ဟုခံစားရသော်လည်းအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖိစီးပါကစိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိသည်။ ထိုအခါငါကအမြဲငါ့ကိုအလျင်အမြန်ပေးသောကြောင့်, porn နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရှိသည်။
07 မှာ 24 / 2014 / 3: 17 နံနက်
ဒါကြောင့်ငါကမိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းတာကတော့သူတို့နဲ့ porn မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသရုပ်ဆောင်နေတယ်။
ငါထိန်းချုပ်ဖို့ဆက်ကြိုးစားနေပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့အကူးအပြောင်းဖြစ်သွားပြီးငါ့ "ညစ်ညမ်းတဲ့" ဦး နှောက်ကငါ့ကိုမှာထားတာကိုအလိုအလျောက်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
အဘယ်သို့ငါဒီကိုကျော်ရပါသလဲ? အခြားသူကားအဘယ်သူကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်? ဒါကြောင့်ဘုံသို့မဟုတ်ရှားပါးလား?
09 မှာ 23 / 2014 / 11: 49 ညနေ
ခဏတာရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Porn ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်
ခဏတာရှောင်ပြီးနောက် P သည်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုသင်စတင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ငါ ၇ ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မဟာအပြားလေးဖြစ်နေတယ်၊ ​​အဲဒီအချိန်ကစပြီး P or MO ကိုကြည့်ဖို့လုံး ၀ မတိုက်ဆိုင်ဘူး။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က P. အားစောင့်ကြည့်ရန်တိုက်တွန်းမှုများကိုရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ယခုငါမြင်ရပြီ။ P သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဖြစ်မှန်မှအဆက်ဖြတ်လိုက်သည်။ မိန်းကလေးစစ်တွေကငါ့ကိုမလှည့်တော့ဘူး။ ယောက်ျားအစစ်အမှန်မရှိဘူး နှိုင်းယှဉ် အဆိုပါ P ကိုမင်းသမီးအဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပြိုင်နိုငျသောနညျးလမျးမြား၌သင်တို့ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ကြောင့် Pstars အားငါကြည့်။ ,
အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှပမှုကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့နိုင်တော့ပါ။ သူတို့အားလုံး ၁-၁၀ စကေးလောက်ပဲရှိပြီး ၁၀ ယောက်ကတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမှာမိန်းကလေးပါ။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာကသူတို့ဟာဘယ်တော့မှ ၁၀ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမရှိဘူး၊ ACT မလုပ်နိုင်လို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတကယ် P ပဲ။ ACTING ။
အဲ့ဒီညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုပဲ အခုငါစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲကြည့်ရတာလဲ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုသင်ပြီးသားမြင်ယောင်ကြည့်ပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်လက်တွေ့ဘ ၀ မှာကြည့်ရတာကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ မှား ဒီဟာကို။ နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခါထပ်မကြည့်တော့ဘူး ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က NSFW ပုံတစ်ပုံကိုပို့လိုက်တယ်။ သူငါ့ကိုပြခဲ့တဲ့အတွက်ငါအရမ်းဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ (ငါသူ့ကိုသိသာတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုမပြောပြခဲ့ဘူး) ထိုအချိန်မှစ။ FUUUUUUUUUUUUUUU, ထိုတိုက်တွန်းချက်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ ငါ ၁၁၈ ရက်အတွင်း P ကိုမထိတော့ပါ၊
TL; DR: P ကိုကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအပေါ်အစဉ်အမြဲဖြစ်တယ်, ငါမဟုတ်ဘဲလူသားထက် (သူတို့တစ်တွေ 1 ဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်သည်) 10-10 တစ်စကေးအပေါ်လိင်အရာဝတ္ထုလမ်းလျှောက်အဖြစ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါ။
ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ P. ကိုမကြည့်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ MO ကိုမကြည့်ပဲ P မကြည့်ပါက P မရှိရင် MO မလုပ်ချင်ပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မကောင်းသောအဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်မြင်သော P ကို၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
09 မှာ 25 / 2014 / 12: 15 နံနက်
ငါလိင် PMO ဖွငျ့အကြှနျုပျအဘို့ပျက်စီးခဲ့သည်ထင်အတွက် 40 ရက်ပေါင်း
ငါရမ္မက်နှင့် relapse များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသူကဒီဖိုရမ်အတွက်အပေါင်းအဘော်တို့အဘို့အတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ငါနီးပါး 40 ရက်ပေါင်းလွန်ခဲ့သော abstinence လမ်းကြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, ထိုသို့ဟောင်းကအရမ်းအဆင်ပြေ hoodie ပစ်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
အင်း၊ ငါတကယ်သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာမိုက်မဲတဲ့တကယ့်ကို hoodie ပဲ၊ ငါ ၈ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်ခန့်အကြာတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတစ်ခုခုပျက်စီးသွားပြီဟုထင်သည်။ ရက်ပေါင်း ၄၀ တိုင်လိင်ဆက်ဆံတာကိုငါမခံစားရဘူး။ ငါဒီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးဟာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်လို့ငါဟာအတွေ့အကြုံလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ငါ fetishes နှင့်ညစ်ညမ်းမှု၏သက်တပြင်လုံးကိုရှောက်သွား။ လုံးဝထုံထွက်လာပြီ။ ငါအစောင့်အကြပ်ငှားပြီးသူမသည်ချိုသော၊ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းငါ့ကိုလုံးဝအနားယူစေခဲ့သော်လည်းမပြီးနိုင်ခဲ့ ငါတော်တော်များများတရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပုံစံများသာငါ့ထံမှမြင့်တက်လာနိုင်သည့်အချက်သို့ရောက်ခဲ့ပြီ
ဒါကြောင့်ငါရှောင်ကြဉ်ဤမျှလောက်လွယ်ကူပါတယ်ရှာဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်ပြီးမှောင်မိုက်သောကွန်ယက်အပြင်ဘက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်အရာမှမရှိပါ။ ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ဘာမျှလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေခြင်းမရှိပါ။
ငါဘာကြောင့်ဤစာပို့နေသည်ကိုငါမသိ။ NoFap ကိုစဉ်းစားသောသူများကိုသတိပေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်မဆိုးမီသင်အမြဲတမ်းပျက်စီးခြင်းမတိုင်မီပြုလုပ်ပါ။
09 မှာ 28 / 2014 / 7: 23 ညနေ
... porn မှာမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တုန်းကမှမကြားခဲ့ဘူး - PMO အတွက် - လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြက်လုံးကအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအယူအဆခိုင်မာစေ။ ပထမ ဦး ဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများတွင်ကြီးပြင်းလာသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားမည်သည့်အရာကိုမှမသိခဲ့ပါ။ porn သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်စဉ်မှာအဖျက် porn အချိန်ကြာမြင့်စွာကြီးဘယ်လောက်သိတယ်ထင်ပါတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာတိုးပွားနေသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းခံစားရမည်။ အိပ်ရာထဲမှာမိန်းကလေးတွေကကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုလက်ထဲမှာကိုင်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်နဲ့အမြဲတမ်းဆင်ခြေပေးတတ်တယ် (သောက်ဖို့အရမ်းမလုံလောက်ဘူး၊ မလုံလောက်ဘူး၊ ဗိုက်လည်းဗိုက်အောင့်တယ်။ ) ငါဘယ်လိုရောက်လာခဲ့တာလဲ။ ငါဒီကဘယ်ကိုသွားတာလဲ ငါသာအဖြေကိုမပါဘဲမေးခွန်းများကိုသာရှိခဲ့ပါတယ် ....
01 မှာ 21 / 2015 / 5: 15 ညနေ
ပြည်သူ့ porn နှင့်အတူဒါအစွဲအလမ်းများမှာ!
ဒီနေ့စာသင်ချိန်တစ်ရက်မှာဆရာမှာလုပ်စရာတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုချင်တာကိုလုပ်ဖို့မိနစ် ၃၀ ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာအိမ်စာရှိလို့ကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တယ်။
ဤအတောအတွင်း, (2 မီတာကွာဆရာများထံမှစာသားခဲ့ကြသည်သောသူ) ရှေ့တန်းနှစ်ခုယောက်ျားတွေဟာဖုန်းပေါ်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ငါမကြောင့်အစပျိုးခြင်း, အဲဒါကိုတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်သောကွောငျ့, အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့က helplessly စွဲသောကြောင့်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကြည့်ကြည့် (ငါ meh လိုပဲ) တောင်မှဘာမှမခံစားရဘူး။
ဖုန်းနှင့်အတူကောင်လေးသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သူကရည်းစားရှိပြီးပေမယ့်သူက porn သို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူကဦးနှောက်မြူ (သူခြုံငုံတစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောကျောင်းသားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကစမ်းသပ်မှုအပေါ်အနိမ့်တန်းရရှိသွားတဲ့) ၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မလည်းမကြာခဏစမ်းသပ်မှုကျရှုံးဖို့အသုံးပြုပေမယ့် NoFap ပြီးနောက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်, မသာသောကွောငျ့ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး၏ပြတ်သားဖြစ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းငါပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးကိုသင်ယူနှင့်ဖြစ်အများကြီးပိုလှုံ့ဆျောမှုရကြပြီ။ ငါထွက်အလုပ်လုပ်, ဆငျခွငျနှင့်သည်အခြားနေ့ကအအေးမိရေချိုးခန်းများ (ကျနော်ကျောင်းမှအိမ်ပြန်ပင်ပန်းလာလျှင်ပင်; ကငါ့နောက်စွမ်းအင်အပြည့်အဝခံစားရစေသည်) ကိုယ့်ခြုံငုံ, ငါ့တိုးတက်မှုနှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
02 မှာ 04 / 2015 / 7: 33 ညနေ
ငါ pmo ၏နက်ရှိုင်းသောကာလ၌ဤရေးသားခဲ့သည်။ ငါဘာကြောင့်ဒီကိုဝန်ခံရတာလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအကြီးမားဆုံးနောင်တရတယ်။
ငါ့ကောင်မလေးကငါ့ထက်အသက်ကြီးတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူရတဲ့အခါသူမအားနည်းချက်ရှိ၏ သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ သူမကကျွန်မကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ ငါသူမ၏အဖြစ်အများကြီးကိုချစ်၏။
ထိုအခါဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတယ်။ ဆက်ဆံရေးက၎င်း၏မေတ္တာရှင်သင်တန်းကနေ skewed ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လည်း attachment ခဲ့ကြသည်။ ငါပိုပိုပြီး porn စောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ ငါ crazier နှင့် crazier ပစ္စည်းပစ္စယသို့ရတယ်။ သူ့ကိုငါနှင့်အတူဤအရာတို့ကိုအခြို့ကိုကြိုးစားမှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်သူမငါ့ကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသူ့ကိုငါနှင့်အတူတည်းခိုအဖြစ်သူတွေကိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုပြုကြကုန်အံ့။ ငါဖြစ်ကောင်းငါ 16 အခါတစ်နှစ်နေ့တိုင်းသူမကိုနှင့်အတူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၆ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းသောလူများကဲ့သို့လိင်မဆက်ဆံသင့်ပါ။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ထ messed ငါကသူမတက် messed ငါသိ၏။ ငါ့ကောင်မလေးကတခြားမိန်းကလေးတွေဆီကပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုငါမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
အဲဒါဟာငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကုန်သွားပြီးငါ့ရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုယနေ့တိုင်အောင်ငါမတွေ့။ ငါသိတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ကောင်းကင်တမန်အမွေးနှစ်ကောင်နှင့်အတူလည်ဆွဲတိုင်းအချိန်မရွေးယူဆောင်လာသည်။ ငွေတစ်ပြား၊ ဒါဟာသူမအတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုပါ။
ငါဘာကြောင့်လဲသိ ငါရယ် ဒီမှာ။ ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတာပါ ရန်ပွဲ။
ယခုသင်သည်အဘယ်သူနည်း အဘယ်ကြောင့်သင် NoFap လုပ်နေကြတာလဲ
04 မှာ 21 / 2015 / 3: 15 နံနက်
ယခုမူကားငါမိန်းကလေးများထင်သောအရာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းနှင့် ၁၃ လက်မယောက်ျားအသားများရှိယောက်ျားလေးများကိုလှပသောမိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ဘယ်တော့မျှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ဟုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ NoFap က PORN သည်အမှန်တရားမဟုတ်ကြောင်းကိုနားလည်စေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်အချိန်တိုင်းမြင့်မားနေပြီးကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်သည်မြင့်မြတ်သောမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသောခံစားမှုမြင့်မားသည်။ Porn သည်အခြားသူများ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်မည်သို့မြင်သည်ကိုမှားယွင်းစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မထိုက်တန်သည့်“ beta-male” ဖြစ်သည်ဟုသင့်အားယုံကြည်စေသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝအထူးသဖြင့်အခြားသူများကိုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကနေတရားစီရင်အခမဲ့အသက်ရှင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ NoFap မိတ်ဆွေများကနေပါ !!!
08 မှာ 12 / 2015 / 6: 11 ညနေ
ငါ asexual ခဲ့သည်ထင်။
ထိုအခါ nofap ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်များတစ်လျှောက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်နှင့်ချီသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လှပမှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိမှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ နှစ်ပတ်ကြာရင် nofap မှာဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော့်ဝန်းကျင်မှာရုတ်တရက်ပိုပူလာတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ငါ့ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ fap အတွက်မထိုက်တန်ဘူး။ မိန်းမစစ်စစ်များသည်ညစ်ညမ်းကြယ်များကိုစုစည်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစစ်အမှန်လူတွေကိုမရေတွက်ပါနဲ့။ သူတို့ကမင်းကိုပြန်ပြီးချစ်နိုင်မှာပါ။
05 မှာ 29 / 2016 / 12: 08 နံနက်
ကျွန်ုပ်၏ယောက္ခမသည်ပဉ္စမတန်း (ယူအက်စ်အေ၊ ၉ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အထိ) အတွက်ကျောင်းဆရာဖြစ်သည်။ သူမရဲ့အတန်းထဲမှာယောက်ျားလေးငါးယောက်ရှိတယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူမတစ်ခုခုကိုစာသားမပြောခင်အထိသူမရင်ဘတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ သူတို့ကငါးတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်က "ငါသူမ D 'ကိုဆုပ်ကိုင်ချင်တယ်" လိုပြောတတ်ဖို့မပြောသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင်အတန်းမှမိန်းကလေးများသည်သူမစိတ်ဆိုးလာသည်။ အချို့ယောက်ျားလေးများကမိန်းကလေးများအားအချို့သောဆိုဒ်များကိုသွားကြည့်ရန်ပြောပြီးကောင်လေးနှင့်အတူနေရန်လိုအပ်သည်ကိုသိမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆိုဒ်များမှာ porn ဆိုဒ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ယောက္ခမကသူတို့သိချင်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးသူမမြင်လိုက်သည့်အတိုင်းလိုက်ပစ်ချင်သည်။ ဒါဟာငါခန့်မှန်းတော်တော်လေးညစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီယောက်ျားလေးတွေဟာပျက်ကွက်နေတယ်၊ ​​ဘာကိုမှအာရုံမစိုက်နိုင်ကြဘူး။
ကျွန်ုပ်၏မြက်ခင်းပြင်၌ကျွန်ုပ်ကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့နေနိုင်သည်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းသူတို့ကသဘာဝကျပါတယ်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စကိုတားမြစ်ခြင်းအတွက် (တစ်ခါတစ်ရံပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းပြချက်များအကြောင်း) တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောဥပမာနှင့်နီးကပ်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စဉ်း စား၍ မရနိုင်ပါ။ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ပြီးထောင်ချောက်မခံရဘူးဆိုရင်ဒီယောက်ျားလေးတွေဘ ၀ မှာဘယ်လိုနေမလဲ။
ဤလမ်းကိုဖောက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဘောင်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တာ ၀ န်ရှိသည်။
UPDATE: ဒီ post ပေါ်ကမှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေပူခလုတ်ကိုပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ ငါကငါခေါ်မည်ဤကပ်ရောဂါ၏ကြီးမားသောအတင်းအဓမ္မသားကောင်များဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ မိဘများသည်အိမ်တွင်ကြီးကြပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်တတ်နိုင်သမျှလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကလေးများသည်ပြင်ပကမ္ဘာသို့ထွက်ခွာသွားသည့်အခါသူတို့ဘေးတွင်စားပွဲပေါ်၌လက်များကိုညစ်ညမ်းသောကလေးများနှင့်တွေ့ကြုံနိုင်သည်။
ကျွန်မရဲ့ယောက္ခမမှာအတန်းထဲမှာကလေး ၂၂ ယောက်ရှိပြီး ၇ ယောက်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ပြproblemနာရှိနေတယ်ဆိုတာပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသူမရဲ့အတန်းရဲ့ ၁/၄ ကျော်ပါ။ ဒါရူးနေတယ်
10 မှာ 12 / 2016 / 6: 57 ညနေ
PMO သင်၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု retards
နောက်ပြီးမင်း ဦး နှောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး PMOing ဟာလူမှုရေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်လို့ထင်တယ်။ MOing ဆိုတာလည်းမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလူမှုရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ စိတ်သည်လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်သည့်၎င်း၏ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးကိုစွန့်ပစ်သည်၊ သို့သော်မည်သူမျှမပါ ၀ င်သောအပြုအမူတစ်ခုပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုဖြုန်းတီးစေသည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကခင်ဗျားရဲ့ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်အားလုံးကိုတကယ့်ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူး။
ပြီးတော့မင်းအစစ်အမှန်လူတွေ၊ မင်းနဲ့တကယ့်ဆက်ဆံရေးတွေရှိနိုင်မယ့်သူတွေရှိရင်မင်းရဲ့စိတ်ကဒီဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုနာတာရှည် PMOing နဲ့ MOing ကပြန်ပေးဆွဲခံရလို့ပါ။ PMO နှင့် MO တို့သည်လူတို့၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထက်ပိုမိုထိရောက်သော၊ အဓိပ္ပာယ်ပြည့် ၀ သောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောအရာများဖြစ်သည်ဟုစိတ်တွင်တွေ့မြင်သောကြောင့်၊ ဒါကြောင့်မို့လူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာငါကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပြီးသူမကိုဖက်ထားလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်အနားယူကာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုစီမံနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိစရာမလိုဘဲစကားလက်ဆုံပြောရန်မျှော်လင့်ထားပါကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် fucked ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုအတွက်အစစ်အမှန်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အလားအလာမရှိသည်ကိုသိမြင် ကျွန်ုပ် PMO နှင့် MO နတ်ဆိုးများကိုတိုက်နေသည့် အချိန်မှစ၍ ပိုကောင်းလာခဲ့သည်၊ သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာအလွဲသုံးစားမှုများကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်။ ငါလိုအပ်သမျှသည်ကျွန်ုပ်၏ ၂၄/၇ ယောက်နှင့်အတူနေရန်မိန်းကလေး / မိန်းကလေးများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အားသူတို့၏လက်များကိုပတ်ထားရန်၊ သူတို့၏မျက်နှာကိုတို့ထိရန်နှင့်သူတို့၏အိပ်ရာပေါ်တွင်အိပ်ရန်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့မလိုတော့သလိုတောင်မလိုချင်ဘူး၊ ငါ့အထီးကျန်မှုကိုဖျက်ဆီးချင်တယ်။ ငါသည်လည်းကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုပြောဆိုမှုများရှိသည်ချင်ကြဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကိုကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ငါမဖိတ်ခေါ်ပါ၊ ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်၊ ငါလေးစားပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့အတူတူနေချင်တယ်၊ ငါ့ဆီကပုလ်အပြုအမူတွေကိုမမျှော်လင့်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပုလ်အမူအကျင့်တွေကငါ့ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ Animation ရဲ့
၁၅ မှ ၂၅ အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမှတ်တရများ - ဒီမှာဘာကြောင့်လဲ